dopamine နှင့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု၊ ဆုလာဘ်နှင့်အရင်းအမြစ်များကိုပြန်လည်ပေါင်းစည်းရန် (၂၀၁၂) - Your Brain On Porn
ဘတ်ဂျက်အပေါ်အလိုဆန္ဒချပြီး: dopamine နှင့်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်, ပွနျလညျသငျ့ဆုလာဘ်နှင့်အရင်းအမြစ်များ (2012)
တပ်ဦး။ Integrated ။ neuroscience, 20 ဇူလိုင်လ 2012 ။ | နှစ်: 10.3389 / fnint.2012.00049
ဂျက်ဖ်အေ Beeler1*, Cristianne RM ဖရေဇီယာ2 နှင့် Xiaoxi Zhuang1,2
1Neurobiology ဌာန, ချီကာဂိုတက္ကသိုလ်, ချီကာဂို, IL, အမေရိကန်နိုင်ငံ
2Neurobiology, ချီကာဂိုတက္ကသိုလ်, ချီကာဂို, IL, အမေရိကန်နိုင်ငံအပေါ်ကော်မတီ
သက်သေအထောက်အထားများစုဆောင်းမကြာခဏ homeostatic ပြည်နယ်မှတုံ့ပြန်မှုအတွက်ဆုလာဘ်ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်စွမ်းအင်ဟန်ချက်အတွက် dopamine များအတွက်အလားအလာအခန်းကဏ္ဍ, မီးမောင်းထိုးပြ, ဇီဝဖြစ်စဉ်အချက်ပြမှုများနှင့်အတူ dopamine function ကို၏ပေါင်းစည်းမှုဖော်ပြသည်။ ယင်း၏တိကျသောအခန်းကဏ္ဍအငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်နေဆဲသော်လည်း, dopamine ၏အကျိုးကိုရှုထောင့်အဝလွန်ခြင်းအပါအဝင်စိတ်ခွန်အားနိုးမမှန်၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကြီးစိုးလျက်ရှိသည်။ ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသည့်အယူအဆတှငျကြှနျုပျတို့အပြုအမူအတွက် dopamine ၏အဓိကအခန်းကဏ္ဍဆုလာဘ်နှင့်စွမ်းအင်အတွက်၎င်း၏အဓိကအခန်းကဏ္ဍကနေဆင်းသက်လာလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေအတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကိုနှင့်တကွ, ရေပန်းစားသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စွမ်းအင်အခြေအနေများအမူအကျင့်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်မှု modulate မှကြောင်းကိုအစားအကြံပြု ဟန်ချက်။ Dopamine ရှည်လျား dopamine ကနေတဆင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ကြောင်း psychostimulants အားဖြင့်ပုံအော, လှုပ်ရှားမှု modulate မှလူသိများခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကြောင်း dopamine အကြံပြုခြင်းအချို့စုံစမ်းစစ်ဆေးစုံတွဲများစွမ်းအင်စညျးမဉျြးစညျးကမျးမိမိဆန္ဒအလျောက်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်မှ sensing ကြောင်းတစ်တွေနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခြင်းဘုံလမ်းကြောင်းအဖြစ်ဝတ်ပြုမည်အကြောင်းနှင့်ပိုမိုမကြာသေးမီက, မိမိဆန္ဒအလျောက်လှုပ်ရှားမှုပြောင်းလဲပစ်အတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကိုသို့အခြေတည်စစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရှိခဲ့သည်။ Generation Activities ထိန်းညှိတဲ့ရှေးရိုးစွဲ-Expendables ဝင်ရိုးနှင့်အရာဆုလာဘ်တန်ဖိုးကို၏ဖြန့်ဖြူး biases ဖို့ဒီဂရီထိန်းညှိထားတဲ့စူးစမ်း-exploit ပုဆိန်: ကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးဟာပြည်တွင်းရေးနှင့်ပြင်ပကမ္ဘာမှ input ကိုအကြား interposed, dopamine အပြုအမူနှစ်ခုပုဆိန်တလျှောက်တွင်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ် modulates ကြောင်းအကြံပြု လှုပ်ရှားမှု။ ဒီအမြင်အတွက်, dopamine အရသာရှိတဲ့အစားအစာစားသုံးမှုမြှင့်တင်ရန်ပါဘူးတိုးတက်လာခဲ့သည်။ အဲဒီအစား dopamine စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်နှင့်တူးဖော်ရေးစဉ် dopamine စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ခေါင်းပုံဖြတ်နှာလျော့နည်းသွားအားပေးအားမြှောက်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ အနိမ့် dopaminergic လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအဝလွန်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောအစားအစာရှာခြင်းနှင့်တွေ့ရှိချက်ထဲမှာ dopamine များ၏ကောင်းမွန်စွာထူထောင်အခန်းကဏ္ဍ: ဒီအယူအဆတစ်ခုသိသာဝိရောဓိတစ်ခု mechanistic အနက်ကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယူဆချက်အဝလွန်ခြင်းအတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကိုတခုတခုအပေါ်မှာအခြားရွေးချယ်စရာရှုထောင့်ပေးမယ့်ရိပ်မိစွမ်းအင်လိုငွေပြမှုအဖြစ် "ဆုလာဘ်ချို့တဲ့ယူဆချက်" reinterprets ။ ကျနော်တို့ dopamine, စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်လွယ်ကူချောမွေ့အသုံးပြုပုံအဝလွန်ခြင်းဆန့်ကျင်အကာအကွယ်ဖြစ်သင့်ကြောင်းတင်ပြသည်။ ကျနော်တို့အဝလွန်ခြင်း၏အမြင့်ဆုံးပျံ့နှံ့အတူအနောက်တိုင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း၌ဤအကာအကွယ်ယန္တရားများ၏သရုပ်ပျက်ကွက်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်တားဆီးပိတ်ပင်ကြောင်းအထိုင်များလူနေမှု၏အကျိုးဆက်အဖြစ်ပေါ်ပေါက်အကြံပြုအပ်ပါသည်။
dopamine ၏အဓိက function ကိုဆုလာဘ်ပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်ကြောင်းအဆိုပါစိတ်ကူးနေရာအနှံ့ပါပဲ။ အငြင်းပွားစရာများတိကျစွာကျော်ကြွယ်ဝပြည့်စုံပေမယ့် ဘယ်လို dopamine (မလျှင်ပင်ဆုချ-သို့မဟုတ်အထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါကင်နွန်နှင့် Palmiter, 2003; ပညာရှိ 2004; Berridge, 2007; goto et al ။ , 2007; Robbins နှင့်ရောဘတ်, 2007; Salamone, 2007; Schultz, 2007; Redgrave et al ။ , 2008), ဥပမာ (မကြာခဏတကယ်တော့အဖြစ်ကုသခံရဖို့အဖြစ် dopamine function ကိုတစ်ခုစည်းရုံးရေးဥပစာဒါနေရာအနှံ့သည်အတိုင်း, အထူးသဖြင့်အဝလွန်အတွင်းအသံထွက်တဲ့လမ်းကြောင်းသစ်ဆုချခြင်းနှင့် midbrain dopamine ထိရောက်စွာဆုလာဘ်နှင့်အတူပမာဏမှာတူညီသည်အဘယ်မှာရှိစာပေအစာကျွေး Kenny, 2010; Volkow et al ။ , 2010; Avena နှင့် Bocarsly, 2011; Berthoud et al ။ , 2011) ။ သို့သော်သုတေသနပြုဆယ်စုနှစ်များစွာတာတော့သေချာတယ်အကောင်းဆုံး dopamine အချက်ပြတိုးမြှင့်ကြောင်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ psychostimulant ဂုဏ်သတ္တိများအားဖြင့်ရုပ်ပြ, လှုပ်ရှားမှုပြောင်းလဲပစ်အတွက် dopamine အဘို့ရှင်းလင်းစွာအခန်းကဏ္ဍမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြသည်။ Salamone နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကရှည်လျားတန်ဖိုးရှိသောလှုံ့ဆော်မှုလိုက်စားနဲ့ဆက်စပ်တုံ့ပြန်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုကျော်လွှားရန်တိရစ္ဆာန်ခွင့်ပြု, dopamine ၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်အားထုတ်မှုလှုပ်ရှားမှုထိန်းညှိရန်ဖြစ်ပါသည်ကြောင်းစောဒကတက်ခဲ့ကြ (Salamone, 2009, 2011) ။ မကြာသေးမီကမိမိဆန္ဒအလျောက်လှုပ်ရှားမှုထိန်းညှိကြောင်းအလားအလာမျိုးဗီဇရှာဖွေစူးစမ်းမျိုးရိုးဗီဇလေ့လာမှုများ (dopamine မိမိဆန္ဒအလျောက်လှုပ်ရှားမှုထိန်းချုပ်အတွက် "နောက်ဆုံးဘုံလမ်းကြောင်း" ကိုကိုယ်စားပြုစေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်းအချို့သောစာရေးဆရာများနှင့်အတူ dopamine related ဗီဇမှထောက်ပြခဲ့ကြLeamy et al ။ , 2008; ကယ်လီ et al ။ , 2010; Knab နှင့် Lightfoot, 2010; သင်္ချာ et al ။ , 2010; ပန်းကုံး et al ။ , 2011) ။ dopamine စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်အတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍကြောင်းအကြံပြုဆွဲဆောင်မှုများနှင့်သိသိသာသာဒေတာနေသော်လည်း dopamine ၏ဤအမြင်ကိုအကျိုးကိုရှုထောင့်ကလွှမ်းမိုးနေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, dopamine နဲ့အဝလွန်ဆွေးနွေးခြင်းအများအပြားစာတမ်းများ (ထဲမှာGeiger et al ။ , 2009; Berridge et al ။ , 2010; Kenny, 2010; Berthoud et al ။ , 2011), စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်အတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္evenကိုပင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိပါ, စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်စွမ်းအင်ချိန်ခွင်လျှာညီမျှခြင်း၏ထက်ဝက်ကိုကိုယ်စားပြုသောအချက်ကိုရှိနေသော်လည်း။
ယနေ့အထိမျှဆွဲဆောင်မှုမူဘောင် dopamine ဆိုးကျိုးများနှင့် putative function ကို, ထိုကျယ်ပြန့်အသိအမှတ်ပြုဆုလာဘ် function ကိုများနှင့်လှုပ်ရှားမှုနှင့်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်အပေါ် dopamine ၏လျော့နည်းထင်ရှားတဲ့ပေမယ့်အညီအမျှသရုပ်ဖော်သက်ရောက်မှုဤနှစ်ခုကွဲပြား domains များပေါင်းစည်းခဲ့သည်။ လှုပ်ရှားမှုအပေါ်သိသာ dopaminergic သက်ရောက်မှုမကြာခဏဆုလာဘ်ဖြစ်စဉ်များ၏အကျိုးဆက်အဖြစ်ရှုမြင်သုံးသပ်ကြရသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ကြွက်များတွင်မိမိဆန္ဒအလျောက်ဘီးပြေးပြောင်းလဲပစ်အတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကိုဘီးပြေးနဲ့ဆက်စပ်အကျိုးကိုနှင့်အားဖြည့်များ၏ dopaminergic မော်ဂျူ (ထဲကပေါ်ထွန်းဖို့အဆိုပြုပြီးပါပြီပန်းကုံး et al ။ , 2011; ရောဘတ် et al ။ , 2011; ယန် et al ။ , 2012) ။ ဤတွင်ကျနော်တို့ dopamine ၏အဓိက function ကိုစွမ်းအင်အသုံးစရိတ်ထိန်းညှိရန်ဖြစ်ပါသည်ထားတဲ့အတွက်အယူအဆဖွံ့ဖြိုး။ အထူးသကျနော်တို့ dopamine ရေပန်းစားသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စွမ်းအင်စီးပွားရေးအမူအကျင့်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်ကိုက်ညီပြည်တွင်းရေးနှင့်ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်အကြားတစ်ဦးကို interface အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြောင်းငြင်းခုန်။ ကျနော်တို့ dopamine နှစ်ခုအတိုင်းအတာတစ်လျှောက်တွင်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအဆိုပြု: (1) ကိုဘယ်လို အလွန် သုံးစွဲစွမ်းအင် (ထိန်းသိမ်းရန်-အသုံးဝင်ရိုး) နှင့် (2) ဘယ်လိုမှ ဖြန့်ဝေ သို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောလှုပ်ရှားမှုများတွင်စွမ်းအင်ကိုခွဲဝေချထားပေးပါ။ ဤအမြင်တွင် dopamine ၏ဆုလာဘ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်သက်ရောက်မှုများသည်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်ကိုအဆင်ပြေစွာစီမံခန့်ခွဲရန်နှင့်ဒုတိယနေရာတွင်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Salamone ၏ကြော့ရှင်းသောအလုပ်နှင့်အားစိုက်ထုတ်မှုအားထိန်းညှိရာ၌ dopamine ၏အခန်းကဏ္ and နှင့် dopamine ၏ဆုကိုအယူအဆအားသူ၏မဆုတ်မနစ်ဝေဖန်မှုများအပေါ်အထူးအာရုံစိုက်ထားပါသည်။ ပစ္စုပ္ပန်အယူအဆ dopamine သပ္ပါယ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုနှင့်လက်ရှိအပြုအမူ - နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်စွမ်းအင်ရရှိမှုမှလေးစားမှုအပေါ်ကြိုတင်ဆုလာဘ်သမိုင်း၏သက်ရောက်မှုနှစ် ဦး စလုံးထိန်းညှိထားတဲ့အတွက်ကျယ်ပြန့်ယူဆချက်သို့သူ၏အခြေခံထိုးထွင်းသိမြင်မှုတစ်ခုပေါင်းစည်းမှုနှင့်တိုးချဲ့ကိုကိုယ်စားပြုတယ်။
တစ်ဦးအလိုက် Semi-သဘာဝဆက်စပ်အတွက် Dopamine စုံစမ်းစစ်ဆေး
အောက်တွင်ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးအမူအကျင့်များ dopaminergic မော်ဂျူအတွက်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုသို့ဆွဲသောငါတို့ဓာတ်ခွဲခန်းကနေဆုလာဘ်တွေရဲ့အရေးပိုမကြာသေးမီလေ့လာမှုများပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်အတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုမီးမောင်းထိုးပြပါလိမ့်မယ်။ နောက်ပိုင်းတွင်ကျနော်တို့သက်ဆိုင်ရာစာပေပြန်လည်သုံးသပ်, dopamine function ကိုတစ်ဦးစွမ်းအင်ဘောဂဗေဒအယူအဆအသေးစိတ်ရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့အဝလွန်ခြင်းအတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးအတွက်ပစ္စုပ္ပန်အယူအဆတစ်ခုထည့်သွင်းစဉ်းစားအတူကောက်ချက်ချပါလိမ့်မယ်။ အခြားသူများအထဲကထောက်ပြထားပြီးအဖြစ်ဟူသောဝေါဟာရကို "ဆုလာဘ်" ကံမကောင်း (စာပေအတွင်းစော်ကားနေသည်Cannon, 2004; Salamone et al ။ , 2005; Salamone, 2006; ယဉ် et al ။ , 2008) ။ အထူးသဖြင့်, နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို, (ထိုကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုကို like နှိပ်ကဲ့သို့) ကိုထိခိုက်တုံ့ပြန်မှု, အားဖြည့် (ထပ်ခါတလဲလဲခံရရှေ့အပြုအမူများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးပွားစေတဲ့ရလဒ်ကို), တစ်ဦးအစာစားချင်စိတ်လိုအပ်ချက် (ဥပမာတွေ့ဆုံရန်ကြောင်းလှုံ့ဆော်မှုအပါအဝင်ကွဲပြားခြားနားသောအယူအဆ, ဖမ်းဆီးဖို့ imprecisely နှင့်မပြတ်မကိုအသုံးပြုသည် ဒါကြောင့်အပေါ်အစားအစာ) နှင့်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုပထမဦးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာတော့ကျနော်တို့ (mis-) တစ်ဦးထီးဝေါဟာရကိုအတူတကွစိမ်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအတွေးအခေါ်များအကြားအမျိုးမျိုးသောသီအိုရီကွဲပြားခြားနားမှုနေသော်လည်း, စာပေ pervade ကြောင်း themes များဖမ်းဆီးဖို့အဖြစ်ကစာပေအတွက်အလွဲသုံးစားဖြစ်ပါတယ်အများကြီးကဲ့သို့ကျယ်ပြန့်ဟူသောဝေါဟာရကိုသုံးပါ။ ငါတို့သည်ငါတို့၏အယူအဆဖွံ့ဖြိုးအဖြစ်နောက်ပိုင်းတွင်ကျနော်တို့ကိုပိုပြီးတိကျစွာဆုလာဘ်သတ်မှတ်ပါလိမ့်မယ်။
ဓာတ်လှေကား Dopamine: လျော့နည်းသွားစုံတွဲတံ့သောအကျိုးကိုထောက်
dopamine ၏ဆုလာဘ်အမြင်များအတွက်သွယ်ဝိုက်သောစိတ်ကူးဖြစ်ပါသည် dopamine အပြုအမူအပေါ်ဆုလာဘ်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်။ Empire, ဒီတိုးပွားလာ dopamine dopamine လျော့ကျလာနေချိန်တွင်တိရစ္ဆာန်ဆုလာဘ်ဆီသို့ပြုပြင်အားထုတ်တိုးပွါးကြောင်းပြသသောမရေမတွက်နိုင်သောလေ့လာမှုများကထောက်ခံနေသည်အားထုတ်မှုမှေးမှိန် (ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု et al ။ , 1978; တေလာနှင့် Robbins, 1986; Aberman et al ။ , 1998; Peciña et al ။ , 2003; ကယ်လီ, 2004; Cagniard et al ။ , 2006a,b; Phillips က et al ။ , 2007; Salamone, 2009, 2011) ။ ဤရွေ့ကားတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာဒေတာဆုလာဘ် related လှုံ့ဆော်မှုနဲ့ဆက်စပ်ဖြစ်စေအကျိုးကိုသူ့ဟာသူသို့မဟုတ်မက်လုံးပေး dopamine အားဖြင့်မြှင့်တင်ရန်ဖြစ်ကြောင်းကောက်ချက်ချဖို့အများကြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးဦးဆောင်ခဲ့ကြသည်။ တနည်းအားအကျိုးကိုရယူနှင့်ဆက်စပ်ကုန်ကျစရိတ်ဖို့ sensitivity ကိုတိုးမြှင့် dopamine အားဖြင့်လျော့စေခြင်းငှါ (Phillips က et al ။ , 2007; Salamone, 2011) ။ မကြာခဏဒီလေ့လာမှုတွေကနေပေါ်မူတည်ပြီးဘာ, ၎င်းတို့၏စာရေးဆရာများ adamantly (ဥပမာ Salamone) ထိုသို့သောအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူဆန့်ကျင်လျှင်ပင်, dopamine dopamine ပေးသောဆုလာဘ်အပြုအမူရွေးချယ်မှု biases ဖို့ဒီဂရီတိုးပွါးကြောင်းထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်ဆုလာဘ်နှင့်အပြုအမူအကြားဆက်ဆံရေး modulates သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဥပမာအားဖြင့်, Salamone dopamine မှာအားလုံးဆုလာဘ် modulate တော်မမူကြောင်းစောဒကတက်; သူက dopamine စက်ရုံများသည်ကိုပြသ ကြိုးစားအားထုတ်မှု။ ထို့ကြောင့်တိရစ္ဆာန်များ၏ဆုလာဘ်သည်တုန့်ပြန်မှုကုန်ကျစရိတ်ကြောင့်အဟန့်အတားဖြစ်စေသည်။ များစွာသောသူတို့ကဆုလာဘ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအမူအကျင့်ရွေးချယ်မှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်ပေးသည်ဟုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကြသော်လည်းဆုလာဘ်ကိုသူ့ဟာသူပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်ဘဲ၊
တိုးမြှင့် dopamine တစ် Semi-သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုလိုက်လျောညီထွေပွောငျးလဲဘယ်လိုဆန်းစစ်ရန်, ကျနော်တို့ (အကျိုးသည်လှုံ့ဆျောမှုအတွက်အကြိမ်ကြိမ်ရှုလေ့လာတိုးမှိန်ဖျော့အမူအကျင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှုမယ်လို့ရှိမရှိသို့မဟုတ်မမေးမလျှောက်Beeler et al ။ , 2010) ။ ဒီစမ်းသပ်ဖို့ကျနော်တို့ကြွက်အော်ပရေတာတပ်ဆင်ထားတဲ့အိမ်မှာလှောင်အိမ်ထဲမှာနေထိုင်ခဲ့နှင့်၎င်းတို့၏အစားအစာရှိသမျှတို့, 24 /7နှိပ်လီဗာမှတဆင့်ရယူခဲ့ပါတယ်ရှိရာအိမ်လှောင်အိမ်ပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အဘယ်သူမျှမအစားအစာကန့်သတ်အသုံးချခံခဲ့ရခြင်းနှင့်ကြွက်လုံးဝသူတို့ရဲ့စားသုံးမှု Self-ထိန်းညှိရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ နှစ်ဦးကခရိုနီတဦးတည်းကအမြဲတမ်း "စျေးပေါ" ကြီးနှင့်အခြားအစဉ်အမြဲ "စျေးကြီး" ကြီးနှင့်စမ်းသပ်မှု (FR20-FR40) တိုးတက်အဖြစ်အဆတိုးကြောင်းပုံနှိပျ၏ကြီးမြတ်သောနံပါတ်လိုအပ်သည်နေစဉ်တောင့် (FR200) အတွက်ပုံနှိပျတဲ့အနိမ့်နံပါတ်လိုအပ်သည်ရှိရာအစားအစာလြှော့ ။ ဘယ်လီဗာသို့သော်လည်းကျပန်းတိုင်း 20-40 မိ switched ခဲ့သော။ ထို့ကြောင့်အသုံးအားထုတ်မှုများအတွက်အကြီးမားဆုံးသောပြန်လာရရှိရန်, ထိုကြွက် On-going ဆုလာဘ်တုံ့ပြန်ချက်ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်အခါအားလျော်စွာနိမ့်ဆုံးကုန်ကျစရိတ်လုံးလေးများရရှိရန်ခရိုနီအကူးအပြောင်းခဲ့ရတယ်။ extracellular dopamine နဲ့တိုးမြှင့်လုပ်သူများ dopamine ပစ်ခတ်ရန်လှုပ်ရှားမှု (သို့ခြီးမွှောကျပြီ (DATkd) ကြွက်ကျနော်တို့ (ထိန်းချုပ်မှု) ရိုင်း-type အမျိုးအစား C57BL /6စမ်းသပ်ပြီးနှင့် dopamine Transporter ခေါက်-DownZhuang et al ။ , 2001; Cagniard et al ။ , 2006b).
ကျနော်တို့မွငျ့မား dopamine (DATkd) နှင့်အတူကြွက်တွေ dopamine ဆုလာဘ်ဆီသို့အားထုတ်မှုပိုကောင်းစေပါတယ်ပြကြိုတင်စာပေနှင့်ကိုက်ညီ, ရိုင်း-type အမျိုးအစားကြွက်တွေထက်မြင့်သောကုန်ကျစရိတ်ကိုလီဗာအပေါ်သိသိသာသာပိုပြီးဖိအားပေးကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်ဤဥပမာအားဖြင့်အတွင်းတိုးမြှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုဆုလာဘ်မတိုးခဲ့ဘူး, မျှသာအားထုတ်မှု၏ပမာဏကြောင့်ဆုလာဘ်ဆီသို့အသုံး။ ယင်းအချက်အလက်များ၏အသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူတို့ရဲ့အနီးအနား switch ကိုအပြုအမူမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့တူညီခဲ့သည်အဖြစ် DATkd မှအာရုံမခံစားနိုင်သောသို့မဟုတ်ခရိုနီများအကြား switches များ၏သတိမထားမိကြဘူးကြောင်းပြသပါ။ အဆိုပါခြားနားချက်ရိုင်း-type အမျိုးအစားကြွက်ဦးစားကတော့စျေးပေါလီဗာကိုဖိနေစဉ် DATkd ကြွက်တွေအညီအမျှနှစ်ဦးစလုံးခရိုနီသူတို့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုဖြန့်ဝေဘယ်မှာလီဗာ switches များအကြားတည်ငြိမ်ကာလအတွင်းမှာထလေ၏။ ပိုကောင်း DATkd အပြုအမူအခြေခံမဟာဗျူဟာနားလည်စေရန်, ကျနော်တို့ ((TD) မော်ဒယ်သင်ယူခြင်းဟာယာယီခြားနားချက်ဖို့ဒေတာကို fitSutton နှင့် Barto, 1998) ။ အသစ်သောဆုလာဘ်သတင်းအချက်အလက်သို့ထည့်သွင်း (နှင့်ထံမှ်လည်းကြွေတတ်) သောအချိန်တွင်နှုန်းထိန်းချုပ်တဲ့သင်ယူမှုနှုန်းလီဗာကိုနှိပ်၏တန်ဖိုးနှင့်တန်ဖိုးကိုပေးသောဖို့ဒီဂရီကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ "ပြောင်းပြန်အပူချိန်": ဤအမော်ဒယ်များခုနှစ်တွင်နှစ်ခု key ကို parameters များကိုရှိပါတယ် အမူအကျင့်ရွေးချယ်မှု biases ။ လျှော့ဘက်လိုက်မှုထက် သာ. ကြီးမြတ်သောရှာဖွေရေး (ခွင့်ပြုနေချိန်တွင်အဆုံးစွန်သော parameter သည်မကြာခဏသင်ယူမှု၏ခေါင်းပုံဖြတ်တစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောဘက်လိုက်မှုရလဒ်အဖြစ်စူးစမ်း-exploit parameter သည်ချေါဖြစ်ပါတယ်Sutton နှင့် Barto, 1998; ဒေါ် et al ။ , 2006) ။ ကျနော်တို့ switches များပတ်ပတ်လည်ကြည့်ရှုလေ့လာကြသည်သင်ယူမှုကွဲပြားခြားနားမှုများမရှိခြင်းနှင့်ကိုက်ညီ, နှုန်းကိုလေ့လာသင်ယူဖို့လေးစားမှုနှင့်အတူ genotype အကြားအဘယ်သူမျှမကွဲပြားမှုရှိကြ၏တွေ့ရှိခဲ့ပေမယ့် DATkd တစ်ဦးလျှော့ပြောင်းပြန်အပူချိန်ပြပါ။ သည်တစ်ဦးရှိခဲ့ပါသည် လျှော့ချ ဆုလာဘ်သမိုင်းနှင့်သူတို့၏အမူအကျင့်ရွေးချယ်မှုအကြားနားချင်းဆက်မှီ။ ပထမတစ်ချက်မှာဒီဝိရောဓိပုံပေါ်ပါတယ်။ အဆိုပါ DATkd ကြွက်စာပေဆယ်စုနှစ်များစွာနှင့်အတူတသမတ်တည်းဆုလာဘ်, ရရှိရန်ခက်ခဲအလုပ်လုပ်ခဲ့ပေမယ့်, ဒီဟာသူတို့ရဲ့အမူအကျင့်အပေါ်တစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောထိန်းချုပ်မှုအားထုတ်ဆုလာဘ်၏အကျိုးဆက်အဖြစ်ပေါ်ထွန်းဖို့မထင်ထားဘူး။ ဆန့်ကျင်တွင်, ဆုလာဘ်များနှင့်အမူအကျင့်ရွေးချယ်မှုအကြားမှိန်ဖျော့နားချင်းဆက်မှီရှိ၏။ အဲဒီအစားသူတို့ရဲ့အပြုအမူပေါ်မှာ သာ. ကြီးဘက်လိုက်မှုအကျိုးသက်ရောက်ရှိခြင်းဆုလာဘ်ထက်, ကရှိခဲ့ နည်းသော။ dopamine တိုးလာဤအခြေအနေများအောက်တွင်, လျော့နည်းသွားထက်တိုးမြှင့်ခေါင်းပုံဖြတ်ခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာ Salamone et al ။ (Salamone et al ။ , 2001) နျူကလိယနှင့်အတူကြွက် dopamine တွေပျက်စီးမှုတွေဟာ accumbens ကြောင်းသရုပ်ပြပါပြီ နောက်ထပ် လျှော့ချ dopamine အောက်မှာပြောင်းလဲခြင်းအကြံပြုခြင်း, တုံ့ပြန်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုကျော်လွှားရန်မကြာသေးမီဆုလာဘ်အပေါ်မှီခိုတစ်ခု တိုးမြှင့် ဆုလာဘ်သမိုင်းနှင့်ရှေးခယျြမှုအကြားနားချင်းဆက်မှီ။
ဓာတ်လှေကား Dopamine: တိုးမြှင့်စားသုံးမှုမရှိပါကကြိုးပမ်းမှု၏ Modulation
dopamine ၏အကျိုးကိုရှုထောင့်မှာရှိတဲ့သွယ်ဝိုက်နောက်ထပ်စိတ်ကူးထားတဲ့ဆုလာဘ်ဘက်လိုက်မှုအပြုအမူဖို့ဒီဂရီတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် dopamine, တိရစ္ဆာန်ဆုလာဘ်လိုက်မည်သည့်ရန်ဒီဂရီစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဖြစ်ပါသည်; ကြောင်းကိုဖြစ်ပါသည် dopamine "လို" mediates: ပိုပြီး dopamine, ပိုလိုပိုလိုက်စား (Robinson နဲ့ Berridge, 1993; Leyton et al ။ , 2002; Volkow et al ။ , 2002; Tindell et al ။ , 2005; Berridge et al ။ , 2010) ။ dopamine ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုစွဲများစွာကိုသီအိုရီမှဗဟိုဖြစ်ပါတယ် (Robinson နဲ့ Berridge, 2001; Koob နှင့် Volkow, 2010dopamine နှင့်အဝလွန်ခြင်း၏) နှင့်ပိုမိုမကြာသေးမီက, သီအိုရီ (Volkow နှင့်ပညာရှိ, 2005; Finlayson et al ။ , 2007; Zheng et al ။ , 2009; Berridge et al ။ , 2010; Volkow et al ။ , 2010; Avena နှင့် Bocarsly, 2011; Berthoud et al ။ , 2011) ။ အခြားမကြာသေးမီ homecage လေ့လာမှုမှာ (Beeler et al ။ , 2012a), ကြှနျုပျတို့သညျဤသပ္ပါယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် "လို" တိုးမြှင့်ကွဲပြားခြားနားတဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအခြေအနေများအောက်တွင်ဖြစ်စေမမေးတယ်။ ဒီစမ်းသပ်ဖို့ကျနော်တို့ကိုတဖန်သူတို့ကရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအစားအစာကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ, တဖန်, နှိပ်လီဗာအားဖြင့်ခပ်သိမ်းသောသူတို့၏အစာကိုရရှိခဲ့သည်ဘယ်မှာအော်ပရေတာခရိုနီတပ်ဆင်ထားအိမ်မှာလှောင်အိမ်ထဲမှာကြွက်သျော။ ဒီပါရာဒိုင်းများတွင်တစ်ဦးတည်းသာလီဗာအစားအစာလြှော့နှင့်လီဗာများအတွက်အလုပ်ဝယ်လိုအား FR3 မှာစတင်နှင့် FR5 မှာအဆုံးသတ်သည်စမ်းသပ်ချက်တစ်လျှောက်လုံးတိုင်း 250 ရက်ပေါင်းအဆတိုး။ ဒီအရာကြွက်လုံးလေးများ၏လက်ရှိကုန်ကျစရိတ်၎င်းတို့၏နေ့စဉ်စားသုံးမှုညှိဖို့ဒီဂရီကိုပြသတဲ့ဝယ်လိုအားမျဉ်းကွေးဖြစ်ထွန်း။ ကြောင်း dopamine ဆုလာဘ်၏တန်ဖိုးကိုတိုးပွါးနှင့် / သို့မဟုတ်ကုန်ကျ sensitivity ကိုလျော့ကျယူဆရင်ကျနော်တို့မွငျ့မား dopamine နှင့်အတူ DATkd ကြွက်တွေကဒီပါရာဒိုင်းအတွက်ပိုကောင်းတဲ့အခွအေနှင့်သားရိုင်း-type အမျိုးအစားကြွက်တွေထက်ပိုမိုမြင့်မားကုန်ကျစရိတ်မှာပိုပြီးနှိပ်ဆက်ပြီးမယ်လို့မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်။ အဆိုပါ DATkd လုပ်ခဲ့တယ်ပြပွဲအနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားကုန်ကျစရိတ်မှာနှိပ်တိုးလာပေမဲ့လည်းအလုံးစုံသူတို့စမ်းသပ်မှုအတွင်းခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ပြောင်းလဲမှုများသို့မဟုတ်ရှင်သန်မှုအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခြင်းမရှိခြားနားချက်အတူရိုင်း-type အမျိုးအစားကြွက်အဖြစ်မြင့်တက်ကုန်ကျစရိတ်မှတူညီညှိနှိုင်းမှုပြ။ ထို့အပွငျအခါဒေတာ (ဝယ်လိုအား elasticity တစ်မော်ဒယ်မှ fit ခဲ့ကြသည်Hursh နှင့် Silberberg, 2008), elasticity အတွက် genotype အကြားခြားနားခြင်းအလျှင်းမရှိခဲ့သညျ။ ဒီတော့ဘယ်မှာအားထုတ်မှုနဲ့ဆုလာဘ်အပေါ် dopamine အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသွားခဲ့တာလဲ
တစ်ဦးချင်းစီမုန့်ညက်အချက်အလက်များ၏ analysis (ဆိုလိုသည်မှာ, အရေအတွက်, ကြာချိန်နှင့်အစားအစာများ၏အရွယ်အစား) က DATkd ကြွက်ကိုစားကြ၏ဘယ်မှာကြီးမားတဲ့ genotype အကျိုးသက်ရောက်မှုဆိုတာကိုပြသ ပိုကြီးတဲ့ ဒါပေမဲ့ ပိုနည်း အစားအစာများ။ dopamine သိသိသာသာသူတို့ရဲ့ခြုံငုံစားသုံးမှုမပြောင်းခဲ့ဘူးပေမယ့်အကြောင်း, ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့မုန့်ညက်ပုံစံများ-The သူတို့ယာယီသူတို့ရဲ့အားထုတ်မှုနဲ့စားသုံးမှုဖြန့်ဝေသောလမ်းကိုပြောင်းလဲခဲ့တယျ။ ဤရွေ့ကား data တွေကိုမြင့်တက်ကုန်ကျစရိတ်ရိုင်း-type နှင့် DATkd နှစ်ဦးစလုံးအတွက် homeostatic ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးယန္တယားစေ့စပ်ကြောင်းရှားပါးမှုတစ်ခွအေနအေသွေးဆောင်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ရှားပါးမှု၏ဤအတုအခွအေနေရှောင်ရှားရန်, ကျနော်တို့မြင့်တက်ကုန်ကျစရိတ်2နေဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီနောက်ဆက်တွဲတောင့်တိုး၏ကုန်ကျစရိတ်အဖြစ်နှိပ်အသီးအသီးမုန့်ညက်သို့မဟုတ်ရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းအတွင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့အိမ်ကလှောင်အိမ်တိုးတက်သောအချိုးလေ့လာမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အားလုံးကိုနှိပ်, အချိုးအတိုင်းပြန်ညှိတဲ့ 30 မိရပ်နားခြင်းပြီးနောက်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကြွက်ခြုံငုံစားသုံးမှုစှနျ့မပါဘဲပိုကြီးပိုအကုန်အကျအစားအစာများ, ဒါမှမဟုတ်သေးငယ်, စျေးသက်သက်သာသာနှင့်ထို့ထက် ပို. မကြာခဏအစားအစာများဆီသို့သူတို့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှု shift နိုင်ဘူး။ ဒီလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့အုပ်စုများနှင့်ခြုံငုံစားသုံးမှုအတွက်မပါသိသိသာသာကွာခြားချက်အကြားမျှသိသာထင်ရှားသောခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ပြောင်းလဲမှုများကိုလေ့လာသည်။ သို့သော် DATkd ကြွက်, တဖန်, ပိုကြီးတဲ့အစားအစာများစားမြင့်မားသော dopamine သည့်တိုးတက်သောအချိုးပါရာဒိုင်းအတွက် breakpoints အားတိုးပွါးကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းယခင်စာပေနှင့်ကိုက်ညီတစ်ဦးချင်းစီအကြိမ်ကြိမ်အတွင်းပိုမိုမြင့်မားသော breakpoints အား, ပြ။ သို့သော်အထက်တွင်အဖြစ်, ဒီ သာ. ကြီးမြတ်အားထုတ်မှုအလုံးစုံစားသုံးမှုကွဲပြားခြားနားသောမဟုတျကွောငျးထိုကဲ့သို့သောလျော့နည်းမကြာခဏအစားအစာများအားဖြင့်ထေခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုတွေကနေကျနော်တို့နှစ်ဦးကိုအရေးကြီးသောကောက်ချက်ဆွဲပါ။ ပထမဦးစွာစားရသောအစာလိုက်စားအပေါ် dopamine ၏သက်ရောက်မှုအနည်းဆုံးဒီပါရာဒိုင်းအတွက် homeostatic ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ဆက်လက်တည်ရှိဖို့ပေါ်လာပါသည်။ ဒုတိယအချက်မှာ dopamine ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသဘောအရအစားအစာ၏ "လို" သို့မဟုတ်ခြုံငုံလိုက်စားပြောင်းလဲပစ်ရန်ပေါ်လာပေမယ့်ရည်မှန်းချက်လိုက်စား၏ယာယီဒေသခံဖြစ်စဉ်များအတွင်းအသုံးအားထုတ်မှု modulate ပုံမထားဘူး။ တိုတောင်းခုနှစ်, dopamine စွမ်းအင်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုပင်ဖြစ်သည်လမ်းကိုထိခိုက်ကြပုံ ဖြန့်ဝေ ထက်စာစားချင်စိတ်ကိုလှုံ့ဆျောမှုတိုးမြှင့် se နှုန်း.
ကျနော်တို့ dopamine ဝယ်လိုအားထက်ပို inelastic စေပါဘူးတိုးပွားလာကြောင်းဤနေရာတွင်စောငျ့ရှောကျ; ကြောင်းဖြစ်ပါသည်, ခြုံငုံ hyperdopaminergic ကြွက်ရိုင်း-type အမျိုးအစားမှအလားတူတုန့်ပြန်မှုကုန်ကျစရိတ်သူတို့ရဲ့စားသုံးမှုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်။ မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဤ dopamine ဂီယာကိုနှိုးဆွသို့မဟုတ်ရှိလာရုံကြောင်းအကြံပြုများစွာလေ့လာမှုများမှဆန့်ကျင်ပုံပေါ်ဥပမာ (အသီးသီးအားထုတ်မှု-based တုံ့ပြန်မြှင့်တင်ရန်သို့မဟုတ်နုတ်မနိုင်, Aberman နှင့် Salamone, 1999; Bardgett et al ။ , 2009; Salamone et al ။ , 2009b), ယူဆရကုန်ကျစရိတ်တုံ့ပြန် elasticity လွှမ်းမိုး။ သို့သျောကြှနျုပျတို့သူတို့အားလေ့လာမှုများအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာအတူတူဖြစ်ရပ်ဆန်းကိုစောင့်ရှောက်မည်: dopamine တစ်စဉ်အတွင်း သာ. ကြီးမြတ်အားထုတ်မှုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ် ရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်း အစားအစာကိုလိုက်စား၏, ပိုကြီးတဲ့အစားအစာများနှင့်အဆင့်မြင့် breakpoints အားဖွငျ့ကဒီမှာသက်သေ။ သို့သျောကြှနျုပျတို့သလည်းငါတို့ elasticity ပြောင်းလဲမှုများအခြမယ်ရာမှကြိုးစားအားထုတ်မှုတွင်ဤကွဲပြားခြားနားမှု, သေချာပေါက်ခြုံငုံစားသုံးမှုနှင့်ဝယ်လိုအားအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုဖြင့်လိုက်ပါသွားကြသည်မဟုတ်မဟုတ်-ကြောင်းတတ်နိုင်သမျှအဘယျသို့ session တစ်ခုအခြေစိုက်လေ့လာမှုများကိုစောင့်ရှောက်မည်။ သူများသည်ပိုကြီးတဲ့အစားအစာများကုန်ကျစရိတ်မြင့်တက်တုံ့ပြန်တစ်ခုခြုံငုံအလားတူ elasticity မှုနည်းပါးလာအစားအစာများအားဖြင့်လျော်ကြေးငွေနေကြသည်။ ဒီလေ့လာမှုတွေအတွက် inelasticity ထုတ်လုပ်ရန်မမြင့်မားသော dopamine dopamine, အားထုတ်မှုနဲ့ဝယ်လိုအားအကြားဆက်ဆံရေးဟာအရင်ကတန်ဖိုးထားထက်ပိုမိုရှုပ်ထွေးစေခြင်းငှါသာ, ထို dopamine elasticity modulates ဘယ်တော့မှမဆိုလိုပါ။
ဓာတ်လှေကား Dopamine: Hedonic Value ကို Enhance သို့မဟုတ်အပြုအမူရွေးချယ်မှု Shift မဟုတ်
အဆိုပါ dopamine နဲ့ဆုလာဘ်တွေးဆချက်တွင်သွယ်ဝိုက်နောက်ထပ်အိုင်ဒီယာကြောင်း dopamine လိုက်ရှာတိုးပွါး ပိုမိုနှစ်သက် အစားအစာများ (Salamone et al ။ , 1991; ဝမ်းကွဲ et al ။ , 1993; Salamone, 1994; Lowe နဲ့ Levine, 2005; Zheng et al ။ , 2009; Berridge et al ။ , 2010; Kenny, 2010; Volkow et al ။ , 2010ကောင်းသောအရသာအရာ:), ဘယ်မှာ "ဦးစားပေး" ပုံမှန်အားဖြင့်အရေးပါတယ်လို့, hedonically ကြိုးအစားအစာများအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ တစ်ဦးမက်လုံးပေး-salience ရှုထောင့်ကနေ, dopamine နှစ်သက်သောအစားအစာများနှင့်ဆက်စပ် သာ. မက်လုံးပေးပိုကောင်းစေပါတယ်။ , ဒီဆန့်ကျင် Salamone et al ငြင်းခုံ။ (Salamone et al ။ , 1991; Salamone, 1994) အခမဲ့-နို့တိုက်ကျွေးရေးအခြေအနေများအောက်တွင်, preference ကို dopamine function ကိုပြောင်းလဲမှုများအားဖြင့်ပြောင်းလဲမပေးကြောင်းသရုပ်ပြပြီ ကြောင်း dopamine မက်လုံးပေးတိုးမြှင့်သို့မဟုတ်လုံးဝမ (သို့မဟုတ်အနိမ့်) အလုပ်လိုအပ်ချက်ပစ္စုပ္ပန်အခါအစားအသောက် preference ကိုပြောင်းလဲပစ်မထားဘူးသည်။ မိမိအလေ့လာမှုများအတွက်, သို့သော်, တစ်ဦးပိုမိုနှစ်သက်အစားအစာရယူသည့်အခါ is တုန့်ပြန်မှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်ဆက်စပ်ပါက dopamine သည်တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်အားထုတ်မှုကိုတိုးစေပြီးတိရစ္ဆာန်၏ပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်စေသည် အမူအကျင့်ရွေးချယ်မှု တစ်ဦးနှစ်သက်သောအစားအသောက်ပိုမိုလိုက်စား၏မျက်နှာသာအတွက် (Salamone, 1994; Salamone et al ။ , 1994), အရာကိုမကြာခဏ dopamine ဆက်စပ်ကုန်ကျစရိတ်မှ sensitivity ကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်တစ်ဦး Naturalist forage ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပိုမိုနှစ်သက်အစားအစာလိုက်စားတိုးမြှင့်မယ်လို့တိုးပွားလာကြောင်းအကြံပြုခေါ်ဆောင်သွားသည်။
(လေ့လာမှုတစ်ခုမကြာသေးမီစီးရီးအတွက်Beeler et al ။ , 2012b), ကျနော်တို့စားသုံးမှု, preference ကိုများနှင့်အားဖြည့်ရန်, အာဟာရနှင့် hedonic, ဒါမှမဟုတ်အရသာတန်ဖိုးကို၏ဆွေမျိုးအလှူငွေဆန်းစစ်နှင့်ဤပြောင်းလဲပစ်စေခြင်းငှါဘယ်လောက်မြင့်မားသော dopamine မေးတယ်။ တစ်ဦးတည်းအရသာတန်ဖိုးစမ်းသပ်ဖို့ကျနော်တို့ကယ်လိုရီ-အခမဲ့ဘီလီယံဒေါ်လာလျော့ချမယ် (sucralose နှင့် saccharin နှစ်ဦးစလုံး) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ တစ်ဦးတည်းအာဟာရတန်ဖိုးအဘို့စမ်းသပ်ဖို့ကျနော်တို့ချိုမြိန်အရသာရှိတဲ့ Receptor ကင်းမဲ့နှင့် (ချိုမြိန်အရသာမ trpm5 ခေါက်ထွက်ကြွက်ကိုအသုံးပြုDamak et al ။ , 2006; က de Araujo et al ။ , 2008), ကျွန်တော်တို့ကိုအစာအာဟာရတစ်ဦးတည်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအကဲဖြတ်နိုင်ရန်ခွင့်ပြု။ နှစ်ဦးစလုံးကိစ္စများတွင်ကျနော်တို့မွငျ့မား dopamine များ၏သက်ရောက်မှုကိုစမ်းသပ်ဖို့ dopamine သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတစ်ခေါက်-Down နှင့်မပါဘဲကြွက်တွေကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါစာပေကိုပိုမို hedonically ကြိုးအစားအစာများကိုတိုးမြှင့် dopamine အားဖြင့်ပိုပြီးထိခိုက်နစ်နာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အကြံပြုထားသည်။ ဒီကနေကျနော်တို့မွငျ့မား dopamine ဦးစားအာဟာရဆုလာဘ်ကျော် hedonic အကျိုးသက်ရောက်စေမယ်လို့ကြိုတင်ခန့်မှန်းပေလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံး hedonic နှင့်အာဟာရတန်ဖိုးပိုမိုစားသုံးမှုနှင့် preference ကိုသွေးဆောင်သော်လည်းအကြောင်း, ပထမဦးဆုံးအတွေ့, hedonic တန်ဖိုးကိုအာဟာရတန်ဖိုးအနေဖြင့် dissociated ဆင်းရဲသားစစ်ကူဖြစ်ခဲ့သည်။ အဲဒီကြွက်ကယ်လိုရီ-အခမဲ့ချိုမြိန်ဖြေရှင်းချက်လောင်နဲ့ရေကပိုနှစ်သက်မယ်, ဒါပေမဲ့ကယ်လိုရီတန်ဖိုးကို၏မရှိခြင်းအတွက်ချိုမြိန်အရသာနှစ်ခုပုလင်းအေးစက်စမ်းသပ်မှုအတွက်အေးစက်သွေးဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိခဲ့ပေ။ ထို့အပြင်တစ်ဦးတိုးတက်သောအချိုးစမ်းသပ်မှုအတွက် sucrose သွေးဆောင်အစည်းအဝေးများဖြတ်ပြီးတုံ့ပြန်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ တကယ်တော့ဒါခေါ် "သုဉ်း mimicry" (ပုံနဲ့တူတဲ့, အစည်းအဝေးများဖြတ်ပြီးငြင်းဆန်ကြောင်းတုံ့ပြန်အများကြီးလျော့နည်းသွေးဆောင်မတူဘဲကယ်လိုရီ-အခမဲ့ဘီလီယံဒေါ်လာလျော့ချမယ်,ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု et al ။ , 1978) ။ Berridge နှင့်ရော်ဘင်ဆင် (Robinson နဲ့ Berridge, 1993) နာမည်ကြီး "လို" နှင့်စွဲ "ကဲ့သို့" မပါဘဲမူးယစ်ဆေးဝါးများအတွက် "လို" ဖွံ့ဖြိုးဘယ်မှာစွဲလမ်းထဲမှာ "အကြိုက်" အကြားတစ်ဦး dissociation ဖော်ပြထားပြီ ကြောင်း compulsive မူးယစ်ဆေးရှာကားမောင်းသည့်မက်လုံးပေးယင်း၏ hedonic အကျိုးဆက်များ၏လွတ်လပ်သောဖြစ်ပါသည်, ဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားဒေတာ (ဘယ်မှာတဦးတည်းအနာဂတျတှငျကြောင်းအတွေ့အကြုံ compulsive ရှာမောင်းထုတ်ကြောင်းဝန်ထမ်းတွေရဲ့မက်လုံးပေးဖွံ့ဖြိုးဆဲမပါဘဲတစ်ဦးအပြုသဘော hedonic တုံ့ပြန်မှုကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ် "လို" မပါဘဲ "ကဲ့သို့" ၏တစ်ဦးဖြည့်စွတ် dissociation အကြံပြုBeeler et al ။ , 2012b).
မျှော်လင့်ဆန့်ကျင်, မြင့်မားသော dopamine သိသိသာသာတစ်ဦးတည်း hedonic, ချိုမြိန်အရသာများအတွက်လှုံ့ဆျောမှုကိုပြောင်းလဲပေမယ့်ပေါင်းစပ်အရသာ / အာဟာရအဖြစ်တစ်ဦးတည်းအစာအာဟာရအဘို့အတိုးအားထုတ်မှုကိုပြု၏ခဲ့ပါဘူး။ dopamine လွှတ်ပေးရန်၏ယခင်လေ့လာမှုများ ((postingestive သက်ရောက်မှုမရှိဘဲအရသာလှုံ့ဆော်ဖို့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ပါးစပ် cannulation သုံးပြီးဥပမာ) dopamine တစ်ဦးတည်းကိုမြည်းစမ်းဖို့တုန့်ပြန်လွတ်မြောက်လာကြောင်းပြသကြမာကု et al ။ , 1991; Hajnal et al ။ , 2004; Norgren et al ။ , 2006; က de Araujo et al ။ , 2008; ဝီ et al ။ , 2011) ။ ဒီတော့အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အစာအာဟာရ၏မရှိခြင်းအတွက်ချိုမြိန်အရသာမှလျှော့အားဖြည့်သောငှာစောင့်ရှောက်ခဲ့တာလဲ ကျနော်တို့ (သူတို့ကိုခွဲခြားမှုများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီ၏ဆွေမျိုးအာဟာရတန်ဖိုးတွေအကြောင်းသင်ယူဖို့အခွင့်အလမ်းများကိုတစ်ခုဖော်ထုတ်အရသာနှင့်အတူအသီးအသီးတို့သည်ကြွက် sucrose နှင့် saccharin နှစ်ဦးစလုံးလုံးလေးများမှ Pre-ထိတွေ့ခဲ့ကြသည့်အတွက်တစ်ဦး voltammetry လေ့လာမှုကောက်ယူBeeler et al ။ , 2012b) ။ ကျနော်တို့ထို့နောက် sucrose သို့မဟုတ် saccharin ဖြစ်စေတုံ့ပြန် dopamine လွှတ်ပေးရန် evoked တိုင်းတာ။ အဆိုပါကြွက်အညီအမျှလုံးလေးများနှစ်ခုစလုံးအမျိုးအစားများကိုပြန်ထုတ်နှင့်လောင်သဖြင့်, ကျနော်တို့ dopamine လွှတ်ပေးရန် evoked တိုင်းတာသည့်အခါသို့သော်, saccharin ဖို့တုံ့ပြန်မှုကိုအလွန် sucrose နှိုင်းယှဉ် attenuated ခဲ့သည်။ တစ်နောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှုမှာတော့ evoked dopamine ၏တူညီသောကို attenuation (sucrose သို့မဟုတ် saccharin ဖြစ်စေခန့်မှန်းတွေကိုတုန့်ပြန်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်McCutcheon et al ။ , 2012) ။ တစ်ဦးတည်းကယ်လိုရီ-အခမဲ့အရသာရန် attenuation dopamine တုံ့ပြန်မှုကြွက်များနှင့်အတူအမူအကျင့်လေ့လာမှုများအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာတွေလျှော့တုံ့ပြန်ခြင်းနှင့်သိသာသုဉ်း mimicry နှင့်ကိုက်ညီသည်။ တိုတောင်းသောခုနှစ်တွင်ဤလေ့လာမှုများပြုလုပ်အားထုတ်မှုတိုးပွါးနှင့်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ် (ဆိုလိုသည်မှာ, စားသောက်မှုပုံစံများ) ၏ဖြန့်ဖြူးပွောငျးလဲသော်လည်း, dopamine တိုးမြှင့်ကြောင်းပြသ, အာဟာရ၏မရှိခြင်းအတွက် hedonically တန်ဖိုးထားအစားအစာစားသုံးမှုသို့မဟုတ် preference ကိုပြောင်းလဲပစ်မတိုးပွားဘူး "လို" ။
(ထိုသမားရိုးကျတွင်တစ်ပြိုင်တည်းရွေးချယ်မှုလုပ်ငန်းတာဝန်များတွင်Salamone, 1994) တိရစ္ဆာန်လီဗာ-နှိပ်တစ်ဦးပိုမိုနှစ်သက်စားစရာဘို့သို့မဟုတ်တစ်နာရီအစည်းအဝေးများကာလအတွင်းလွတ်လပ်စွာရရှိနိုင်စံ Chow အစာစားခြင်းအကြားရွေးချယ်မှုရှိပါတယ်။ Salamone နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များက dopamine ကိုလောင်စံ Chow မှပိုမိုနှစ်သက်အစားအစာများ၏အချိုးအစားတိုးပွါးကြောင်းပြသကြပြီ သည်, dopamine ပိုမိုအကုန်အကျပေမယ့်ဦးစားပေး option ကိုမျက်နှာသာမှအမူအကျင့်ရွေးချယ်မှုပြောင်းရွှေ့ရသည်။ dopamine နှစ်သက်သောအစားအစာများကိုလိုက်ရှာကိုတိုးပွါးစေသောဤအလုပ်ကနေအတော်များများအခြ။ ကျနော်တို့ကြွက်ကယ်လိုရီ-အခမဲ့ဘီလီယံဒေါ်လာလျော့ချမယ်သို့မဟုတ် sucrose ဖြစ်စေ, တစ်ဦးဦးစားပေးအစားအစာ (PR2) အတွက်စာနယ်ဇင်းလီဗာ, ဒါမှမဟုတ်လွတ်လပ်စွာရရှိနိုင် Chow ကိုစားနိုင်တဲ့ homecage တိုးတက်သောအချိုးတွင်တစ်ပြိုင်တည်းရွေးချယ်မှုစမ်းသပ်မှုဖွငျ့ဤအခြစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ , ဒီ Semi-သဘာဝပါရာဒိုင်းခုနှစ်တွင် dopamine တိုးမြှင့်အထက်ဝယ်လိုအားနှင့် homecage တိုးတက်သောအချိုးလေ့လာမှုများအစီရင်ခံအဖြစ်, သာ. ကြီးမြတ်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ် (ဆိုလိုသည်မှာနှိပ်, သာ. ကြီးမြတ် breakpoints အား၏တော့ဘူးအကြိမ်ကြိမ်, ဒါပေမယ့်နည်းပါးလာခြုံငုံအကြိမ်ကြိမ်) ဆီသို့ကြိုးစားအားထုတ်မှု၏ဖြန့်ဖြူးအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားလေသည်။ စံ Chow မှပိုမိုနှစ်သက်အစားအစာများ၏အချိုးအစားတွင်ထင်ဟပ်အဖြစ် သာ. ကြီးမြတ်အားထုတ်မှုရှိနေသော်လည်း, သို့သော်, မြင့်မားသော dopamine သူတို့၏အမူအကျင့်ရွေးချယ်မှုပြောင်းလဲပစ်ခဲ့ပါဘူး။ Salamone ယင်းတွင်တစ်ပြိုင်တည်းရွေးချယ်မှုပါရာဒိုင်းအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့နှစ်သက်အစားအစာဆီသို့တိုးမြှင်အားထုတ်မှုတုံ့ပြန်မှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်မပြောင်းလဲ preference ကို (ရန် sensitivity ကိုမြားတှငျပွောငျးလဲထင်ဟပ်ကြောင်းစောဒကတက်ထားပါတယ်Salamone et al ။ , 2007) ။ ဤရွေ့ကား data တွေကိုအတည်ပြုခြင်းနှင့်တစ်ပြိုင်တည်းရွေးချယ်မှုပါရာဒိုင်းအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာတိုးမြှင့အားထုတ်မှုဆုလာဘ်လိုက်စားကိုတိုးပွါးစေသောအခြတိမ်အားဖြင့်ဤဆင်ခြေကိုတိုးချဲ့ပါ။ တစ်ဦး Semi-သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ကျနော်တို့ Salamone အားဖြင့်ကြည့်ရှုလေ့လာတဲ့နှစ်သက်သောအစားအသောက်ဆီသို့တူမြှင့်တင်ရန်ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုစောင့်ရှောက်မည်, သို့သော်ဤစားသုံးမှု, preference ကိုသို့မဟုတ်အပြုအမူရွေးချယ်မှု shift ပေမယ့်ကွဲပြားခြားနားတဲ့စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်မဟာဗျူဟာများထင်ဟပ်မထားဘူး။
ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် dopamine နဲ့ဆုလာဘ်၏လက်ရှိသီအိုရီ၏စည်းကမ်းချက်များ၌တစ်ခုတည်းကိုသာရှင်းပြဖို့ခက်သည်။ (1) အစားအပြုအမူအပေါ်ဆုလာဘ်တွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်, ငါတို့ dopamine သာ. ကြီးမြတ်တူးဖော်ရေး induces အကြံပြုခြင်း, ဆုလာဘ်သမိုင်းနှင့်ရှေးခယျြမှုအကြားတစ်ဦးလျှော့နားချင်းဆက်မှီစောငျ့ရှောကျ; ကြောင်းဖြစ်ပါသည်, နည်းသော ဆုလာဘ်တို့ကရှေးခယျြမှု၏ဘက်လိုက်မှု။ (2) ယငျးအစား Over-စီးနင်း homeostatic ယန္တရားများနှင့်ပိုလျှံစားသုံးမှုမြှင့်တင်ခြင်းထက်, dopamine အဆိုပါပြောင်းလဲ, homeostatic စည်းမျဉ်းများအသတ်အတွင်းအလုပ်လုပ်ပုံ ကြိုးစားအားထုတ်မှု၏ဖြန့်ဝေ အစားအစာလိုက်စားအတွက်ခြုံငုံစားသုံးမှုပြောင်းလဲနေတဲ့မပါဘဲ; "။ လိုက" dopamine သာ. ကြီးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောသန်စွမ်း induces သော်လည်းမ, (3) ဖြစ်ပါသည်အဲဒီအစားထက်ပိုပြီးဦးစားပေးအစားအစာများဖို့ကြိုးစားအားထုတ်မှု, စားသုံးမှုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာရွေးချယ်မှုပြောင်းလဲ, dopamine နောက်တဖန်စားသုံးမှု, preference ကိုသို့မဟုတ်ရှေးခယျြမှုပြောင်းလဲစရာမလိုဘဲအားမာန်တိုးပွါး; သည်သိသာသောအစာစားချင်စိတ်ရည်မှန်းချက်များ shift ပါဘူးကုန်ကျစရိတ်မှ sensitivity ကိုလျော့နည်းသွားသည်။ အဆိုပါလေ့လာမှုများဘုံဆောင်ပုဒ်အားလုံးကိုအမှတ်ဖော်ပြထား: သည်ဟု dopamine အပြုအမူစွမ်းအင်ပြောင်းလဲပစ်နေသည် သုံးငှေ။ အားထုတ်မှုနဲ့အသုံးစရိတ်၏ Dopamine မော်ဂျူကတညျး / သို့မဟုတ်လိုက်စားရည်မှန်းချက်များနှင့်ဆက်စပ်တုံ့ပြန်မှု-ကုန်ကျစရိတ် (အောင်မြင်သောကြောင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုတစ်ခု reallocation အဖြစ် non-သတ်သတ်မှတ်မှတ်မတည် "General လှုပ်ရှားမှု" တစ်ခုခုအဖြစ်ရှုမြင်ထားသည်Salamone et al ။ , 2007) ။ စက္ကူ၏ကျန်ရှိသောတှငျကြှနျုပျတို့ dopamine ၏ရှုထောင့်ပြောင်းလဲပစ်အကျိုးကိုနှင့်လှုပ်ရှားမှုပေါင်းစပ်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ကျနော်တို့အနေနဲ့အခြားရွေးချယ်စရာရှုထောင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါလိမ့်မယ်: ဆုလာဘ်အပေါ် dopamine ၏ဆိုးကျိုးများမရရှိနိုင်အရင်းအမြစ်များကိုနှင့်အတူစွမ်းအင်အသုံးစရိတ်ပွနျလညျသငျ့မွ၏ပိုကြီးတဲ့အခြေအနေတွင်အတွင်းအကျိုးကို system ကိုအားမရ, အမူအကျင့်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်ထိန်းညှိ၏ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အလယ်တန်းပေါ်ထွန်း။
စွမ်းအင်နှင့်၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်အတွက်နောက်ဆုံးနိဂုံးဖြစ်သည်။ သက်ရှိလိုအပ်ချက်များနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးသည်အပူထိန်းညှိခြင်းမှသည်မျိုးပွားခြင်းအထိစွမ်းအင်ကိုယ်တိုင်ဝယ်ယူခြင်းအထိစွမ်းအင်လိုအပ်သည်။ လုံလောက်သောထောက်ပံ့မှုကိုထိန်းသိမ်းထားခြင်းသည်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာချုပ်ညွှန်ကြားချက်တစ်ခုဟုယူဆနိုင်သည်။ စွမ်းအင်ကိုလိုက်စားခြင်း၊ စားသုံးခြင်းနှင့်သိုလှောင်ခြင်းကိုထိန်းညှိသောစနစ်များကိုအာရုံစိုက်ထားသော်လည်း၎င်းင်း၏အသုံးစရိတ်များကိုထိန်းချုပ်သောစနစ်များကိုမူအာရုံစူးစိုက်မှုနည်းပါးသည်။ သို့သော်စွမ်းအင်မျှတမှုကိုဆုံးဖြတ်ရာတွင်“ တန်းတူမိတ်ဖက်” ဖြစ်ခြင်း မှလွဲ၍ ကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်စွမ်းအင်ကိုအကောင်းဆုံးဖြန့်ဖြူးခြင်းသည်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာတိရိစ္ဆာန်တစ်ခုသည်၎င်း၏ရရှိနိုင်သည့်စွမ်းအင်နှင့်ပြုလုပ်သောအရာသည်စွမ်းအင်ရယူခြင်းကဲ့သို့အရေးကြီးသည်။ မည်သို့စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်ကိုအကောင်းဆုံးသုံးစွဲရမည်ဆိုသည်မှာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအပေါ်မူတည်သည်။ စွမ်းအင်ကြွယ်ဝသောပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ရှာဖွေရေး၊ စွမ်းအင်ညံ့ဖျင်းသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ကြိုတင်အတွေ့အကြုံအသုံးချခြင်းနှင့်စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းခြင်း - လူတစ် ဦး ၏စွမ်းအင်အရင်းအနှီးကိုအများဆုံးရရှိခြင်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဤအမြင်တွင်ထိရောက်သောစွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုက (၁) ကျွန်ုပ်မည်မျှစွမ်းအင်သုံးစွဲရမည်နှင့် (၂) မည်မျှဂရုတစိုက်သို့မဟုတ် ရွေးချယ်၍ ၎င်းကိုဖြန့်ကျက်ရန်လိုအပ်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ပါ ၀ င်သည်။ ဤမေးခွန်းနှစ်ခုကိုစွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှု၏ ၀ င်ရိုးနှစ်ရပ်အဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့သတ်မှတ်ကြသည် 1).
ပုံ 1 ။ dopamine အားဖြင့်အမူအကျင့်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်၏စည်းမျဉ်းနှစ်ခုပုဆိန်အယူအဆရေးရာမူဘောင်။ အလျားလိုက်ပုဆိန်များသည်လုပ်ဆောင်မှုနိမ့် (ထိန်းသိမ်းခြင်း) မှမြင့်မားသောလုပ်ဆောင်မှု (အသုံးစရိတ်) အထိစဉ်ဆက်မပြတ်တစ်လျှောက်ယေဘူယျလုပ်ဆောင်မှုအဆင့်များကိုထိန်းညှိရာ၌ dopamine ၏အခန်းကဏ္representsကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ဒေါင်လိုက်ပုဆိန်များသည်သတင်းအချက်အလက်ဆုချသည့်အပြုအမူဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ၏ဖြန့်ဝေမှုကိုဘက်လိုက်စေသည့်အတိုင်းအတာကိုတွက်ချက်ခြင်းဖြင့်ရှာဖွေတူးဖော်ခြင်းနှင့်ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်းအကြားမျှတမှုကိုထိန်းညှိရာ၌ dopamine ၏အခန်းကဏ္representကိုကိုယ်စားပြုသည်။ Dopamine function ကိုဤနေရာတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သတ်မှတ်ထားပြီး၊ ပစ်မှတ်ဒေသများတွင် dopamine ၏ extracellular ပါဝင်မှု၊ dopamine အာရုံခံဆဲလ်များ၏လုပ်ဆောင်မှု (ဆိုလိုသည်မှာ tonic လှုပ်ရှားမှုနှုန်း၊ ပေါက်ကွဲခြင်း၏ပျံ့နှံ့မှု) သာမကကွဲပြားခြားနားသော receptors များ၏ဖော်ပြချက်ကဲ့သို့သော parameters များကိုပါ ၀ င်နိုင်သည်။ D1 နှင့် D2), doapmine Transporter (DAT) ၏ဖော်ပြချက်နှင့်လှုပ်ရှားမှုအပြင်အလွယ်တကူလွှတ်နိုင်သောရေကန်နှင့်အမှုန်အရွယ်အစားအပါအ ၀ င် vesicular လွှတ်ခြင်း၏ဂုဏ်သတ္တိများ။ ယေဘူယျအယူအဆသဘောတရားအရကျွန်ုပ်တို့သည် dopamine လုပ်ဆောင်ချက်ကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်း (လက်ဝဲဘက်အောက်ပိုင်း quadrant) နှင့်တိုးမြှင့်သုံးစွဲခြင်းနှင့်ရှာဖွေခြင်း (dopamine function) ကိုတိုးချဲ့ခြင်းနှင့်ပိုမိုကြီးမားသောမြှားကထင်ဟပ်သည်။ သို့သော် dopamine စနစ်၏ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်များပြောင်းလဲခြင်း (ဥပမာအားဖြင့် D1 နှင့် D2 receptors ၏ပြောင်းပြန်ဖော်ပြချက်) ကိုဤဆက်နွယ်မှုကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ အခြား quadrants များမှဖော်ပြသောအပြုအမူများ၊ ဆုလာဘ်သတင်းအချက်အလက်များကိုပိုမိုအမြတ်ထုတ်ခြင်းနှင့်အတူ ( အောက်ပိုင်းညာဘက် quadrant) ။
လက်ရှိအယူအဆတွင်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်၏ပုဆိန်နှစ်ခုကိုကောင်းစွာမှတ်တမ်းတင်ထားသော dopamine လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ပထမ ဦး စွာယေဘူယျအားဖြင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုကိုအသုံးစရိတ် - ထိန်းသိမ်းသည့်ပုဆိန်များနှင့်ထိန်းချုပ်ရန် dopamine ၏အခန်းကဏ္linkကိုကျွန်ုပ်တို့ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် dopamine ၏အကျိုးအတွက်အခန်းကဏ္rewardကဆုလာဘ်မက်လုံးပေးမှုနှင့်အစာစားချင်စိတ်ကိုလိုက်စားခြင်းများကိုပြုပြင်ရန်မဟုတ်ဟုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည် se နှုန်းဒါပေမယ့်သုံး သတင်းအချက်အလက်ဆုချ အဆိုပါထိန်းညှိရန် ဖြန့်ဖြူး ကွဲပြားခြားနားသောလှုပ်ရှားမှုများမှစွမ်းအင်, ထိုစူးစမ်းလေ့လာ-exploit ပုဆိန်ဖြန်ဖြေ; ကြောင်းရွေးချယ်စွမ်းအင်အသုံးချရပါမည်ကိုမည်သို့, ပါသလဲ ကျနော်တို့ dopamine ၏ TD သင်ယူမှုမော်ဒယ်များအတွင်း dopamine ၏ဤဒုတိယရှုထောင့်ဘောင်နှင့် dopamine နှစ်ဦးစလုံး (1) သင်ယူမှု mediates ဘယ်မှာဆုချ အကွောငျး စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်နှင့် (2) သောအရာဆုလာဘ်သတင်းအချက်အလက်ဒုတိယဝင်ရိုး construing, အမူအကျင့်ရွေးချယ်မှု biases ဖို့ဒီဂရီညွှန်ကြားကြောင်းလှုံ့ဆော်မှုတန်ဖိုးတာဝန်ပေးဖို့, ကြောင်းကိုဆုလာဘ်-စူးစမ်း-exploit အဖြစ် လုံ့လရှိသူခြိုးခြံချွေတာပါ: ဘယ်လိုဂရုတစိုက်ကြှနျုပျသရရှိနိုင်အရင်းအမြစ်များကိုအမြတ်ထုတ်ဖို့လိုသလဲ
dopamine တစ်မူလတန်း function ကိုအဖြစ်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်၏စီမံခန့်ခွဲမှုထက်ဆုလာဘ်မော်ဂျူအဓိကထားခြင်းအားဖြင့်, လေ့လာတွေ့ရှိချက်အပြုအမူအတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကိုနားလည်သဘောပေါက်များအတွက်ဗဟိုစည်းရုံးရေးဥပစာသို့ cohere နိုင်ပါတယ်ပြန်လည်သင့်မြတ်ဖို့မဟုတ်ရင်ခက်အများအပြား။ အောက်ပါကဏ္ဍများအတွက်ကျနော်တို့ခေတ္တမျှအသေးစိတ် dopamine နဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်ရှိစိတ်ကူးများနှင့်စာပေ၏ဆက်စပ်၌ဤအယူအဆ၏အဓိကဒြပ်စင်။
ဒါဟာ dopamine စနစ်ကရှုပ်ထွေးပြီးဘက်စုံကြောင်းကိုမှတ်သားရပါမည်။ ဘေးဖယ်လုပ်သူများနှင့် phasic dopamine ဆဲလ်ပစ်ခတ်ရန်၏ extracellular dopamine ပြင်းအားနှင့်နှုန်းထားများအနေဖြင့် "dopamine function ကို" dopamine သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးက၎င်း၏ပစ်မှတ်မှာဖြန့်ချိ၏မော်ဂျူ, ပေါင်းစပ်၏မော်ဂျူ, vesicular ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်အလွယ်တကူဖြန့်ချိရေကန်, အဲဒီ receptor စကားရပ်နှင့် function ကိုပြောင်းလဲမှုများနှင့်ပွောငျးလဲပါဝင်နိုင်ပါသည် နှင့် reuptake ။ Exposition ၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လိုအပ်သောရိုးရှင်းလွယ်ကူတာအဖြစ်ကျနော်တို့ "မြင့်သော" နှင့် "အနိမ့်" dopamine function ကို၏စာပေအတွက်အဆန်းမဟုတ်အလေ့အကျင့်ပြောပါမည်။ ရှုပ်ထွေးဒီ dopamine စနစ်ကသူ့ရဲ့ function ကို (များ) ၏ပိုပျော့ပြောင်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်ခေတ်မီစည်းမျဉ်းကွိုးစားအားထုနိုငျသောအားဖြင့်အလားအလာရှိသောယန္တရားများကိုကိုယ်စားပြုမိုက်စေသော။ ပုံထဲမှာ 1ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုမပေးမြင့်မားသောအနေဖြင့်အနိမ့်ဖို့တစ်ခုတည်းလိုင်းအဖြစ် (ထိုအလယ်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း) ဒါပေမယ့် Two-ရှုထောင်အာကာသပုံဖော်ဖြတ်ပြီးအလားအလာအထိနိုင်ကြောင်းပိုမိုရှုပ်ထွေး function ကိုအဖြစ် dopamine စဉ်းစားရန်ခွင့်ပြုဤရှုပ်ထွေးဖြစ်ပါတယ်။ ဤအရှုပ်ထွေးကိုနားလည်ခြင်း, သို့သော်, အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုစုစည်းဖို့ရာဝန်းကျင်စကားပြန်မူဘောင်အပျေါ၌မူတည်ပါသည်။ ဤတွင်ကျွန်တော်တစ်ဦးထုတ်ဖေါ်ခြင်းအပေါ်အာရုံစိုက် အရိုး အခြားရွေးချယ်စရာမူဘောင်များနှင့် dopamine မဟုတ်သလိုအသေးစိတ်အကြောင်းကိုလူသိများအရာအားလုံးအလားအလာ dopamine အချက်ပြပါဝင်ပတ်သက်တိုင်းယန္တရား, တစ်ခုတည်းစက္ကူတစ်ခုမထိနျးခြုပျနိုငျစိန်ခေါ်မှုသိမ်းသွင်းဖို့ကြိုးစားပါဘူး။
dopamine system သည်ကမ္ဘာနှင့်ပြင်ပလှုံ့ဆော်မှုနှစ်ခုကြားတွင် interposed သည်။ တဘက်တွင် dopamine သည်သက်ရှိများကိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှုများကိုတုန့်ပြန်သည်။ dopamine နှင့်ဆုလာဘ်၏အားဖြည့်သင်ယူမှုရှုထောင့်၌ (ဂူ et al ။ , 1996; Schultz et al ။ , 1997), dopamine ပြင်းထန်စွာလှုံ့ဆော်မှုများ၏တန်ဖိုး (ပြည်နယ်) အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူ mediates နှင့်ပြီးသောတုံ့ပြန်မှု (လုပ်ရပ်တွေကို) (အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းReynolds က et al ။ , 2001; Schultz, 2002; လူယာ et al ။ , 2003; ဒေါ်နှင့် Doya, 2006; နေ့နှင့် Carelli, 2007; နေ့ et al ။ , 2010; Flagel et al ။ , 2010; Gan et al ။ , 2010; နေ့ et al ။ , 2011) ။ အဆိုပါမက်လုံးပေး-salience ရှုထောင့် dopamine ရာဘက်လိုက်မှုအမူအကျင့်ရွေးချယ်မှု (လှုံ့ဆော်မှုဖို့ဒီဂရီပြောင်းလဲသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူဆက်စပ်မက်လုံးပေးတန်ဖိုးကို scales ကြောင်းစောဒကတက်သည်Phillips က et al ။ , 2003; Berridge, 2004; Roitman et al ။ , 2004; Cagniard et al ။ , 2006b; နေ့ et al ။ , 2006; et al အားပေးစရာ။ , 2007) ။ ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုစလုံးတွင် dopamine သည်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအရအလွန်ကွဲပြားခြားနားသော်လည်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှု၊ ပြင်ပကမ္ဘာအပေါ်တုံ့ပြန်မှုကိုပြောင်းလဲသည်။
လတ်တလောအလုပ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ပြည်တွင်းရေး organismal milieu (အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်အချက်ပြသော dopamine နဲ့ homeostatic စနစ်များအကြားရှုပ်ထွေး interaction ကသရုပ်ပြထားပါတယ်Davis က et al ။ , 2010a; က de Araujo et al ။ , 2010; Figlewicz နှင့် Sipols, 2010; Opland et al ။ , 2010; Vucetic နှင့် Reyes, 2010) ။ Midbrain dopamine အာရုံခံ, ကျယ်ပြန့်ပြန်သုံးသပ် (leptin, ghrelin, orexin နှင့်အင်ဆူလင်အပါအဝင် homeostatic ယန္တရားများနှင့်အတူဆက်နွယ်မြောက်မြားစွာပျံ့နှံ့နေတဲ့အချက်ပြမှုများများအတွက် receptors ဖော်ပြ Figlewicz နှင့် Sipols, 2010) ။ homeostatic အချက်ပြမှုများ၏တိုက်ရိုက် sensing အပြင်, dopamine အရေးပါ hypothalamic Project (အပါအဝင် homeostatic ထိန်းချုပ်မှုယန္တရားနဲ့ဆက်စပ်အမျိုးမျိုးသောအလွှာထဲကနေစီမံချက်များလက်ခံရရှိOpland et al ။ , 2010) ။ ဒါဟာကျယ်ပြန့်သောဤသွင်းအားစုဆုလာဘ်ဖြစ်စဉ်များ modulate ယုံကြည်ကြသည်။ ဥပမာ, မကြာခဏ (ပျံ့နှံ့နေတဲ့ leptin အကျိုးဆက်အစာစားချင်စိတ်အပြုအမူလျှော့ချ, အလှည့်အတွက်အစားအစာ၏အကျိုးကိုတန်ဖိုးကိုမှေးမှိန်ကြောင်း dopamine လှုပ်ရှားမှုလျော့ကျကြောင်းအဆိုပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်Morton et al ။ , 2009; Davis က et al ။ , 2010a; Figlewicz နှင့် Sipols, 2010; Opland et al ။ , 2010; Vucetic နှင့် Reyes, 2010) ။ ဤအ homeostatic သွင်းအားစုများ၏အတိအကျအခန်းကဏ္ဍအငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်နေဆဲပင်။ ဒီမှာ key ကိုအမှတ် dopamine စနစ်ကအတွင်းပိုင်းလိုအပ်ချက်နှင့်တောင်းဆိုချက်များကိုနှင့်အညီယင်း၏ပတ်ဝန်းကျင်၏သက်ရှိအသိပညာ exploit ရန်အနေအထား၌ချပြီး, အသက်ရှိများ၏ပြည်တွင်းရေး milieu နှင့် homeostatic ပြည်နယ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးသိသိသာသာသတင်းအချက်အလက်များအားလက်ခံတွေ့ဆုံကြောင်း, ကြောင်း, ဤကမ္ဘာနှစ်ခုကိုအကြားဆက်ဆံရေးပိုကောင်းအောင်အပြုအမူ modulate ရန်, အတွင်းနှင့်အပြင်ဘက်, သက်ရှိနဲ့ကမ္ဘာကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, တစ်သဘောတစ်ခုလုံးကိုဦးနှောက်အတွင်းပိုင်းနှင့်အပြင်ဘက်ကမ္ဘာအကြားပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်ပြောင်းလဲထားပါတယ်, ဒါပေမယ့် dopamine စနစ်၏ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်ပျံ့ Project, အတူတကွ၏ကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းပြောင်းလဲပစ်ထဲမှာနှင့်၎င်း၏သိသာအခန်းကဏ္ဍအပေါ်သို့ဆုံသောကွဲပြားခြားနားသွင်းအားစုနှင့်အတူ အတူတူအလွန်အမင်းမျိုးစိတ်ကိုဖြတ်ပြီးထိန်းသိမ်းထားခံရအတူလှုံ့ဆျောမှုကနေမော်တာကွပ်မျက်ဖို့အပြုအမူတွေနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များကတကယ်တော့, လိုက်လျောညီထွေရှိအချို့သောအခြေခံကျ, ဝေဖန်အခန်းကဏ္ဍမှပြောင်းလဲခဲ့ကြပေမည်အကြံပြုထားသည်။
Dopamine: တစ်ဘတ်ဂျက်အပေါ် Desire ခြင်း
အနည်းငယ် dopamine ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအခြေအနေများအပြုအမူလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နှင့်အကောင်းဆုံး organismal လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ပြည်တွင်းရေးနှင့်ပြင်ပသတင်းအချက်အလက်ပေါင်းစပ်သောဤအယူအဆနှင့်အတူငြင်းလိမ့်မယ်။ အဆိုပါခက်ခဲမေးခွန်းဖြစ်ပါသည် ဘယ်လို dopamine ဒီအောင်မြင်ရန်သနည်း? ဒါကအဓိကကဘာလဲဆိုတာဖြစ်ပါသည် effector dopamine အပြုအမူ adapts သောယန္တရား? အဆိုပါရည်မှန်းချက်များနှင့်လှုပ်ရှားမှုများတစ်ခုသက်ရှိ pursues နှင့်သန်စွမ်းသော: နီးပါး hegemonic အဆိုပါရေပန်းစားအမြင်, dopamine မက်လုံးပေးသို့မဟုတ်အကျိုးဆက်နှစ်ဦးစလုံးနှင့်အချို့ကိုပေါင်းစပ်၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးလှုံ့ဆျောမှုပုံစံသွင်းသွင်း, ဆုလာဘ်ဖြစ်စဉ်များ-မသက်ဆိုင်ကြောင့်ဆုလာဘ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးလေ့လာသင်ယူ mediates ရှိမရှိ၏ modulates သောကွောငျ့ဖွစျသညျ ဤအ လိုက်. နေကြသည်။ ပြင်းထန်စွာ, မော်ဂျူ၏ locus ဖြစ်ပါသည် အလိုဆန္ဒ: ဘယ်လောက်ဆုလာဘ်သည်၎င်း၏လိုက်စားဖြစ်ပေါ်သည်။
အများကြီးလျော့နည်းဆှေးနှေးခဲ့သျောလညျး, dopamine လည်းလှုပ်ရှားမှုအဆင့်ဆင့် modulates ။ လှုပ်ရှားမှု၏ဤမော်ဂျူနှင့်အတူတသမတ်တည်း, Salamone နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကရှည်လျား (dopamine တစ်ဦးရည်မှန်းချက်ဆီသို့နှစ်ဦးစလုံးကြိုးစားအားထုတ်မှု modulate နိုင်သည်ကိုစောဒကတက်ခဲ့ကြSalamone et al ။ , 1997, 2005, 2009a) အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ယေဘူယျလှုပ်ရှားမှုအဆင့်ဆင့် (ဝမ်းကွဲ et al ။ , 1993; ကော်ရဲရား et al ။ , 2002), လက်ရှိယူဆချက်မှအလယ်ပိုင်းလေ့လာတွေ့ရှိချက်။
ကျနော်တို့ dopamine စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များနှင့်အတူအပြုအမူပြန်လည်သင့်မြတ်ဖို့စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများငြင်းခုန်ကြလိမ့်မည် ကြောင်း dopamine အလိုဆန္ဒ modulate မဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးစွမ်းအင်ဘတ်ဂျက်ပေါ်တတ်၏။ ဒီအမြင်, စွမ်းအင်ရရှိနိုင်မှု, မဆုချမှာတော့အပြုအမူ၏ dopaminergic စည်းမျဉ်းလွှမ်းမိုးမူလတန်းအချက်တခုဖြစ်ပါသည်။ အောက်ပါကဏ္ဍများအတွက်ကျနော်တို့ dopamine အဆိုပါ dopamine system ကိုဆုလာဘ်သတင်းအချက်အလက်ကိုအသုံးပြုပြီးစွမ်းအင်များဖြန့်ဖြူးထိန်းညှိပေးသောအားဖြင့်ယန္တယားတစ်ခုဆွေးနွေးမှုအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်ထိန်းညှိပေးသောအားဖြင့်ပထမဦးဆုံး effector ယန္တရားများဆွေးနွေးခြင်း dopamine ၏ဤစွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုယူဆချက်အသေးစိတ်ရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါယူဆချက်သွားမယ်လို့ပြီးနောက်ကျနော်တို့အဝလွန်ခြင်းအတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကိုတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာအကောင့်အပေါ်အထူးအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။
အောက်ပါကဏ္ဍများအတွက်ကျနော်တို့အသေးစိတ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အသုံးစရိတ်၏စဉ်ဆက်တစ်လျှောက်တွင်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်ပြောင်းလဲပစ်အတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကိုမည်။ ဖွံ့ဖြိုးပြီးမြင်ကွင်းကိုများတွင်အထူးသဖြင့်မျက်နှာသို့စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်-နှစ်ဦးစလုံး Generation Activities နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုထိန်းညှိဆုလာဘ်၏အခြေခံကျကျလွတ်လပ်သောရည်မှန်းချက်များ-သည်နှင့်ရရှိနိုင်စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များအပေါ်အစားမူတည်ပါသည်။ ဆုလာဘ်ကျနော်တို့ငြင်းခုန်မည်ဟုဆုံးဖြတ်တစ်ဦးကွဲပြားအခန်းကဏ္ဍ ဖြန့်ဖြူးသို့မဟုတ်ခွဲဝေ စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်၏, ထိုစူးစမ်းလေ့လာ-exploit ဝင်ရိုးဖြင့်ကိုယ်စားပြုခြင်းနှင့်ပုဒ်မတှငျဆှေးနှေး "ဝင်ရိုးတန်း II ကို: Explore-exploit ။ "
Dopamine နှင့်အထွေထွေလုပ်ဆောင်ချက်: ဖြုန်းသို့မဟုတ်သိမ်းဆည်းရမလား?
ဓာတ်လှေကား dopamine ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာတိုးချဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကြွဆေး, ကိုကင်းသို့မဟုတ် dopamine reuptake inhibitors အဖြစ် dopamine လွှတ်ပေးရန်တိုးမြှင့်ကြောင်းမူးယစ်ဆေးဝါး, (လူသားများနှင့်ကြွက်များတွင် Generation Activities တိုးမြှင့်ကယ်လီ, 1975; Mogenson et al ။ , 1980; Beninger, 1983; Ahlenius et al ။ , 1987; Carlsson, 1993; Xu et al ။ , 1994; Sedelis et al ။ , 2000; ကော်ရဲရား et al ။ , 2002; ဒါဝိဒ်သည် et al ။ , 2005; Viggiano, 2008; Charntikov et al ။ , 2011) ။ D1 agonists သို့မဟုတ်ရန်၏အုပ်ချုပ်ရေးအသီးသီးလှုပ်ရှားမှုများတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်လျှော့။ D2 သရုပ်ဆောင်မူးယစ်ဆေးဝါး inhibitory အတွက်အလတ်စား spiny အာရုံခံ, သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းအပေါ် Post-Synaptic ပြုမူ; သို့သော်သူတို့သည်လည်း dopamine နဲ့အချိုမှုဆိပ်ကမ်းပေါ်နှင့် dopamine ဆဲလ်အသေကောင်အပေါ် autoreceptors အဖြစ် Pre-Synaptic ပြုမူ။ အကျိုးဆက်, quinpirole ၏အနိမ့်ဆေးများ, တစ်ဦး D2 agonist အဖြစ်, (, ယူဆရသည့် inhibitory အတွက်လှုပ်ရှားမှုလျော့ကြောင်း postsynaptic D2 receptors ၏ activation မှတဆင့် quinpirole တိုးလှုပ်ရှားမှုမြင့်မားဆေးများစဉ်ယူဆရ autoreceptor activation မှတဆင့် dopamine လွှတ်ပေးရန်လျော့ကျလာသွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းလှုပ်ရှားမှုစိတ်ကျရောဂါပါလိမ့်မယ်Lomanowska et al ။ , 2004) ။ ကြွက်များတွင် CNS စိတ်ကျရောဂါ (ဥပမာ, မော်ဖင်းအကိုက်) ဖြစ်ကြောင်းအလွဲသုံးစားမှုအချို့ကိုစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါး, တိုးမြှင့ dopamine လွှတ်ပေးရန်အထဲကပေါ်ထွန်းယုံကြည်ထားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုလှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့် (Koek et al ။ , 2012) ။ dopamine reuptake တိုးလှုပ်ရှားမှုပိတ်ဆို့ကြောင်းမူးယစ်ဆေးဝါး (ဘီလ်နှင့် Cowley, 2008; လူငယ်တို့ et al ။ , 2010) နှင့် DAT စကားရပ် locomotor လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်။ မြင့်မားသောလုပ်သူများ dopamine အတွက်ရရှိလာတဲ့အတွက် dopamine ပို့ဆောင်ရေးလျှော့စကားရပ်နှင့်အတူကြွက်, (hyperactive များမှာCagniard et al ။ , 2006a).
dopamine Generation Activities modulates မသံသယရှိသျောလညျး, ဒါပေသောယန္တရားညံ့ဖျင်းနားလည်သဘောပေါက်ထားပါသည်။ တကယ်တော့အတိအကျ, "Generation Activities" သို့မဟုတ် arousal ပထမဦးဆုံးဌာန (တှငျအဘယျ, conceptualizing အဘို့အဘယ်သူမျှမယေဘုယျမူဘောင်လည်းမရှိQuinkert et al ။ , 2011) ။ ကြွက်များတွင် Generation Activities ပုံမှန်အားဖြင့်ဘီးများသို့မဟုတ် homecage လှုပ်ရှားမှုမော်နီတာ running, ဖြစ်စေ open-လယ်ကိုသုံးပြီးတိုင်းတာသည်။ အရာတစျခုစီအထွေထွေလှုပ်ရှားမှုအဆင့်ကိုထင်ဟပ်ဖို့ဒီဂရီအခြေအတင်ဆွေးနွေးနေသည် (Dishman, 2008; Viggiano, 2008; Hess et al ။ , 2010; ပန်းကုံး et al ။ , 2011) ။ open-လယ်ပြင်, ဥပမာ, ယေဘုယျလှုပ်ရှားမှု, ရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးအပြုအမူသို့မဟုတ်တစ်အတိုင်းအတာအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါတယ် "စိတ်လှုပ်ရှားမှု။ " ဒီပြေးဘီး, ပြေးအလွန်အမင်း (ကြွက်များတွင်အားဖြည့်သည်ကို ထောက်.Wagner, 2005; Brené et al ။ , 2007; Greenwood et al ။ , 2011), ဆုလာဘ်ဖြစ်စဉ်များနှင့်အတူရှက်ကြောက်လိမ့်မည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, dopamine တိုးပွားလာသုံးခုစလုံးအတိုင်းအတာအပေါ်လှုပ်ရှားမှုတိုးပွါးခြင်းနှင့်အပြန်အလှန်, dopamine လျော့ကျလာသုံးခုစလုံးအတိုင်းအတာ (အပေါ်လှုပ်ရှားမှုလျော့ကျAhlenius et al ။ , 1987; Zhuang et al ။ , 2001; ကော်ရဲရား et al ။ , 2002; leng et al ။ , 2004; Beeler et al ။ , 2006, 2009; Dishman, 2008; Kitanaka et al ။ , 2012).
အဲဒီအစားရည်မှန်းချက်-oriented, ဆုလာဘ်-မောင်းနှင်အပြုအမူကနေကွဲပြားအဖြစ် "Generation Activities" ကြည့်ရှုသည်ထက်, တစ်ဦးကအခြားရွေးချယ်စရာရှုထောင့်ကြောင်း dopamine ပါလိမ့်မယ် (ထိုကဲ့သို့သောဘီးအပြေးအဖြစ်အကြိုး, အားဖြည့်လှုပ်ရှားမှုဆီသို့ညွှန်ကြားခံရရှိမရှိ, စွမ်းအင်ရရှိမှုအချက်ပြလိုက်ခြင်းနှင့်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ် induces သို့မဟုတ် လီဗာထိုကဲ့သို့သောလွင်ပြင်၌သို့မဟုတ်မျှသာအဖြစ်ရှာဖွေရေးအိမ်လှောင်အိမ်ထဲမှာနေ့ကပိုမို mouse ကို-တူသောပစ္စည်းပစ္စယနေ့ကလုပ်နေတာန်းကျင်ရွေ့လျားဆီသို့) ကိုနှိပ်။ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ psychostimulant အသုံးပြုသူများအထေူအဖြစ်: dopamine သရုပ်ြပသည်။ ထို့ကြောင့် Generation Activities အပေါ် dopamine ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု up- သို့မဟုတ်ဆင်း-ထိန်းညှိစွမ်းအင်လှုပ်ရှားမှုညွှန်ကြားစေခြင်းငှါဘယ်လိုအပြုအမူလှုပ်ရှားမှုလွတ်လပ်သောအတွက်အသုံးမည်မျှစွမ်းအင်အသုံးစရိတ်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက်အခြေခံအကျဆုံး effector ကိုယ်စားပြု: ဆုလာဘ်၏လွတ်လပ်သော.
Dopamine နှင့်ကြိုးပမ်းမှု: ငါဘယ်လိုအများကြီးမတတ်နိုင်နိုင်သလား?
အဆိုပါစာပေတစ်ခုချင်းစီကိုနောက်ဆက်တွဲဆုလာဘ်တိုး (၏ကုန်ကျစရိတ်, dopamine Canon တစ်ခုချင်းစီကိုဆုလာဘ်ရရှိခဲ့ပြီးနောက်အဘယ်မှာရှိတိုးတက်သောအချိုး Paradigm အတွက်တိုးမြှင့်စွမ်းဆောင်မှုများကရုပ်ပြ, ပန်းတိုင်လိုက်ရှာအတွက်ကြိုးစားအားထုတ်မှုတိုးပွါးတိုးလာကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများနှင့်အတူတှေအမြားကွီးဖြစ်ပါသည်Hodos, 1961) ။ သမိုင်းကြောင်းအရ, တစ်ဘာသာရပ်တစ်ခုတိုးတက်သောအချိုးစမ်းသပ်မှုအတွက်စေသည်ကြိုးစားအားထုတ်မှုစစ်ကူထိရောက်မှုတစ်အတိုင်းအတာအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး: ငါအလုပ်လုပ်ပုံကိုခဲယဉ်းသည် (ထိုဆုလာဘ်လှုံ့ဆျောမှုဘယ်လောက်အဖိုးတန်သို့မဟုတ်တစ်အတိုင်းအတာဖြစ်ပါတယ်က Madden et al ။ , 2007a,b) ။ ဒါဟာတစ်စုံတစ်ဦးကပေးချေရန်ဆန္ဒရှိသည်စျေးနှုန်းအရသိရသည်တစ်ခုခု၏တန်ဖိုးကိုအကဲဖြတ်ဖို့အလားတူပါပဲ။
သို့သော် breakpoints အားလုံးလုံးလြားလြား (ကကုန်ကျစရိတ်-အကျိုးအတွက်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုတိုင်းတာSalamone et al ။ , 2009a) ။ dopamine သည်ဆက်လက်တည်ရှိနေသောဤဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအထောက်အကူပြုသော်လည်း၎င်းသည်အခန်းကဏ္roleကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပေ။Salamone et al ။ , 1997; Roesch et al ။ , 2007; နေ့ et al ။ , 2010, 2011; Ostlund et al ။ , 2010) ။ တဦးတည်းလက်တွင်မက်လုံးပေး-salience သီအိုရီအတွက်စောဒကတက်သည်အတိုင်း, dopamine မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဟာရိပ်မိတိုးမြှင့်, ဆုလာဘ်နဲ့ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုများမက်လုံးပေးဂုဏ်သတ္တိများကိုတိုးမြှင့်စေခြင်းငှါ အကျိုး (Berridge, 2007; Gan et al ။ , 2010) ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, Salamone နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များက dopamine အရှင်လျှော့ချ, ကုန်ကျစရိတ်မှ sensitivity ကိုလျော့နည်းစေသည်ဟုငြင်းခုန် ပေးရ စိတျအပိုငျး (Salamone, 2011ကိုလည်းတွေ့မြင် Phillips က et al ။ , 2007) ။ နှစ်ဦးစလုံးကိစ္စများတွင်ရလဒ်တစ်ခုမြင့်မားသော breakpoints အားအဖြစ်လေ့လာတွေ့ရှိပြောင်းလဲကုန်ကျစရိတ်-အကျိုးအတွက်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်မှပေါ်ထွက်လာသောဆုလာဘ်လိုက်ရှာတိုးလာနေပါတယ်။ တိုးမြှင့်အားထုတ်မှုနဲ့တုံ့ပြန်: အသမားရိုးကျတိုးတက်သောအချိုးပါရာဒိုင်းအတွက်ကအမူအကျင့်ရလဒ်ကိုအတူတူကြည့်ရှုမယ်လို့အဖြစ်နှစ်ခုဖြစ်နိုင်ခြေပိုင်းခြားသိမြင်ရန်ခက်ခဲသည်။ အထက်ပြန်လည်သုံးသပ်အိမ်လှောင်အိမ်လေ့လာမှုများ, သို့သော်ဤနှစ်ခုအခြားနည်းလမ်းများအကြားခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ တိုးမြှင့် dopamine "လို" နှင့်တက်-ထိန်းညှိစာစားချင်စိတ်ကိုလှုံ့ဆျောမှုထက် သာ. ကြီးမြတ်သော inducing, ဆုချမှ sensitivity ကိုတိုးမြှင့်ခဲ့ကြလျှင်, ငါတို့သည် သာ. စားသုံးမှုနှင့်ပိုပြီးအကြိုးအစားအစာများများအတွက်ပိုကောင်း preference ကိုကြည့်ဖို့မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့မလေ့လာသည်။ အဲဒီအစားကျွန်တော်တို့ဟာအလားတူစားသုံးမှု, preference ကိုများနှင့်အမူအကျင့်ရွေးချယ်မှုပေမယ် သာ. ကြီးမြတ်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်ဆီသို့မဟာဗျူဟာ foraging အတွက်ပြောင်းကုန်ပြီလေ့လာသည်။ သို့သော်ထိုသို့ DATkd ကြွက်ဖြစ်ကြောင်းပြောမမှန်ကန်ကြောင်းပါလိမ့်မယ် အာရုံမခံစားနိုင်သော ကုန်ကျစရိတ်ခြင်းငှါ၎င်း, သူတို့ပဲရိုင်း-type အမျိုးအစားကြွက်နှင့်တူကုန်ကျစရိတ်မြင့်တက်တုံ့ပြန်မှာသူတို့ရဲ့စားသုံးမှုနှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုထိန်းညှိ။ ထို့အပြင်စျေးပေါ-စျေးကြီးလီဗာ switching ပါရာဒိုင်းအတွက်ခရိုနီကြပါလျှင် မဟုတ် switch သည် DATkd ကြွက်ရိုင်း-type အမျိုးအစားမှတူညီသည့်စျေးပေါလီဗာကြိုက်တတ်တဲ့။ ယင်းအစားတိုးမြှင့် dopamine သာ. ကြီးမြတ်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်ဆီသို့မဟာဗျူဟာ foraging shift မှပေါ်လာသည်။
ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အကျိုးရှိအကြားအကောင်းဆုံး Trade-off အဆုံးအဖြတ်မှာတော့နှစ်ဦးစလုံးအချက်များ situationally ဆက်ပြောပါတယ်ဖြစ်ကြသည်။ တဦးတည်းလက်တွင်, အကျိုးအတွက်လိုအပ်အပေါ်သို့ကဆက်ပြောပါတယ်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးကအစားအစာကိုတောင့်ကိုပိုပြီးအဖိုးတန်ပြီးဆာလောင်မွတ်သိပ် mouse ကိုမှလှုံ့ဆော်နေတဲ့ sated တဦးတည်းထက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ စိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်ဆုလာဘ်များနှင့်အားဖြည့်အဆုံးအဖြတ်ကစားသောအခန်းကဏ္ဍ (စိတ်ပညာနှင့် neuroscience ၌ရှည်လျားသောသမိုင်းရှိပါတယ်Berridge, 2004) နှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုတက်ကြွဧရိယာကိုကိုယ်စားပြု (ဒါယန်းနှင့် Balleine, 2002; Balleine, 2005; Fontanini နှင့် Katz, 2009; Haas et al ။ , 2009) ။ အများကြီးလျော့နည်းအသိအမှတ်ပြုသို့သော်ကုန်ကျစရိတ်၏အကဲဖြတ်လည်းဆက်ပြောပါတယ်ဖြစ်မည်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသကိုမဆိုအသုံးစရိတ်နှင့်ဆက်စပ်ကုန်ကျစရိတ်ရရှိနိုင်ပါသည်အရင်းအမြစ်များကိုအပေါ်သို့မူတည်ပါတယ်။ တစ်ဦး $ 12.00 လေဆိပ်ပူခွေး၏ကုန်ကျစရိတ်တစ်ဦးသန်းကြွယ်သူဌေး CEO ဖြစ်သူနှင့်ဆင်းရဲသားဘွဲ့ရကျောင်းသားအားဖြင့်အတူတူပင်အကဲဖြတ်ခြင်းမရှိပါ။ ကြွက်နှင့်အတူအလားတူအရင်းအမြစ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ အချိန်ကသာကန့်သတ်ငွေပမာဏကိုဆုလာဘ်ရယူဘို့ (ထိုကဲ့သို့သောတစ်နာရီအော်ပရေတာအစည်းအဝေးများအတွက်ကဲ့သို့) မရရှိနိုင်လျှင်ဥပမာအားဖြင့်နှောင့်နှေးကုန်ကျစရိတ်ကပိုသိသာဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အလားတူပင်လီဗာပုံနှိပျသူနဲ့ဆက်စပ်ကုန်ကျစရိတ်မောက်မှစွမ်းအင်၏အထွေထွေရရှိနိုင်မှုအပေါ်မူတည်လိမ့်မည်။ dopamine ကုန်ကျစရိတ် sensitivity ကိုလျော့နည်းစေပါလျှင်ဒါနှစ်ခုအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူရှိပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး၌, ကုန်ကျစရိတ် sensitivity ကိုအကြိုးဆွေမျိုးလျော့နည်းသွားသည်, ကြောင်းကုန်ကျစရိတ်နှင့်ဆုလာဘ်နှိုင်းယှဉ်ကြသောအခါ, dopamine (ထိုမက်လုံးပေးတန်ဖိုးကိုတိုးမြှင့်ဖို့ function ညီမျှ) ဆုလာဘ်မျက်နှာသာနိုင်ရန်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်အချက်မှေးမှိန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယခုနှစ်, dopamine ကုန်ကျစရိတ်-sensitivity ကို modulates ရရှိနိုင်အရင်းအမြစ်များကိုမှဆွေမျိုး။ စွမ်းအင်ဖောဖောသီသီရရှိနိုင်ခဲ့လျှင်, အားထုတ်မှုကုန်ကျစရိတ်လျှော့နေကြသည်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု၏ dopamine စည်းမျဉ်းများသည်ဆုလာဘ်တန်ဖိုးနှင့်မသက်ဆိုင်ကြောင်းငြင်းခုန်ကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ dopamine ၏အားထုတ်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှုများမှာရရှိနိုင်သည့်စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များနှင့် ပတ်သက်၍ စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်၏တိုက်ရိုက်မော်ဂျူလာကိုထင်ဟပ်သည်။ dopamine သည်ယေဘုယျအားဖြင့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုတိုးမြှင့်ပေးသည်နှင့်အမျှအထက်တွင်ဆွေးနွေးခဲ့သည့်အတိုင်း၎င်းသည်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်များ (သို့) ရည်မှန်းချက်ပြည့်မီရန်အားစိုက်ထုတ်ခြင်းများကိုတိကျသောလုပ်ဆောင်မှုများတွင်တိုးမြှင့်သည်နှင့်အမျှ ထပ်မံ၍ ကျွန်ုပ်တို့ကငြင်းခုံသည်။ ဆုလာဘ်တန်ဖိုးလွတ်လပ်သော: သင်စွမ်းအင်ရှိပါကတစ်ခုကိုသုံးပါ။
ဝင်ရိုး II ကို: Explore-exploits
ယင်းကိုထိန်းချုပ်: ကျွန်တော်ဆုလာဘ်စွမ်းအင်၏ dopamine ကမကထပြုခဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ဗဟို function ကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်ငြင်းခုန်အောက်ပါကဏ္ဍများအတွက် ဖြန့်ဖြူး ကျနော်တို့ကလေ့လာစူးစမ်း-exploit ဝင်ရိုးနှင့်အတူကိုယ်စားပြုထားတဲ့စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်, (ပုံ၏ 1) ။ ဒီအမြင်အတွက်, ဆုလာဘ်တန်ဖိုး (s) ကိုကွဲပြားခြားနားသောလှုပ်ရှားမှုများ၏ဆွေမျိုး utility ကိုဆုံးဖြတ်သည်သင်ယူ; သို့သော်အဘယ်အရာကိုလိုအပ်နေပြီလို့ဒီဝင်ရိုးအတွင်းဖမ်းမိသောဖြစ်ပါသည် ဒီဂရီ အရာဤတန်ဖိုးများကို (နှင့်သူတို့ကိုအကြားဆနျ့ကငျြဘ) အမှန်တကယ်ဘက်လိုက်မှုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာရွေးချယ်မှုပုံဖော်။ ကျနော်တို့အနေဖြင့်, phasic dopamine ကျယ်ပြန့်ယုံကြည်သည်အဖြစ်ခန့်သင်ယူခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်တန်ဖိုးများကို update mediates ကြောင်းငြင်းခုံကဒီဝင်ရိုးအားဖြည့်လေ့လာသင်ယူခြင်းနှင့်မက်လုံးပေး-salience အမြင်များသို့ပေါင်းစည်း လုပ်သူများ dopamine, မက်လုံးပေးအမြင်များအကြံပြုအဖြစ်, အမူအကျင့်ရွေးချယ်မှု, သင်ယူတန်ဖိုးဟူသောအသုံးအနှုနျးပေါ်ဤအကြောင်းတန်ဖိုးများ၏သက်ရောက်မှု scales ။ ငါတို့သည်ဤမက်လုံးပေးထားတဲ့ကြိုတင်ဆုလာဘ်သင်ယူမှုဘက်လိုက်မှုရွေးချယ်မှုဖို့ဒီဂရီစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားဖြည့်သင်ယူမှုအတွင်း function ကိုအဖြစ်တရားဝင်ချုံ့ချဲ့ reconceptualize; မြဲမြံစွာတည်သင်ယူမှုအမြတ်ထုတ်နေသည်ဘယ်လောက်ဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့လုပ်သူများ dopamine ဤအဆုံးစွန်သော function ကို assign နဲ့ထိန်းညှိကြောင့် construe ခြိုးခြံချွေတာပါ; စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်၏ခွိုးခွံခြှတောထိန်းညှိသည်။
Dopamine နှင့်ပန်းတိုင်ရွေးချယ်ရေး: စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်အတွက်ပညာရှိရွေးချယ်မှုပြုလုပ်ခြင်း
လူတစ် ဦး ၏အသုံးစရိတ်ချွေတာမှုသည်ရရှိနိုင်သည့်အရင်းအမြစ်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ချမ်းသာတဲ့လူတစ်ယောက်ကဒေါ်လာထောင်နဲ့ချီတဲ့စကားတွေမပြောသင့်ဘူး၊ ဆင်းရဲတဲ့လူတစ်ယောက်ကဒေတာတွေကိုရေတွက်ရမယ်။ အလားတူစွာလုံ့လဝီရိယရှိသောပတ် ၀ န်းကျင်တွင်နေထိုင်သောတိရိစ္ဆာန်များသည်စွမ်းအင်ကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်အတွက်စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။ ထို့ကြောင့်စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုသည်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းစွမ်းအင်အသုံးစရိတ်၏စုစုပေါင်းပမာဏကိုဆုံးဖြတ်ရန်သာမကတိကျသောလုပ်ဆောင်မှုများကိုခွဲဝေချထားရန်လည်းပါ ၀ င်သည်။
ကျနော်တို့စွမ်းအင်အလွယ်တကူရရှိနိုင်သည့်အခါ, စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်နှစ်ခုမူလတန်းအကြောင်းပြချက်များအတွက်, adapter အကျိုးရှိသောရဝုဏ်ထဲကနေစတင်ပါ။ ပထမဦးစွာကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကျန်းမာရေးနှင့်အသက်ရှည်ဖို့သိသိသာသာအထောက်အကူမှမရေမတွက်နိုင်သောလေ့လာမှုများမှာပြထားပြီး (Holloszy et al ။ , 1985; Samorajski et al ။ , 1985; Paffenbarger et al ။ , 1986; Holloszy, 1988; Helmrich et al ။ , 1991; Greendale et al ။ , 1995; Booth et al ။ , 2000; Alevizos et al ။ , 2005; LaMonte et al ။ , 2005; Warburton et al ။ , 2006; Gaesser, 2007; Huffman et al ။ , 2008; Hawley နှင့် Holloszy, 2009; Mercken et al ။ , 2012) ။ ရှားပါးမှုအခြေအနေတွင်တိရိစ္ဆာန်များသည်အစာရှာရန်ကြိုးစားအားထုတ်ရမည်။ သို့သော်များစွာသောအခြေအနေများအောက်တွင်သူတို့သည်မကျင့်။ များပြားသောအခြေအနေများကိုတုန့်ပြန်သောအားဖြင့်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်ကိုတိုးမြှင့်ပေးသောစနစ်သည်လှုပ်ရှားမှုအဆင့်နှင့်ကျန်းမာရေးကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီးအနည်းဆုံးတိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်အနေဖြင့်သားကောင်၏ညစာစားရန်အဆီနှေးနေခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည်။ ထို့အပြင်စွမ်းအင်ရရှိပါကတိရိစ္ဆာန်များအား၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အနာဂါတ်တွင်အသုံးချနိုင်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုပိုမိုလေ့လာနိုင်ရန်ရှာဖွေခြင်းမှရရှိသောသတင်းအချက်အလက်အားသာချက်ရှိသည်။ဘီရန်း et al ။ , 2007) ။ ထို့ကြောင့်စွမ်းအင်ရရှိသောအခါအသုံးစရိတ်နှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစူးစမ်းလေ့လာမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေရန်ယုတ္တိရှိသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်စွမ်းအင်ရှားပါးသောအခါတိရစ္ဆာန်သည်၎င်း၏စွမ်းအင်ကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပတ်သက်သောအသိပညာကိုအမြတ်ထုတ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤနေရာတွင်ဖွံ့ဖြိုးဆဲယူဆချက်တွင်အကျိုးရလဒ်ဖြစ်စဉ်များတွင် dopamine ၏အခန်းကဏ္ specific သည်စွမ်းအင်ကိုတိကျသောလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများခွဲဝေရန်ယန္တရားတစ်ခုဖြစ်သည်။
အကောင်းဆုံးစွမ်းအင်ခွဲဝေချထားပေးရန်ရန်, နှစ်ဦးကိုမူလတန်းလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလိုအပ်သည်။ ပထမဦးစွာသက်ရှိပထမဦးဆုံးဌာန၌လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်လုပ်ရပ်များ၏တန်ဖိုးကိုဆုံးဖြတ်ရန်ရှိပါတယ်။ ဒုတိယ, သက်ရှိအမူအကျင့်ရွေးချယ်မှုအောင်သည့်အခါသူတို့အတန်ဖိုးများအကောင့်ထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားရပါမည်အဘယ်အရာကိုဒီဂရီမှဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်ကြောင်း: ဘယ်လိုချွေတာသို့မဟုတ် "တန်ဖိုးသတိ" အသုံးစရိတ်ဖြစ်သင့်သလဲ dopamine နဲ့ဆုလာဘ်၏နှစ်ခုထီးအမြင်များသည်အားဖြည့်သင်ယူမှုနှင့်မက်လုံးပေး-salience ယူဆချက်အဲဒီနှစ်ခုရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုသည်။ အဆိုပါကဏ္ဍများအတွက်ကျနော်တို့လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်စူးစမ်းလေ့လာ-exploit ဝင်ရိုး၎င်းတို့၏အလှူငွေ (ပုံနှစ်ခုလုံးကိုဆနျးစစျအောကျတှငျ 1TD သင်ယူမှုမော်ဒယ်များ၏စည်းကမ်းချက်များ၌) သွန်း။
Dopamine နှင့်စစ်ကူသင်ယူ: Value ကိုစာရင်းကိုင်
နိဒါန်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဟူသောဝေါဟာရကို "ဆုလာဘ်" စိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးစေနိုင်ပါတယ်။ ဤတွင်ကျနော်တို့အနေနဲ့သတင်းအချက်အလက်ရှုထောင့်ချမှတ်နှင့်အပြုသဘော valenced ရလဒ်ကိုသတင်းအချက်အလက်အဖြစ်ဆုလာဘ်သတ်မှတ်။ ဖြေရှင်းခံရဖို့အဓိကဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခန်းကဏ္ဍ dopamine အနာဂတ်ရွေးချယ်မှုမှဆုလာဘ်သမိုင်းချိတ်ဆက်ကစားအရာဖြစ်တယ်။ အားဖြည့်သင်ယူမှုအမြင်များ, အရှင်သင်ယူမှုဖြန်ဖြေ, ဆိုလိုသည်မှာ, အပြုသဘောရလဒ်သတင်းအချက်အလက်, dopamine ဆုချတုံ့ပြန် corticostriatal plasticity modulates ကြောင်းငြင်းခုန် အကွောငျး တန်ဖိုးရှိသောဖြစ်ကြောင်းလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်လုပ်ရပ်များ။ စိတ်ခွန်အားနိုးအမြင်များ, အထူးသမက်လုံးပေး-salience, dopamine အဆိုပါ modulates ကြောင်းအကြံပြု စကားရပ် အရင်ကတန်ဖိုးများ (မက်လုံးပေး) သင်ယူခဲ့တယ်။ လက်ရှိအယူအဆတစ်ခု TD သင်ယူမှုမူဘောင်အတွင်းနှစ်ဦးစလုံးလွှမ်းခြုံ။
ယာယီခြားနားချက်မော်ဒယ်များအပြုအမူလေ့လာအားဖြည့်သင်ယူမှုဖျန်ဖြေအောင်မြင်စွာထိုကဲ့သို့သော dopamine နှင့် Basal ganglia အဖြစ်ဘယ်လိုအာရုံကြောအလွှာ, နားလည်သဘောပေါက်ဖို့လျှောက်ထားခဲ့ကြကြောင်းအားဖြည့်သင်ယူမှု algorithms တစ်လူတန်းစားဖြစ်ကြသည်။ ဤအမော်ဒယ်များအတွင်းမှာပဲလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်လုပ်ရပ်များသူတို့အားလှုံ့ဆော်မှုသို့မဟုတ်လုပ်ရပ်များနှင့်ဆက်စပ်အားလုံးမျှော်လင့်ထားသည့်အနာဂတ်ဆုလာဘ်ထည့်သွင်းမယ့် "value" တာဝန်ပေးအပ်ထားပါသည်။ အချိန်တခုခုပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါနှင့်အချိန်အတွက်နှုးကတိုးပြီးရှေ့ဆက်တိရစ္ဆာန်ရွေ့လျား, အဆက်ဆက်သည်ပြည်နယ်များ (ဆိုလိုသည်မှာလှုံ့ဆော်မှု၏ configurations, လုပ်ရပ်တွေကို, ဆုလာဘ်) မှတဆင့်တိုးတက်စီခြေလှမ်းမှာကြိုတင်ခန့်မှန်း (forward အဖြစ်t - 1) အမှန်တကယ်အချိန်ကလက်ခံရရှိခဲ့ရာမှနှိုင်းယှဉ်နေပါတယ် t ပေါင်းအနာဂတျမှာမျှော်မှန်းထားသည်ဆုလာဘ်ကျန်ရှိသောအချိန်တန်ဖိုးကိုခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ပါသည် t။ တစ်ဦးခန့်မှန်းအမှားဟုခေါ်ကွာဟမှု, မှာကြိုတင်တန်ဖိုးကိုလည်းမရှိဆိုပါက t - ကြောင်းပြည်နယ်နောက်တဖန်ကြုံတွေ့သောအခါပိုမိုတိကျပါလိမ့်မည်သို့မှသာ 1 ချိန်ညှိနေသည်။ တိရစ္ဆာန်ဖို့အချိန်အတွက်ရှေ့ဆက်လှုံ့ဆျောပေးသည့်အခါ t + 1, တူညီတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်ပေါ်လိမ့်မယ်, ဒီအချိန်ခန့်မှန်းတန်ဖိုးကိုချိန်ညှိ t မှာအမှန်တကယ်ဆုလာဘ်ကနှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့် t + 1 ပေါင်း၏အနာဂတ်မျှော်မှန်းတန်ဖိုးထက် t ဒါကြောင့်အပေါ် 1 နှင့် + ။ နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. TD ပြည်နယ်များ, "ကျန်ရှိနေသေးသော" အနာဂတ်ဆုလာဘ်၏၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုးကိုခန့်မှန်းနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ၏တစ်ခုလုံးကိုဆက်ခံသောကွောငျ့ပျေါပေါကျ, တစ်ကြိမ်ခြေလှမ်းချိန်ညှိနေသည်။ ဒါဟာအနာဂတ်ဆုလာဘ်၏တိကျသောခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်ကြောင်းလုပ်ရပ်များ-ကွဲပြားခြားနားသောပြည်နယ်များ-လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်အတူဆက်နွယ်တန်ဖိုးများဒီစုဆောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ တိုတိုမှာတော့အဲဒါကိုကဲ့သို့တိရစ္ဆာန်, အစဉ်မပြတ်သည်အဘယ်မှာရှိစမ်းသပ်မှုများနှင့်အမှားသင်ယူနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်တစ်ခု algorithm ကိုဖြစ်ပါသည်, မီဒီယာတွေဟာဘာဖြစ်လို့ res အတွက်နှင့်အထူးသဖြင့်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်လုပ်ရပ်များ၏တန်ဖိုးထားတဲ့တိကျမှုခန့်မှန်းချက်အတှေ့အကွုံမှတဆင့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတဖြည်းဖြည်း accrues ။
ယာယီခြားနားချက်မော်ဒယ်များနှစ်ခုသော့ချက်လုပ်ငန်းဆောင်တာရှိသည်။ ပထမဦးဆုံးသူတို့သင်ယူကြသည်။ ခန့်မှန်းမှားယွင်းမှုများအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ခု update ကိုအုပ်စိုးမှုကို အသုံးပြု. အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့, သူတို့ကလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်လုပ်ရပ်များနှင့်ဆက်စပ်ကြိုတင်တန်ဖိုးများကို adjust ။ ဒုတိယအချက်မှာသူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပါစေ။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်တန်ဖိုးများကိုအစုတခုရှိတယ်တစ်ချိန်ကထိုတန်ဖိုးများလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုကြသည်ကိုဘယ်လိုများအတွက်စည်းကမ်းလည်းမရှိဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနှစျခုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအသီးသီးနှစ်ခုလေ့ alpha အဖြစ်လူသိများ parameters တွေကို, သင်ယူမှုမှုနှုန်းနှင့် beta ကို, ကို "အပူချိန်," နဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်။ အဆိုပါလေ့လာသင်ယူနှုန်းကိုအသစ်သောသတင်းအချက်အလက်တန်ဖိုးများ, အဟောင်းနှင့်တစ်ဦးတည်ထောင်ဆန့်ကျင်တွက်ဆအသစ်သောသတင်းအချက်အလက်နှစ်ဦးစလုံးထူထောင်ပွောငျးလဲ "မေ့လျော့၏ပြတင်းပေါက်။ " ဒီအပူချိန် parameter သည်အရာသည်လက်ရှိတန်ဖိုးကသတင်းအချက်အလက် (ဆိုလိုသည်မှာ, သမိုင်းဆုချ) ဘက်လိုက်မှုအရေးယူရွေးချယ်ရေးဖို့ဒီဂရီဆုံးဖြတ်သည်, မကြာခဏအဘယ်အရာကိုဒီဂရီမှဆုံးဖြတ်သည် သည် "စူးစမ်းလေ့လာ-exploit" parameter သည်အဖြစ်ရည်ညွှန်း။
သိသိသာသာအထောက်အထား (ဒီနေရာမှာပြန်လည်သုံးသပ်မည်မဟုတ်ပါသောအားဖြည့်လေ့လာသင်ယူခြင်းနှင့် corticostriatal plasticity ဖြန်ဖြေအတွက် dopamine များအတွက်အခန်းကဏ္ဍထောက်ခံပါသည်ဂူ et al ။ , 1996; Schultz et al ။ , 1997; Reynolds ကနှင့် Wickens, 2002; Schultz, 2002, 2010; ကင်နွန်နှင့် Palmiter, 2003; ပညာရှိ 2004; Berridge, 2007; goto et al ။ , 2007; Redish et al ။ , 2007; Robbins နှင့်ရောဘတ်, 2007; Salamone, 2007; Schultz, 2007; ဒါယန်းသည်နှင့်ထို, 2008; Kheirbek et al ။ , 2008, 2009; Redgrave et al ။ , 2008; Kurth-Nelson နှင့် Redish, 2009; မေတ္တာရှင်, 2010; Lüscherနှင့် Malenka, 2011) ။ ဤသည် learning function ကိုအဓိကအားတစ်မီလီစက္ကန့ timescale အပေါ် operating phasic dopamine လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်နှင့်တိုက်ရိုက်ဆုလာဘ်ကိုကိုယ်စားပြုယုံကြည်မပေးပါ။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့အစား, phasic dopamine ခန့်မှန်းအမှားအယွင်းများဝှက်ယုံကြည်နေသည်, TD သင်ယူမှုကနေဆွဲ။ မျှော်လင့်ဆုလာဘ်သို့မဟုတ်မျှော်လင့်ထားသည့်ဆုလာဘ်များပျက်ကွက် (အချက်ပြခြင်းဖြင့်Schultz et al ။ , 1997; Schultz, 2007; Flagel et al ။ , 2010; ဘရောင်း et al ။ , 2011; နေ့ et al ။ , 2011), phasic dopamine corticostriatal plasticity အပေါ်သက်ရောက်မှုမှတဆင့် Synaptic အလေးပြောင်းလဲနေဖြင့်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်လုပ်ရပ်များနှင့်အတူဆက်စပ်တန်ဖိုးများကို update ။ တစ်ဦးသဘောအရတစ်ဦးစာရင်းကိုင် function ကိုလက်ရှိအယူအဆအတွင်းမှာပဲကျနော်တို့ကိုလက်မခံခြင်းနှင့်အမျှတန်ဖိုးကကို update အတွက် phasic dopamine ၏ဤ function ကို ်. : dopamine, set ဖန်တီးသို့မဟုတ်မတရားဖမ်းဆီးစကေးတန်ဖိုးကိုပေမယ့် function တိကျစွာရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့သင်ယူခြင်းပြုပြင်မွမ်းမံရန်သင်ကြားမှု signal ကိုထောက်ပံ့နေသည်ပါဘူး လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်လုပ်ရပ်များနှင့်ဆက်စပ်တန်ဖိုးကို။ မဆိုအောင်မြင်သောဘတ်ဂျက်၏အခြေခံဝိသေသနံပါတ်များညာဘက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်: ရိုးရှင်းစွာ ထား. , dopamine ၏ဤ function ကို "တန်ဖိုးညာဘက်ရ" ဖို့ကြိုးစားနေသည်။ အဲဒီအားဖြည့်သင်ယူမှုအတွက် dopamine များ၏အလွန်အမင်းအသေးစိတ်နှင့် mechanistic လုပ်ဆောင်ချက်များကိုတိရစ္ဆာန်ယင်း၏ပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါသည် စနစ်တကျဖြစ်သည် ပိုကောင်းယင်း၏ရရှိနိုင်စွမ်းအင်ခွဲဝေချထားပေးရန်နှင့်အသုံးချမှ။
Dopamine နှင့်ယ့-Salience: စွမ်းအင်ဘတ်ဂျက်ခွဲဝေ
dopamine ၏မက်လုံးပေး-salience အမြင်ဆန့်ကျင်ဘက်အတွက်, dopamine အဆိုပါ scales ကြောင်းစောဒကတက်သည် သက်ရောက်မှု အမူအကျင့်ရွေးချယ်မှုအပေါ်ဆုလာဘ်-ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုများ (Cagniard et al ။ , 2006b; Berridge, 2007) ။ ဒါက dopamine လှုံ့ဆော်မှုဘက်လိုက်မှုအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်သောမက်လုံးပေးတန်ဖိုးဒီဂရီ modulates ဖြစ်ပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်တိုးမြှင့် dopamine မက်လုံးပေးတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အစာစားချင်စိတ်အပြုအမူတက်ချုံ့ချဲ့အဖြစ်ရှုမြင်လျက်ရှိ၏ ကြောင်း သာ. ကြီးမြတ် inducing ဖြစ်ပါတယ် "လို။ " ဒီမြင်ကွင်းကိုအထက်တွင်ဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်း, တိုးမြှင့်ရည်မှန်းချက်လိုက်စားခြင်းနှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုအတွက် dopamine ရလဒ်များကိုတိုးမြှင့်စာပေပြ၏ဆယ်စုနှစ်တွေနဲ့ကိုက်ညီသည်။ အနှစ်သာရအတွက်, ဒီတိုးမြှင့်အဖြစ် conceptualized စေခြင်းငှါ အသုံးပြုခြင်း ဆုလာဘ်သင်ယူမှု၏: ဆုလာဘ်တန်ဖိုးကိုအမူအကျင့်ရွေးချယ်မှုအပေါ်တစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောဘက်လိုက်မှုပြုပြင်။ သို့သော်တိုးမြှင့်ခေါင်းပုံဖြတ်ထဲမှာ dopamine ရလဒ်များကိုတိုးမြှင့်သည်မှန်လျှင်, တဦးတည်းယုတ္တိနည်းအ dopamine လျော့ကျလာ သာ. ကြီးမြတ်တူးဖော်ရေးအတွက်ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ထားလိမ့်မယ်, ဆိုလိုသည်ကားအမူအကျင့်ဖြစ်လိမ့်မည် နည်းသော ဆုလာဘ်သတင်းအချက်အလက်များအားဖြင့် biased ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏အသိပညာမရှိ data တွေကိုလျော့နည်းသွား dopamine ၏အကျိုးဆက်အဖြစ်တိုးချဲ့တူးဖော်ရေးသရုပ်ပြပါပြီ။ အဲဒီအစား, dopamine တသမတ်တည်းလျော့နည်းသွားလှုပ်ရှားမှုနှင့်ရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်လျော့နည်းသွားသည်။ အထက်ဖော်ပြထားတဲ့အမူအကျင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အိမ်မှာလှောင်အိမ်လေ့လာမှုမှာကျနော်တို့မွငျ့မား dopamine ဆုလာဘ်သမိုင်းနှင့်ရှေးခယျြမှုအကြားနားချင်းဆက်မှီလျော့နည်းသွားကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့မျက်နှာသာ ရှာဖွေရေးတိုးမြှင့် dopamine ၏အကျိုးဆက်အဖြစ်တိုးချဲ့ရှာဖွေတူးဖော်ခွင့်လှုပ်ရှားမှုဖေါ်ပြခြင်းပွင့်လင်း-Field လေ့လာမှုများဆယ်စုနှစ်များစွာနှင့်အတူတသမတ်တည်းမဟုတ်ဘဲခေါင်းပုံဖြတ်, (ဥပမာ, Zhuang et al ။ , 2001) ။ လက်ရှိအယူအဆ, Humphry နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (နေဖြင့်မကြာသေးမီကွန်ပျူတာအလုပ်နှင့်ကိုက်ညီHumphry et al ။ , 2012) လုပ်သူများ dopamine အဆိုပါ Trade-off ရှာဖွေရေးနှင့်ခေါင်းပုံဖြတ်အကြား modulate နိုင်သည်ကိုသရုပ်ပြပါ။ သူတို့ရဲ့မော်ဒယ်မှာတော့ဒီ Trade-off အပေါ် dopamine ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများရှုပ်ထွေးပြီးအာရုံစူးစိုက်မှု-မှီခိုနေကြပေမယ့်မြင့်မားတဲ့ dopamine ရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးအပြုအမူသွေးဆောင်နိုင်သည်ကိုညွှန်ပြ။
ကျနော်တို့ dopamine ပေးသောဆုလာဘ်တန်ဖိုးကိုအမူအကျင့်ရွေးချယ်မှုသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့ဒီဂရီ scales ဘယ်မှာ dopamine ၏မက်လုံးပေး-salience အမြင်, စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်၏ dopaminergic စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အရေးပါ effector ယန္တရားဖမ်းယူကြောင်းတင်ပြသည်။ ရှာဖွေရေးနှင့်ခေါင်းပုံဖြတ်အကြားချိန်ခွင်လျှာပြောင်းလဲပစ်အသုံးပြုပုံ dopamine စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်၏ခွိုးခွံခြှတောထိန်းညှိ။ မက်လုံးပေး-salience ၏လက်ရှိသီအိုရီမတူဘဲ, သို့သော်ကျနော်တို့ dopamine အကြမ်းဖျင်းကျယ်ပြန့်မှုဖြင့်ဘာကနေဆန့်ကျင်ဘက်ဦးတည်လုပ်ဆောင်သည်ဟုငြင်းခုန်: dopamine မျက်နှာသာ ရှာဖွေရေး; ကြောင်းဖြစ်ပါသည်, လျော့ Humphry et al ၏လုပျငနျးအဖြစ်သော်လည်းဆုလာဘ်တန်ဖိုးကိုအားဖြင့်အမူအကျင့်ရွေးချယ်မှုဘက်လိုက်မှု။ (Humphry et al ။ , 2012) ပြ, dopamine ၏ဤ function ကို၏တိကျသောစစ်ဆင်ရေးရှုပ်ထွေးဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ ဒီအမြင်အတွက်တိုးမြှင့် dopamine function ကိုတို့ကလေ့လာတွေ့ရှိဆုလာဘ်လိုက်စားအတွက်တိုးမြှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုမတိုးမြှင့်ဆုလာဘ်တန်ဖိုးကို၏အကျိုးဆက်အဖြစ်ပေမယ့်တစ်ဦး dopaminergic signal ကို၏ရလဒ်အဖြစ်ပေါ်ပေါက် အသုံး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်၏လိုက်စားအတွက်လျော့နည်းချွေတာစွမ်းအင်နှင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။
အားဖြည့်သင်ယူမှုအတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍမှတဆင့်, (phasic) dopamine, တန်ဖိုးကိုအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူရန်ပုံအတွက်ဒေါင်လိုက်ပုဆိန်၏အကွာအဝေးစေတယ်, ဖြစ်သော်လည်း 1 တန်ဖိုးအားကိုယ်စားပြုခြင်းမရှိပါ se နှုန်းပိုမိုတန်ဖိုးအပြောင်, ဒါပေမယ့်ထားတဲ့တန်ဖိုးများကိုထူထောင်နိုင်ရန်ဒီဂရီကနေ ဘက်လိုက်မှု သို့မဟုတ်အကြီးအကျယ်အနည်းငယ်မျှသာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှရှေးခယျြမှု (exploit) (စူးစမ်း) လွှမ်းမိုးနေတဲ့စဉ်ဆက်ပေါ်အထိတိုက်ရိုက်အပြုအမူရွေးချယ်မှု။ ဒီအလျှော့ခေါင်းပုံဖြတ်ရှာဖွေရေးနှင့်ပိုမိုစွမ်းအင်အသုံးစရိတ်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်စဉ် သာ. ကြီးမြတ်ခေါင်းပုံဖြတ်အသုံးစွမ်းအင်များအတွက်ဆုလာဘ်ကောင်းလာတာပါဘယ်မှာဟာချွေတာဝင်ရိုးအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်စေမည့်မည်။
လေ့လာသင်ယူထားသည့်တန်ဖိုးများကိုမည်ကဲ့သို့နှင့်မည်မျှအတိုင်းအတာအထိတန်ဖိုးထားသည်ကိုတိုက်ရိုက်အပြုအမူဆိုင်ရာရွေးချယ်မှုများသည်အချက်များများစွာအပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သက်ရှိများ၏အတွင်းပိုင်းပတ် ၀ န်းကျင်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကာသက်ရှိများ၏စိတ်အားထက်သန်မှုအခြေအနေ၊ The ပြင်ပ ပတ်ဝန်းကျင်ဆုလာဘ်များအထူးသရရှိမှု, အထူးသဖြင့်စွမ်းအင်, အဖြစ်ကောင်းစွာအကောင့်ထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားရန်လိုအပ်ပါသည်။ အထက်တွင်ဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်း, ပတ်ဝန်းကျင်၏ပေါများကြွယ်ဝတိရစ္ဆာန်က၎င်း၏စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်နှင့်မည်မျှကြောင့်အကျယ်ချဲ့ကြိုတင်သင်ယူမှု exploit ရန်လိုအပ်သည်နှင့်အတူဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်ကိုဘယ်လိုချွေတာဆုံးဖြတ်သည်။ ထို et al ။ (2007) လုပ်သူများ dopamine, အချိန်ကျော်အမူအကျင့်သန်စွမ်းဖို့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ဆုလာဘ်၏ဆွေမျိုးများစွာသောသို့မဟုတ်ရှားပါးမှုဆက်သွယ်ကြောင်းတရားဝင်ပျမ်းမျှအားဆုလာဘ် encodes ကြောင်းအကြံပြုခဲ့ကြသည်။ ထိုနေဖြင့်အဆိုပြုပုံစံများတွင်ပိုမိုမြင့်မားပျမ်းမျှအားဆုလာဘ်အခွင့်အလမ်းစရိတ်များလျှော့ချရန် သာ. ကွီးမွတျအမူအကျင့်သန်စွမ်း induces; သောကပိုရောင်စုံအဖြစ်ဖော်ပြ, လှုပ်ရှားမှုအားဖြင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်း, ပိုမိုကြွယ်ဝသောပတ်ဝန်းကျင်က "ပျင်းရိခြင်းအကုန်ကျ။ " စွမ်းအင်ရရှိနိုင်မှုအပေါ်အထူးအာရုံစိုက်ကျနော်တို့လုပ်သူများ dopamine ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်စွမ်းအင်၏ကြွယ်ဝခြင်းသည်သို့မဟုတ်ရှားပါးမှုအချက်ပြလိုက်ခြင်းသောဤအမြင်အားမျှဝေ အချိန်ပို။ သို့သော်လက်ရှိအမြင်ထက်အခွင့်အလမ်းစရိတ်များလျှော့ချရန် သာ. ကြီးမြတ်ခေါင်းပုံဖြတ် inducing အဖြစ် dopamine နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တိုးလာသန်စွမ်းကြည့်ရှုအတွက်ကျနော်တို့တိုးလာ dopamine စွမ်းအင်ကြွယ်ဝသောစည်းစိမ်ထင်ဟပ်နှင့်ပိုမိုစွမ်းအင်အသုံးစရိတ် induces ကြောင်းအကြံပြုပေမယ့် နည်းသော ခေါင်းပုံဖြတ်; ကြောင်းတူးဖော်ရေး (သို့သော်မပေးလှုပ်ရှားမှု) မျက်နှာသာ, လျော့နည်းစွမ်းအင်ချွေတာအပြုအမူဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကကျယ်ပြန့် (သင်ယူတန်ဖိုးများကိုတစ်ဦးရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားတစ်ခုသို့မဟုတ်အလေ့အထစနစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုယူဆရသည်ဒေါ် et al ။ , 2005; Balleine et al ။ , 2007), (အသီးသီး, အ dorsomedial နှင့် dorsolateral striatum နှင့်အတူမကြာခဏဆက်စပ်ယဉ်များနှင့် Knowlton, 2006; Balleine နှင့် O'Doherty, 2010) ။ TD မော်ဒယ်များမှာအဆုံးစွန်မှာ "cache ကို" သို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်လုပ်ရပ်များ၏တန်ဖိုးကို inscrutable ရှိရာ "မော်ဒယ်-အခမဲ့" system အဖြစ်ချတတ်၏ သောသူတို့ကိုတန်ဖိုးများကိုစာမေးပွဲအဘို့အမရရှိနိုင်ဆင်းသက်လာခဲ့ကြပုံကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဆနျ့ကငျြ, ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူပြည်နယ်များနှင့်၎င်းတို့၏ဆက်စပ်တန်ဖိုးကိုတစ်ဦး "သစ်ပင်" အတိအလင်းတိရစ္ဆာန်တမင်တကာမဆိုအရွက်မှာတနျဖိုးဆင်းသက်လာပုံကိုဆုံးဖြတ်ရန်အပင်၏အသီးကိုရှာခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်နိုင်သောထိုကဲ့သို့သောကိုယ်စားပြုထားရာ "မော်ဒယ်-based" စနစ်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည် လက်ရှိစိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်များဆန့်ကျင်သူတွေကိုတန်ဖိုးများ။ အသစ်သောသင်ယူမှုဖို့အရေးကြီးအာရုံမခံစားနိုင်သောမဟုတ်သော်လည်းမတူဘဲ, အလေ့အကျင့်, ဒါမှမဟုတ် cache ကိုစနစ်က (စိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်မှအာရုံမခံစားနိုင်သောဖြစ်ဖို့ထင်နေသည်Balleine နှင့် O'Doherty, 2010) ။ အဆိုပါ cached တန်ဖိုးကိုလက်ရှိပန်းတိုင်များနှင့် ပတ်သက်. "ဆန်းစစ်" မဖွစျနိုငျတိကျစွာသောကွောငျ့, cached တန်ဖိုးများပေါ်တွင်အခြေခံလေ့အပြုအမူကြောင့်အပြုအမူကားမောင်းသည့် cached တန်ဖိုးကို updated သည်အထိပင်လှုံ့ဆျောမှုမရှိခြင်းအတွက်တင်ဆက်မှုလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်ထုတ်လွှတ်လိမ့်မည်။ TD မော်ဒယ်များမှာအပူချိန် parameter သည်သူတို့တစ်တွေ cache ကို, မော်ဒယ်-အခမဲ့သို့မဟုတ်မော်ဒယ်-based စနစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်းရှိမရှိ, ဆိုလိုသည်မှာထိုတန်ဖိုးများ၏အရင်းအမြစ်နှင့် ပတ်သက်. မရှိဘဲဘက်လိုက်မှုအပြုအမူတန်ဖိုးထားမှရသောဘွဲ့ညှိ။ မေးခွန်းပေါ်ပေါက်ဖြစ်လျှင်, စူးစမ်း-exploit ၏ dopamine စည်းမျဉ်း, ဒီမှာအကြံပြုရှိမရှိအဖြစ်, အလေ့အကျင့်များနှင့်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားမှုစနစ်နှစ်ခုလုံးမှအညီအမျှကျနော်တို့မဖြေနိုင်မေးခွန်းတစ်ခုသက်ဆိုင်ပါသည်။ လျှော့ချ dopamine အဖြစ် Insofar ထိန်းချုပ်မှုကြိုတင်သင်ယူမှုအပြုအမူကျော်ဆုလာဘ် / စွမ်းအင်ဆင်းရဲသားကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာနှင့် hypodopaminergia, အပြုအမူအပေါ်ထူထောင်သင်ယူမှုနှင့်တန်ဖိုးများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုတိုးပွားလာအသုံးပြုပုံအခြေစိုက်အလေ့အထအားဖြင့်ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်ထိန်းချုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်စေခြင်းငှါထားပြီးတိုးပွားလာ, ခေါင်းပုံဖြတ်, ခြိုးခြံချွေတာပါများနှင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးသွေးဆောင်ခြင်းငှါ စနစ်များ, ဒီရှင်းလင်းစွာထပ်မံစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလိုအပ်သည်သော်လည်း။
အဆိုပါ GO နှင့် NOGO Pathways ပြန်လည်ဆွေးနွေးရန်: စွမ်းအင်အသုံးစရိတ် Dopamine နှင့်ရွှေ့ပြောင်း
ဆုနှင့်မော်တာထိန်းချုပ်မှုနှစ်ခုလုံးတွင် dopamine ၏အခန်းကဏ္ with နှင့်ကျယ်ပြန့်စွာဆက်စပ် dopamine ၏အဓိကပစ်မှတ်မှာ striatum (Albin et al ။ , 1989, 1995; အလက်ဇန်းဒါး et al ။ , 1990; Mink, 1996; Everitt နှင့် Robbins, 2005; Cagniard et al ။ , 2006b; Balleine et al ။ , 2007; Nicola, 2007; DeLong နှင့် Wichmann, 2009; ပညာရှိ 2009; Haber နှင့် Knutson, 2010; Humphry နှင့် Prescott, 2010; Sesack နှင့်တော်ကကျေးဇူး, 2010) ။ အဆိုပါ striatum (cortical သွင်းအားစုများအတွက်အဓိက entry ကိုအမှတ်ဖြစ်ပါသည်Bolam et al ။ , 2000) ကလူသိများတဲ့ Re-တွေဟာလည်း corticostriatal ကွင်း (ပါဝင်သည်, နောက်ဆုံးမှာ cortex မှပြန်လာသည့် Basal ganglia မှတဆင့်လုပ်ငန်းများ၌ဖြစ်ကြောင်းအလက်ဇန်းဒါး et al ။ , 1990; အလက်ဇန်းဒါးနှင့် Crutcher, 1990; အလက်ဇန်းဒါး, 1994; Middleton နှင့် Strick, 2000; Haber, 2003; Lehéricy et al ။ , 2005) ။ Corticostriatal အပြောင်းအလဲနဲ့ ((ထို hyperdirect လမ်းကြောင်းဖယ်ထုတ်ပြီး) နှစ်ခုအပြိုင်လမ်းကြောင်း, လွယ်ကူချောမွေ့သောတိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်မှတဆင့်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့် corticostriatal throughput တားစီးAlbin et al ။ , 1995; Mink, 1996), အသီးသီး, တစ်ခါတစ်ရံ (ထို GO နှင့် NOGO လမ်းကြောင်းအဖြစ်ရည်ညွှန်းCohen ကိုနှင့်ဖရန့်, 2009) ။ အဆိုပါ NOGO D1 ဖော်ပြနေစဉ် GO လမ်းကြောင်းအများစု (D2 ဖော်ပြSurmeier et al ။ , 2007dopamine လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတိုးလာသည့် facilitatory GO လမ်းကြောင်းအတွက်လှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် inhibitory NOGO လမ်းကြောင်းအတွက်လှုပ်ရှားမှုလျော့ကြောင်းထိုကဲ့သို့သော) ။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် dopamine လျှော့ချခြင်းသည် GO လှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းစေပြီးပါကင်ဆန်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှေးကွေးစေသောဂန္ထဝင်မော်ဒယ်များအတွက်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သော NOGO လှုပ်ရှားမှုပိုမိုများပြားစေသည် (Albin et al ။ , 1989; Mink, 1996) ။ ဒီ dual-လမ်းကြောင်းဗိသုကာများအတွက်ဂန္အလုပ်လုပ်တဲ့ရှင်းပြချက်ဟာ NOGO လမ်းကြောင်း (အရှင်လုပ်ရပ်များ၏သန့်ရှင်းသောကွပ်မျက်ဖွင့်, ယှဉ်ပြိုင်လုပ်ရပ်များနှင့်ဆိုတဲ့စကားလုံးမလိုတော့ဘူးဆူညံသံဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်နေစဉ် GO လမ်းကြောင်းတစ်ဦးကိုရွေးချယ်မော်တာအရေးယူအထီးကျန်နှင့်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်သောစိတ်ကူး "ရွေးချယ်ရေးအာရုံစူးစိုက်" ဖြစ်ပါတယ်Mink, 1996).
ဒါဟာတူညီတဲ့ဗိသုကာ, သို့သော်, စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်ထိန်းညှိတစ်ခု effector ယန္တရားအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်စေမည့်မည်နိုင်ပါ။ အဆိုပါ GO နှင့် NOGO လမ်းကြောင်းများအကြားချိန်ခွင်လျှာပြောင်းလဲအသုံးပြုပုံ dopamine (ထို corticostriatal စနစ်၏စုစုပေါင်း throughput နှစ်ဦးစလုံးထိန်းညှိအဖြစ်က၎င်း၏ selection ပြောင်းလဲပစ်Beeler, 2011) ။ အထူးတိုးမြှင့် dopamine အဆိုပါ GO လမ်းကြောင်းနှာနှင့် NOGO လမ်းကြောင်းမှေးမှိန်။ အဆိုပါ GO လမ်းကြောင်းမှ corticostriatal input ကိုအတွက်ကိုယ်စားပြုအလားအလာလုပ်ရပ်များလုပ်ရပ်များကိုရွေးချယ်ခြင်းအပေါ်ကန့်သတ်လျှော့ချခြင်း, inhibitory NOGO လမ်းကြောင်းအတွက်လျော့နည်းအတိုက်အခံရင်ဆိုင်ရအဖြစ်ဤသည် သာ. ကြီးမြတ်ခြုံငုံ corticostriatal throughput နှင့်ပိုမိုရှာဖွေတူးဖော်ရေးအတွက်ရလဒ်များ။ dopamine လျော့ကျအခါ GO လမ်းကြောင်းမှတဆင့်ရွေးချယ်ထားသောလုပ်ဆောင်ချက်များကို NOGO လမ်းကြောင်း၏ inhibitory သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကျော်လွှားဖို့လုံလောက်ခိုင်မာတဲ့သူဖြစ်ရမည်အဖြစ်မတူဘဲ, သာ. ကြီးမြတ် inhibitory, ခြုံငုံလျော့နည်း corticostriatal throughput နှင့်ပိုမိုအမြတ်ထုတ်မှု NOGO လှုပ်ရှားမှုအပေါ်တစ်ဦးသင်ယူမှုရှုထောင့်အဘို့ (ရှိ ဒီတွေ့ ဖရန့် et al ။ , 2009) ။ ဤသည်ကိုမည်သို့မွငျ့မား dopamine နိုင်ပါတယ်နားလည်သဘောပေါက်များအတွက်အခြေခံကိုထောက်ပံ့ပေး တိုးမြှင့်လာသည် လှုပ်ရှားမှုအလုံးစုံအဖြစ် လြော့ပေါ့စေ လှုပ်ရှားမှု၏ရွေးချယ်မှု, ဆိုလိုသည်မှာ, စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်နှင့်တူးဖော်ရေးတိုးမြှင့်။ ဆနျ့ကငျြ, လျှော့ချ dopamine ခြုံငုံလှုပ်ရှားမှုလျော့ပေမယ့် selection ကိုတိုးမြှင့်, လျော့နည်းသွားစွမ်းအင်အသုံးစရိတ်အတွက်ရရှိလာတဲ့နှင့်တိုးမြှင့်မယ်လို့ အသုံးပြုခြင်း (ပုံ 2) ။ corticostriatal throughput ပြောင်းလဲပစ်အတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကို (များ) ၏တစ်ဦးကအသေးစိတ်ဆွေးနွေးမှု (တခြားနေရာတွေ့နိုင်ပါသည်Beeler, 2011) ။ ဆုလာဘ်အကြောင်းကိုကြိုတင်သင်ယူမှုရသောဖို့ဒီဂရီထိန်းညှိ, အခြားတစ်ဖက်တွင်, တဦးတည်းလက်ပေါ် (ထိန်းသိမ်းရန်-Expendables), အလုံးစုံကိုထိန်းညှိ generalized လှုပ်ရှားမှုနဲ့: ဒီ dual-လမ်းကြောင်းဗိသုကာ, ထို့နောက်ဖော်ပြထားတဲ့နှစ်ခုပုဆိန်တလျှောက်တွင်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်ပြောင်းလဲပစ်ဘို့အလားအလာအခြေခံကိုထောက်ပံ့ပေး အဆိုပါလေ့လာစူးစမ်း-exploit ပုဆိန်အမြတ်ထုတ်သည်။
ပုံ2။ စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်ထိန်းညှိအတွက် corticostriatal throughput ၏တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းမော်ဂျူ၏အခန်းက္ပ။ အဆိုပါ striatum အသီးသီးအများစု D1 နှင့် D2 dopamine receptors ဖော်ပြနှစ်ခုလမ်းကြောင်း, တိုက်ရိုက်, nigrostriatal ( "GO") နှင့်သွယ်ဝိုက်, striatopallidal ( "NOGO") မှတဆင့် Basal gangia မှတဆင့် corticostriatal-thalamocortical ကွင်းမှတဆင့် cortical အပြောင်းအလဲနဲ့ modulates ။ D1 ၏ dopamine တက်ကြွစွာ NOGO လမ်းကြောင်း (အပြာ toned သေတ္တာများ) ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်နေချိန်မှာလည်းသွယ်ဝိုက်၏ inhibitory သြဇာလွှမ်းမိုးမှု dampening နေဖြင့်လှုပ်ရှားမှုလွယ်ကူချောမွေ့ခြင်း, GO လမ်းကြောင်းအတွက် D2 အပေါ်သရုပ်ဆောင် (အနီရောင် toned သေတ္တာများ), dopamine disinhibits corticostriatal throughput စည်းရုံးရေးမှူးများလှုပ်ရှားမှု။ ပြောင်းပြန်နှစ်ခုလုံး corticostriatal throughput ကန့်သတ်ရန်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း, GO လမ်းကြောင်းနှင့် NOGO လမ်းကြောင်း၏ D1 ကမကထပြုခဲ့တားစီး၏ D2 ကမကထပြုခဲ့ disinhibition နုတ်မ dopamine အတွက်လျော့နည်းစေပါသည်။ ဤရွေ့ကား dopamine သက်ရောက်မှု corticostriatal throughput ၏တားစီးညွှန်ပြသည့် NOGO လမ်းကြောင်းများအတွက် corticostriatal throughput နှင့်အနီရောင်ရပ်တန့်မြှား၏ပံ့ပိုးကူညီညွှန်ပြခြင်း, GO လမ်းကြောင်းများအတွက်အစိမ်းရောင်မြှားခြင်းဖြင့်ကိုယ်စားပြုနေကြသည်။ တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်စွမ်းအင်၏အသုံးစရိတ်နှင့်ဖြန့်ဖြူးအပေါ် dopamine လျော့နည်းသွားနှစ်ခုပုဆိန်နှင့်အတူအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအကျဉ်းချုပ်ဖြစ်ပါသည်၏အကျိုးဆက်များ (ထိန်းသိမ်းရန်-အသုံးနှင့်စူးစမ်းလေ့လာ-exploit) စွမ်းအင်တင်းကျပ်ဖြန့်ကျက် (ဆုလာဘ်သတင်းအချက်အလက်အမြတ်ထုတ်အာရုံစိုက်သတ်အသုံးစရိတ်) ၏တစ်ခုတည်းစကေးအပေါ်သည်ပြိုလဲနှိုင်းယှဉ် တင်းကျပ်စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုကိုအနီတို့ကအပြာနှင့်ကျယ်ပြန်စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုကိုကိုယ်စားပြုသည်အဘယ်မှာရှိကျယ်ပြန်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ် (မြင့်သောအသုံးစရိတ်အပြုအမူလှုပ်ရှားမှုများမှစေတနာစိတ်ဖြန့်ဝေ, ဆိုလိုသည်မှာ, တူးဖော်ရေး) ။
Dopamine နှင့်၎င်း၏ထူးထူးအထွေထွေရှိငြားပစ်မှတ်: orchestral သို့မဟုတ်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် BRICS-a-Brac?
ယခင်အပိုင်းမှာတော့ကျနော်တို့ striatum အတွက် dopamine လုပ်ရပ်များ, ကျယ်ပြန့်အားဖြည့်သင်ယူမှုများအတွက်မူလတန်းအလွှာအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်မော်တာထိန်းချုပ်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရအာရုံစိုက်ပါ။ ဦးနှောက်ကိုဖြတ်ပြီး, အရေးကြီးသောစီမံချက်များနှင့်အတူ, ဥပမာအားဖြင့် prefrontal cortex မှကျယ်ပြန့် Dopamine သို့သော်စီမံကိန်းများ။ ထိုမှတပါး, ဘေးဖယ်သည့်ကျယ်ပြန့်လေ့လာခဲ့ nigrostriatal နှင့် mesoaccumbens လမ်းကြောင်း မှစ. , dorsal နှင့် ventral striatum မှထုတ်လုပ်တဲ့နှင့်အသီးသီးမော်တာထိန်းချုပ်မှုများနှင့်အလေ့အကျင့်များနှင့်လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ဆက်စပ်ခြင်း, hypothalamus နှင့်ဆက်စပ်သူများအပါအဝင်အများကြီးလျော့နည်းလေ့လာခဲ့ dopamine အရေးပါရှိပါတယ်, ရှိသမျှသော may (သို့မဟုတ်မပြုစေခြင်းငှါ) အလားအလာကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာစွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုမှကူညီသည်။ တစ်ဦး dopamine နှင့်စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုယူဆချက်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုကွဲပြားခြားနားသောပစ်မှတ်အတွက် dopamine မော်ဂျူညှိနှိုင်းစွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုအထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါဘယ်လိုတောင်းဆိုနေတာတောင်းဆိုနေပြီ။ ဒီနရောမှာကျနော်တို့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဤမေးခွန်းကိုအပေါ်မှနျးနိုငျပါဘူး။
သို့သော်ဤမေးခွန်းကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ခြင်းသည် dopamine ၏အလွန်အရေးကြီးသော“ လုပ်ဆောင်ချက်” သည်လုံးဝမရှိသလားဟူသောမေးခွန်းကိုဖြစ်စေသည်။ သို့မဟုတ်ပါက dopamine သည်မသက်ဆိုင်သောလုပ်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကိုရရှိခဲ့ခြင်းကြောင့် dopamine ၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၏အယူအဆသည်အရူး၏မှားယွင်းမှုကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာနေသော dopamine လုပ်ဆောင်မှုများသည်အချပ်အနှီး၊ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် bric-a-brac၊ ။ ဒီစာပေကနေလူအများယုံကြည်တာကိုနားလည်လာတယ် is အခြို့သောပုံစံသို့မဟုတ်အခြားအတွက် dopamine-အများဆုံးမကြာခဏ "ဆုလာဘ်" အပြောင်းအလဲနဲ့တစ်ခုခြုံငုံ, ခမ်းနားသော function ကို။ ဒါဟာ neurotransmitter ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်အသေးစိတ်အစီအစဉ်များကိုစီစဉ်ခြင်းနှင့်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အပေါ်ပြောင်းလဲသကဲ့သို့, ထိုပီပီတစ်ဦးဆောင်ပုဒ်, ပြီးသားသပ္ပါယ်ကြံ့ခိုင်ရေးအပ်နှင်းထားပြီးအချို့ function ကိုတစ်ဦးထပ်မံတိုးမြှင့်အပေါ်မူကွဲအဖြစ်ပေါ်ထွန်းသည်ဟုစဉ်းစားရန်မိုမဟုတ်ပုံရသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအယူအဆကိုနောက်ဆုံးမှာထင်ရသောကွဲပြားခြားနားအကြားတွင်တစ်ဦး "ဘုံချည်" ကိုရှာမမှန်သောသက်သေပြရင်တောင်သက်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာသည်ဤပုံလူထုကိုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအပြုအမူလိုက်လျောညီထွေအထောက်အကူပြုဖို့အပြန်အလှန်ဘယ်လိုသို့ပိုမိုနက်ရှိုင်းထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးနိုငျသညျ။ "ဆုလာဘ်ဖြန်ဖြေ," ထိုသို့သကဲ့သို့ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်စိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးခြင်း, စာပေအများကြီး၌ဤဘုံပိုင်းခြေအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်နှင့်ကြွယ်ဝသောရလဒ်များရရှိခဲ့သည်။ ဤတွင်ကျနော်တို့အနေနဲ့အခြားရွေးချယ်စရာ, ကျယ်ပြန် function ကို, စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုအကြံပေးချင်ပါတယ်။
ကွဲပြားခြားနားသောအာရုံကြောအလွှာမှာ dopamine အရေးယူစွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုအထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါ, ဘယ်လောက်၏မေးခွန်းကိုပြန်, သာကျွန်တော်တို့ရဲ့အယူအဆ၏ရှုထောင့်ကနေမေးခွန်းပြန်ထင်ဟပ်နိုင်ပါ။ စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုအများကြီးမျိုးပွား, ကြီးထွားမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုကိုတုံ့ပြန်ကဲ့သို့အခြေခံဇီဝဖြစ်စဉ်ကိုဥပဒေနှင့်လိုအပ်ပါတယ် ညှိနှိုင်း ပြင်ပအခြေအနေများကိုတုန့်ပြန်သည့်အလွှာမျိုးစုံမှ ဖြတ်၍ လှုပ်ရှားမှု၊ ပြင်ပကမ္ဘာမှအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုဆုချခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ တစ်ခုတည်းသောရည်မှန်းချက်သို့မဟုတ်ရည်ရွယ်ချက်ဆီသို့အလွှာမျိုးစုံ၏ဤညှိနှိုင်းဖွဲ့စည်းခြင်းသည်မျိုးပွားခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းများကဲ့သို့သောဟော်မုန်းများ၏လက္ခဏာဖြစ်သည်။ dopamine ၏ပျံ့နှံ့သောစီမံချက်နှင့်ပစ်မှတ်များစွာအပေါ်လုပ်ဆောင်မှုများကြောင့် dopamine သည်အာရုံကြောအလွှာပေါင်းများစွာကိုညှိနှိုင်းရန်နှင့်သက်ရှိစွမ်းအင်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောအပြုအမူကို orchestrate ပြုလုပ်ရန်ဟော်မုန်းကဲ့သို့လုပ်ဆောင်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ဟူသောအယူအဆကိုဖျော်ဖြေရန်သွေးဆောင်သည်။ ဝန်ခံရမည်ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်မှန်းဆ (ပေမယ့်ကြည့်ပါ။ ) Ugrumov et al ။ , 2012), က ventral striatum နှိုင်းယှဉ်အဆိုပါ dorsal အတွက်ဒါမှမဟုတ် hypothalamus နှိုင်းယှဉ်အဆိုပါ prefrontal cortex အတွက် dopamine မော်ဂျူ, စွမ်းအင်မှအပြုအမူကပြွီး, တစ်ခုတည်းရည်ရွယ်ချက်ဆီသို့လူထုကိုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားအာရုံကြောအလွှာ၏ညှိနှိုင်းကိုယ်စားပြုမယ်ဘယ်လိုဖြစ်လျှင်, မေးမြန်းဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ပါသည် သက်ရှိများက၎င်း၏ရှင်သန်မှုထွက်အလုပ်လုပ်ရမည်ဖြစ်သည်ရသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်။
Dopamine နှင့်အဝလွန်ခြင်း: တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာအမြင်
မကြာသေးမီနှစ်များတွင်တစ်အစားအသောက်စွဲလမ်းကူး likening အတော်ကြာမြင့်မားသောပရိုဖိုင်းစာတမ်းများ (နဲ့အတူအဝလွန်ခြင်းအတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကိုတခုတခုအပေါ်မှာတိုးမြှင့်အာရုံစိုက်ရှိခဲ့သည်Volkow နှင့်ပညာရှိ, 2005; Trinko et al ။ , 2007; Avena et al ။ , 2008; Corwin နှင့် Grigson, 2009; Dagher, 2009; Davis ကနှင့် Carter က, 2009; Ifland et al ။ , 2009; Pelchat, 2009; ဂျွန်ဆင်နှင့် Kenny, 2010; Volkow et al ။ , 2010) ။ ဤရွေ့ကားသီအိုရီထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုအရှုံးမှဦးဆောငျသော "လို" ခေတ်သစ်အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုအတွက်အလွန်အမင်းအရေးပါတယ်လို့အစားအစာများကဤအရသာရှိတဲ့အစားအစာအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှအလားတူပြုမူခြင်းနှင့်တိုးမြှင့်သွေးဆောင်, အလွယ်တကူရရှိနိုင်သည့်အတွက်အကြံပြု, ဆုလာဘ်ဖြစ်စဉ်များဖြန်ဖြေအတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအာရုံစိုက် စားသုံးမှုကျော်တစ်ဦးစှဲလမျးသူကဲ့သို့ရှိနေသော်လည်းတစ်ဦးချင်းရည်ရွယ်ချက်များ (ကယ်လိုရီစားသုံးမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်Berridge et al ။ , 2010; Berthoud et al ။ , 2011) ။ နှစ်ခုဆန့်ကျင်ဘက်ဒီအပေါ်ကြာ (ရှိပါတယ်Davis က et al ။ , 2007; Davis ကနှင့် Carter က, 2009) ။ ပထမဦးဆုံး၌, တိုးမြှင့် ပုံမှန် homeostatic ထိန်းချုပ်မှုပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်သည်ကြောင်းတိုးလာလှုံ့ဆျောမှုမှအရေးပါတယ်လို့အစားအစာဆောင်နှင့်ဆက်စပ်မြင့်တက်အားဖြည့်ရာမှပေါ်ထွက်လာသော dopaminergic function ကို (Finlayson et al ။ , 2007; Zheng et al ။ , 2009; Avena နှင့် Bocarsly, 2011) ။ အနှစ်သာရမှာတော့ကျနော်တို့ကယ့်ကိုအရသာရှိတဲ့အစားအစာ၏မျက်နှာကိုအတွက် Over-activation dopamine များ၏ဇွဲကကမကထပြုခဲ့ခြင်းကိုယုံကြည်ထားတဲ့ effect ကိုထိန်းချုပ်ရှုံးသည်။ ဆနျ့ကငျြတဲ့ "ဆုလာဘ်-ချို့တဲ့" အယူအဆတစ်ခုအတွက်အဆိုပြုပြီးပါပြီ မစုံမလင်ရှိခြင်း လူတစ်ဦးသို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန် "အကျိုးကိုပျက်ပြယ်ဖြည့်ပါ" ဖို့ကြိုးစားပါတယ်အဖြစ်အလွန်အကျွံစားသုံးမှုထုတ်ပေးထားတဲ့လျော့နည်းသွားဆုလာဘ်အချက်ပြ (ထဲမှာ dopamine function ကိုရလဒ်များကိုအတွက်ဝမ် et al ။ , 2004; Geiger et al ။ , 2009; Kenny, 2010).
လက်ရှိအယူအဆအတွင်းမှာပဲကျနော်တို့တိုးလာ dopamine ဆိုလိုသည်မှာ သာ. ကြီးမြတ်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်နှင့်တူးဖော်ရေးနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ကြောင်းအပြုသဘောဆောင် နည်းသော ကိုယ်အလေးချိန် inducing အတွက် psychostimulants ၏လူသိသက်ရောက်မှုနှင့်အတူတသမတ်တည်းဆုလာဘ်များကအမူအကျင့်ရွေးချယ်မှုဘက်လိုက်မှု, လျော့နည်းစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုမျက်နှာသာနှင့်အဝလွန်ခြင်းကနေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေး, (Vanina et al ။ , 2002; Leddy et al ။ , 2004) ။ ဆနျ့ကငျြ, dopamine စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ခေါင်းပုံဖြတ်ဆိုလိုသည်မှာဆုလာဘ်များကအမူအကျင့်များ သာ. ကြီးဘက်လိုက်မှု induces လျော့နည်းသွားသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့်သိုလှောင်မှုကျော်နှင့်အလေးချိန်အမြတ်အတွက်ရရှိလာတဲ့မျက်နှာသာဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသ, psychostimulants, dopamine (အဓိကအား D2) ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုကြောင်း Anti-psychotic မှမတူဘဲတသမတ်တည်း (ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကိုယ်အလေးချိန်နဲ့ဆက်စပ်ပြီAllison နှင့်ကက်ဆေး, 2001; Vanina et al ။ , 2002), သော်လည်းအတိအကျကိုယန္တရားများမသေချာရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
Leptin, အင်ဆူလင်နှင့် Dopamine: ပွနျလညျသငျ့အရင်းအမြစ်များနှင့်အသုံးစရိတ်တွေ
အဝလွန်ခြင်းအတွက်လျှော့ချ dopamine function ကို၏လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ, အ D2 receptors ၏အထူးလျှော့စကားရပ်, (အကျိုးကိုချို့တဲ့အယူအဆထုတ်လုပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်Blum et al ။ , 2000, 2011) Over-စားသုံးမှုရသောလျှော့ချဆုလာဘ်အချက်ပြဘို့အလျော်ကြေးပေးရန်ကြိုးပမ်းမှုအားဖြင့်မောင်းနှင်သည်။ ဤနေရာတွင်အဆိုပြုထားသည့်အယူအဆမှာတော့ဒီဒေတာကိုအဓိပ္ပာယ်လိမ့်မယ်။ အဝလွန်မှုအတွက်သည်, "တတ်နိုင်သမျှနည်းနည်းလောင်ခြင်းနှင့်ရွှေ့" တစ်ခုသိသာစာရွက်: dopamine function ကိုလျှော့ချတဲ့အခါ, ဒီဆုလာဘ်အချက်အလက်များ၏စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ခေါင်းပုံဖြတ်နှာ။
စိတ်ခွန်အားနိုး dissociation: "လို" မပါဘဲလိုအပ်နေ
ကြော့အလုပ်၏ဆယ်စုနှစ် [တွေ့မြင်စွမ်းအင်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများအချက်ပြကြောင်းပျံ့နှံ့နေတဲ့ဟော်မုန်း, အထူးသဖြင့်အင်ဆူလင်နှင့် leptin, ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အပေါ်လုပ်ရပ်များမှတစ်ဆင့်စားသုံးမှုနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကိုအထောက်အကူဖြစ်စေထိုမေးခွန်းကိုကျော်လွန်သရုပ်ပြပါပြီ Figlewicz နှင့် Sipols, 2010 ] အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့။ NPY, POMC, α-MSH နှင့် AgRP (အပါအဝင်နို့တိုက်ကျွေးရေး၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည့် hypothalamus အတွက်မျိုးစုံပစ်မှတ်အပေါ် homeostatic စွမ်းအင်ချိန်ခွင်လျှာ, leptin နှင့်အင်ဆူလင်လုပ်ရပ်ဖြန်ဖြေအတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍနှင့်အတူတသမတ်တည်းFiglewicz နှင့် Sipols, 2010) ။ ယင်းတွေ့ရှိချက်စွမ်းအင်လိုငွေပြမှုသို့မဟုတ်ပိုလျှံအားပေးအားမြှောက်သို့မဟုတ်အသီးသီးစားသုံးမှုဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်ဘယ်မှာလှုံ့ဆျောမှု၏ drive ကိုလျှော့ချရေးသီအိုရီနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ကြသည်။
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအဝလွန်ခြင်းအတွက်သိသိသာသာတိုး (Ford ကားနှင့် Mokdad, 2008), သို့သော်ဤ homeostatic ယန္တရားများပုံကျရှုံးဘာအဖြစ်မေးစရာများရှိနေပါသည်။ ဒါဟာကျယ်ပြန့် (ဒါခေါ် Non-homeostatic သို့မဟုတ် hedonic နို့တိုက်ကျွေးရေးမြှင့်တင်အားဖြင့်မဟုတ်ဘဲလိုအပ်ချက်မှုတွင်ဖျန်ဖြေရာမှထက် (အစားအစာအပါအဝင်) လှုံ့ဆော်မှုနဲ့ဆက်စပ်အကျိုးကိုတန်ဖိုးကိုထံမှပေါ်ပေါက်ကြောင်းမက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှု-လှုံ့ဆျောမှုဖျန်ဖြေကြောင်းကို midbrain dopamine စနစ်များသည်ဤ homeostatic ပျက်ကွက်ဟုယုံကြည်နေသည်Saper et al ။ , 2002; Zheng နှင့် Berthoud, 2007; Lutter နှင့် Nestler, 2009; Zheng et al ။ , 2009; Berthoud et al ။ , 2011) ။ စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာသက်သေအထောက်အထား (leptin နှင့်အင်ဆူလင်နှစ်ဦးစလုံး midbrain dopamine function ကို modulate နိုင်သည်ကိုအကြံပြုKrügel et al ။ , 2003; Fulton et al ။ , 2006; Hommel et al ။ , 2006; Roseberry et al ။ , 2007; Leinninger et al ။ , 2009) နှင့်အစားအစာလိုက်စားခြင်းနှင့်စားသုံးမှုပြောင်းလဲ (Sipols et al ။ , 2000; Figlewicz et al ။ , 2001, 2004, 2008, 2006; Hommel et al ။ , 2006; Morton et al ။ , 2009; Davis က et al ။ , 2010b).
ရေပန်းစားအမြင်တွင်အချက်အလက်များ၏အလွန်ကြီးစွာသောသဘောတူညီချက်လျော့ကျလာ, အင်ဆူလင်နှင့် leptin နှစ်ဦးစလုံး dopamine function ကိုလျော့ချကြောင်းအကြံပြုပုံ, အလှည့်အတွက်မက်လုံးပေးအစားအစာလိုက်စားခြင်းနှင့်စားသုံးမှုမောင်းနှင်။ အနှစ်သာရ, leptin နှင့်အင်ဆူလင်များတွင်လုံလောက်သောစွမ်းအင်အချက်ပြခြင်းဖြင့်, အစားအစာနှင့်ဆက်စပ်အကျိုးကိုမယုတ်လျော့စေတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့မွတ်မပြေနိုင်သော signal ကိုကိုယ်စားပြု (Morton et al ။ , 2009; Davis က et al ။ , 2010b; Figlewicz နှင့် Sipols, 2010; Opland et al ။ , 2010; Vucetic နှင့် Reyes, 2010) ။ ပြောင်းပြန်, စွမ်းအင်နိမ့်သည်အခါ, leptin နှင့်အင်ဆူလင်ကျဆင်းမှု, dopamine disinhibiting နှင့်အစားအစာ-ရှာမောင်းနှင်တိုးမြှင့်မက်လုံးပေး / ဆုလာဘ်မြှင့်တင်ရန်။ ဒါကယေဘုယျစိတ်ကူး (တိုးပွားလာ leptin နှင့်အင်ဆူလင်ဆုလာဘ်-မောင်းနှင်အပြုအမူလျော့နည်းစေကြောင်းဆန္ဒပြသည့်ဒေတာတွေနဲ့ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည်Carr က et al ။ , 2000; Fulton et al ။ , 2000; Sipols et al ။ , 2000; Figlewicz et al ။ , 2004, 2006, 2007; Hommel et al ။ , 2006; Farooqi et al ။ , 2007; Rosenbaum et al ။ , 2008; Morton et al ။ , 2009) နှင့်, အပြန်အလှန်, သူနဲ့ဆက်စပ်အစားအစာ-ကန့်သတ်, (leptin / အင်ဆူလင်လျော့နည်းသွားဟာဗဲလ်, 2000), (ဆုလာဘ်-မောင်းနှင်အပြုအမူတိုးပွါးကာရိုးနှင့် Meisch, 1980; Carr က, 2007, 2011; Davis က et al ။ , 2010a) ။ တိုတောင်းသောခုနှစ်တွင်ဖွင့်ခြင်းနှင့် dopamine function ကိုထိန်းညှိနှိမ့်ချအသုံးပြုပုံ leptin နှင့်အင်ဆူလင်အစားအစာတွေနဲ့ဆက်စပ်မက်လုံးပေး modulate နှင့်အတော်လေးဖြစ်နိုင်သည် (ယေဘုယျအားဖြင့် sensitivity ကိုဆုချMorton et al ။ , 2006; Davis က et al ။ , 2010a) ။ leptin နှင့် dopamine ၏ဤအကောင့်အလိုလိုသိတတ်သော်လည်း, ဇာတ်လမ်းမည်သို့ပင်ဆိုစေ (ပိုမိုရှုပ်ထွေးစေခြင်းငှါPalmiter, 2007).
အဝလွန်ခြင်းအခြေအနေတွင် leptin / insulin, dopamine နှင့်ဆုလာဘ်အပြုအမူများအကြားဆက်နွယ်မှုသည်ဝိရောဓိဖြစ်နေပြီးဖော်ပြထားသောအယူအဆနှင့်မကိုက်ညီပါ။ ပထမ ဦး စွာ leptin / အင်ဆူလင်အချက်ပြအချက်အလက်များတိုးမြှင့်ကယ်လိုရီစားသုံးမှုနှင့် adiposity နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်မျှော်မှန်းတိုးထက်, အဝလွန်ခြင်း leptin / အင်ဆူလင်မှ sensitivity ကိုလျှော့ချနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် (Arase et al ။ , 1988; Lin က et al ။ , 2001; ဝမ် et al ။ , 2001b; Myers, 2004; Figlewicz et al ။ , 2006; Enriori et al ။ , 2007; Davis က et al ။ , 2010a; Figlewicz နှင့် Sipols, 2010; Koek et al ။ , 2012) ။ ကျနော်တို့မျှော်လင့်ထားစေခြင်းငှါ, စဉ်တွင်ဒုတိယအ, ဒီအစားအစာ-ကန့်သတ်အများစုလေ့လာမှုများအစီရင်ခံစာတွင်လျှော့ချ leptin / အင်ဆူလင်အချက်ပြမှုများမှအလားတူတိုးမြှင့် dopamine function ကိုဖြစ်ပေါ်ဖို့ leptin / အင်ဆူလင် Sensitivity ကိုအတွက်လျော့ချရေး, လေ့လာတွေ့ရှိ ယုတ်လျော့ အဝလွန်ခြင်းအတွက် dopamine function ကို (di Chiara et al ။ , 1998; ဝမ် et al ။ , 2001a; Davis က et al ။ , 2008; Geiger et al ။ , 2008, 2009; လီ et al ။ , 2009; Vucetic နှင့် Reyes, 2010) ။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အထောက်အထားများအရနောက်ဆုံးတွင် dopaminergic လုပ်ဆောင်မှုလျှော့ချခြင်းကစားသုံးမှုကိုလျော့ကျစေနိုင်သည်ဟုမျှော်လင့်နိုင်သည်။ အစားလျှော့ချ dopamine နှင့် hyperphagia ပူးတွဲဖြစ်ပေါ်။ အဝလွန်ခြင်းဖြစ်လျှင်, leptin / အင်ဆူလင် -> dopamine -> ဆုလာဘ်ကွင်းဆက်တစ်ခုချင်းစီမှာ inverted ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကိုပြောင်းပြန်စူးရှခြင်းနှင့်နာတာရှည်အပြုသဘောဆောင်တဲ့စွမ်းအင်ချိန်ခွင်လျှာအကြားအရေးပါသောဂုဏ်ထူးကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ leptin / အင်ဆူလင်မှလျှော့ sensitivity ကိုကျယ်ပြန့်တဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်ပေါ်ထွန်းယုံကြည် ရှည်ကြာသော အပြုသဘောဆောင်တဲ့စွမ်းအင်ချိန်ခွင်လျှာ, အဝလွန်ခြင်းနှင့်ဇီဝဖြစ်စဉ်မမှန်မှုများမှဦးဆောင်ကာရောဂါဗေဒလိုက်လျောညီထွေကိုယ်စားပြု။ leptin / အင်ဆူလင်မှလျှော့ sensitivity ကိုရှိနေသော်လည်းအဝလွန်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ် dopamine function ကို၏ဝိရောဓိလျှော့ချရေးအဖြစ်မကြာခဏ (စွဲမှအဝလွန် likening သီအိုရီအတွက်အဆိုပြုထားသော, အဖြစ်ကောင်းစွာဖွယ်ရှိတစ်ဦး (ရောဂါဗေဒ) လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ပါသည်Volkow နှင့်ပညာရှိ, 2005; Trinko et al ။ , 2007; Avena et al ။ , 2009; Lutter နှင့် Nestler, 2009; Avena နှင့် Bocarsly, 2011) ။ ဒါကြောင့်စွမ်းအင်စားသုံးမှုအကြားဆက်ဆံရေးအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှလေ့လာရေးအဘို့, leptin / အင်ဆူလင်နှင့် dopamine ကျနော်တို့ကိုမေးရန်ရှိသည်ဆိုလိုသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကပြင်းထန်စွာစုံစမ်းစစ်ဆေးရှုပ်ထွေး "ဒီလေ့လာရေးပုံမှန် function ကိုသို့မဟုတ်ရောဂါဗေဒလိုက်လျောညီထွေရောင်ပြန်ဟပ်သနည်း" ဤအခြေအနေသည်ပုံမှန်၏မသင့်လျော်အခြအောင်၏အန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေ ရောဂါဗေဒအခြေအနေများနှင့်ဒုနျအလှနျအနေဖြင့် function ကိုတစ်ဦးပြဿနာကိုအောက်တွင် (လှောင်အိမ်-သွေးဆောင်အဝလွန်အပိုင်း) အမှာစကားပြောကြားသည်။
အဝလွန်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်တတိယပြောင်းပြန်လှန်-ကြောင်း dopamine လျော့နည်းသွား function ကိုအားပေးအားမြှောက်ထက်တားစီးစားသုံးမှု-အပေါ်ယံ dopamine မက်လုံးပေးတန်ဖိုးကိုပိုကောင်းစေပါတယ်ကြောင်းတစ်ခုလုံးကိုအယူအဆဆန့်ကျင်ဘက်သဖွယ်ဖြစ်နေသည်။ သို့သော်ဤစားသုံးမှုကိုထိန်းချုပ်အာရုံကြောအလွှာ၏ရှုပ်ထွေးရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့်, လျှော့ချမက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုများနှင့် hyperphagia အတူတကွနိုင်ပါတယ်။ Davis က et al ။ (Davis က et al ။ , 2010bmidbrain dopamine ဆဲလ်များပေါ် leptin receptors မှတဆင့်တိုက်ရိုက်အချက်ပြနှင့်သွယ်ဝိုက် dopamine ဆဲလ်လှုပ်ရှားမှု modulate ဖို့နှစ် ဦး နှစ်ဖက် hypothalamus အတွက်အာရုံခံဆဲလ်ဖော်ပြမှတဆင့်သွယ်ဝိုက်: leptin နှစ်ခုယန္တရားများမှတဆင့် dopamine modulates ကြောင်းအကြံပြုဒေတာ။ Leptin ၏ LH အပေါ်လုပ်ဆောင်မှုသည် homeostatic လှုံ့ဆော်မှုကိုထိန်းညှိပေးပြီး၊ midbrain dopamine အပေါ်၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုများသည်အားစိုက်သောတုံ့ပြန်မှုကိုထိန်းညှိပေးသည်ဟုသူတို့ကအကြံပြုသည်။ ဤယန္တရားနှစ်ခုသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အတူတကွအလုပ်လုပ်ကြသော်လည်းစားသုံးမှုနှင့်စားနပ်ရိက္ခာအတွက်အလုပ်လုပ်ရန်စိတ်အားထက်သန်မှုသည်ဆက်စပ်မှုမရှိပါ (သို့ဖြစ်ရာဥပမာအားဖြင့်) Greenwood et al ။ , 1974; Salamone et al ။ , 1991; Baldo et al ။ , 2002; Davis က et al ။ , 2010b; Rasmussen et al ။ , 2010) ။ Non-homeostatic နို့တိုက်ကျွေးရေးရရှိရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုသည်ဆိုပါက food- (လိုအပ်ကြောင်းမရှိခြင်းနှစ်ဆပိုများလာ "လို"Berridge et al ။ , 2010မပါဘဲလိုအပ်နေ, အားထုတ်မှုသုံးနမပါဘဲအစားအစာကိုစားသုံးရန်ရိပ်မိလိုအပ်:), အဝလွန်ခြင်းမှ leptin / အင်ဆူလင် / dopamine ၏ရောဂါဗေဒလိုက်လျောညီထွေဆန့်ကျင်ဘက်ကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါ "လို။ "
Dopamine နှင့်စွမ်းအင် homeostasis: တစ်ခုအသုံးစရိတ်-ဗဟိုပြုရှုထောင့်
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ဒါကအလုပ်, စားသုံးမှုအပေါ်နီးပါးသီးသန့်စွမ်းအင်ကိုချိန်ခွင်လျှာ၏စားသုံးမှုဘက်အာရုံစိုက်။ Leptin သျောလျော့နည်းစနစ်တကျစုံစမ်းစစ်ဆေးလည်း (စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်ထိန်းညှိအတွက်အခန်းကဏ္ဍPelleymounter et al ။ , 1995; Williams က et al ။ , 2001; Elmquist et al ။ , 2005; Ludwig et al ။ , 2005; ဗန်က de အမှတ်တရ et al ။ , 2008; Leinninger et al ။ , 2011; Ribeiro et al ။ , 2011) ။ သို့သော် dopamine ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုထိန်းညှိရာတွင်လူသိများသောအခန်းကဏ္despiteတွင်ရှိနေသော်လည်း leptin, insulin နှင့် dopamine အကြားအပြန်အလှန်လုပ်ဆောင်မှုနှင့်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်တို့နှင့်ပတ်သက်သောအနည်းငယ်သာလူသိများသည်။ စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်၏ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် leptin / insulin သည်စွမ်းအင်ရရှိနိုင်မှုကိုအချက်ပြခြင်းဖြင့်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်ကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီးလှုပ်ရှားမှုကိုလည်းတိုးပွားစေသည်။Ribeiro et al ။ , 2011) - leptin dopamine function ကိုလျော့နည်းစေကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီမှုဖြစ်ပါတယ် -which "သင်ကတယ်မှန်လျှင်, အသုံးပြုရန်" ။ သို့သော်မကြာသေးမီအလုပ် (Leinninger et al ။ , 2009; Opland et al ။ , 2010) leptin နှင့် dopamine အကြားဆက်ဆံရေးရိုးရှင်းပြီး unidirectional မကျမည်အကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ Leinninger နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ leptin အဆိုပါ LH အပေါ်သရုပ်ဆောင်ကြောင်းအကြံပြု တိုး dopamine function ကို (Leinninger et al ။ , 2009) dopamine ဆဲလ်အပေါ် leptin receptors ၏ activation (dopamine function ကိုလျော့ကျနေချိန်တွင်Hommel et al ။ , 2006; Figlewicz နှင့် Benoit, 2009). Leshan et al ။ (2010) leptin receptors ဖော်ပြသော dopamine ဆဲလ် amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယမှနီးပါးသီးသန့်မှန်းချက်ရဲ့ကြောင်းသေးငယ်တဲ့ (~ 10%) subpopulation ကိုကိုယ်စားပြုကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ စွမ်းအင်တစ်ခုပိုလျှံထံမှ leptin တိုးဖြစ်လျှင်, dopamine အပေါ်မူလတန်းအကျိုးသက်ရောက်မှု, LH ကနေတဆင့်မှဖြစ်နိုင်သည်လိုက်တဲ့အခါ တိုးမြှင့်လာသည် dopamine function ကိုနှင့် Ribeiro နှင့် colleauges (နေဖြင့်ကြည့်ရှုလေ့လာသည်အတိုင်း, လှုပ်ရှားမှုနှင့်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်မြှင့်တင်ရန်Ribeiro et al ။ , 2011): စွမ်းအင်အသုံးပြုနိုင်သည်ရရှိနိုင်ပါသည်။ တိုက်ရိုက် leptin receptors ဖော်ပြသော dopamine ဆဲလ်နှင့်စီမံကိန်းအစာစားချင်စိတ်အတွက်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအခန်းကဏ္ဍစေခြင်းငှါ သင်ယူမှု- ထို CEN (နှင့်ဆက်စပ်ဟော်လန်နှင့် Gallagher, 1993; ပါကင် et al ။ , 2000; ကော် et al ။ , 2001; Baxter နှင့် Murray, 2002; Lee က et al ။ , 2005; Paton et al ။ , 2006; el-Amami နှင့်ဟော်လန်, 2007) လက်ရှိဆွေးနွေးမှု၏အတိုင်းအတာထက်ကျော်လွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်စိတ်ကူး -an ။ ဤနေရာတွင်အဆိုပြုထားသည့်အယူအဆမှာတော့ dopamine ၌ဤ leptin-mediated တိုးဆုလာဘ်မြှင့်တင်ရန်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲ သာ. ကြီးမြတ်အသုံးစရိတ်နှင့်ပိုမိုတူးဖော်ရေးဆီသို့လှုပ်ရှားမှု၏စည်းမျဉ်းပြောင်းရွှေ့ရသည်။ အပြုအမူဖြစ်သကဲ့သို့ဆုလာဘ် sensitivity ကို / မက်လုံးပေးအတွက်သိသာလျော့ချရေးအတွက် သာ. ကွီးမွတျရှာဖွေရေးရလဒ်များကို ဒီထက်ဘက်လိုက် ဆုလာဘ်အသုံးပြုပုံအရေးကြီးသော်လည်း, ဆဲလှုံ့ဆော်။
dopamine ၏အကျိုးကိုဗဟိုပြုသည့်ရှုမြင်ချက်က dopamine ၏အဓိကအားဖြင့်စွမ်းအင် homeostasis နှင့်အဝလွန်ခြင်းအတွက်ဆုလာဘ်များနှင့်မက်လုံးများလှုံ့ဆော်မှုကိုမြှင့်တင်ခြင်းသို့မဟုတ်လျှော့ချခြင်းကချမှတ်သည်။ လက်ရှိအယူအဆသည်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်အပေါ် dopamine ၏အခန်းကဏ္centersကိုအဓိကထားပြီးရရှိနိုင်သည့်စွမ်းအင်သည်ပုံမှန်အားဖြင့် dopamine ကိုတိုးပွားစေသည်၊ ရလဒ်အားဖြင့်အပြုအမူဆိုင်ရာရွေးချယ်မှုအပေါ်ဆုလာဘ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအမှန်တကယ်လျော့နည်းသွားသောလှုပ်ရှားမှုနှင့်ရှာဖွေတူးဖော်မှုကိုတိုးပွားစေသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်စွမ်းအင်နိမ့်ခြင်းသည် dopamine ကိုလျော့နည်းစေပြီးစွမ်းအင်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအမြတ်ထုတ်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ တိုးမြှင့် အပြုအမူအပေါ်ဆုလာဘ်၏သက်ရောက်မှု။ အဆုံးစွန်သောမကြာခဏ "ဆုလာဘ်ချို့တဲ့" ယူဆချက်ကိုထောကျပံ့ဖို့ကိုးကားလေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီသော်လည်းဤနေရာတွင်ကျွန်တော်တစ်ဦးထင်ဟပ်တဲ့အတိုင်းဒီဒေတာကိုအနက်ကိုဘော်ပြ "ပိုလျှံ exploit ဆုလာဘ်။ " ဒီအယူအဆမြင့်မားတဲ့အတွက်ကယ်လိုရီစားသုံးမှု dopamine တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်, တိုးမြှင့်လှုပ်ရှားမှုမှတဆင့်အကာအကွယ်ဖြစ်သင့်ကြောင်းအကြံပြုမယ်လို့ အဝလွန်ခြင်းဆန့်ကျင်။ ဤသည် putative ယန္တရားသို့သော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အဝလွန်ခြင်းကိုကာကွယ်အတွက် homeostatic ယန္တရားများထက်မဆိုပိုပြီးအောင်မြင်တဲ့ပေါ်လာပါဘူး။ အဘယ်ကြောင့်?
ပြတ်တောက်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်: Cubicle နှင့်ကေ့သွေးဆောင်အဝလွန်ခြင်း
ခေတ်သစ်အနောက်တိုင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်အမှုဖြစ်သကဲ့သို့ဤသည်အယူအဆ, စွမ်းအင်၏တစ်ဦးအဆင်သင့်ထောက်ပံ့ရေးကြိုတင်ခန့်မှန်းလို့ dopamine မြှင့်တင်ရန်နှင့်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်လွယ်ကူချောမွေ့, ထောက်ပံ့မယ်လို့ ကာကွယ်မှု အဝလွန်ခြင်းဆန့်ကျင်။ ပြင်းထန်စွာ, ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုဟာအပေါ်သို့ကဆက်ပြောပါတယ်ဖြစ်ပါသည် အခွင့်အရေး စွမ်းအင်သုံးစွဲ။ အစားအသောက်သွေးဆောင်အဝလွန်ခြင်း (DIO) ကြွက်အတွက်မြင့်မားတဲ့ကယ်လိုရီအစားအစာမြင့်မားတဲ့အဆီကျွေးမွေးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သွေးဆောင်အဝလွန်တဲ့ပျံ့နှံ့နေတဲ့မော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျယ်ပြန့် obesogenic ပတ်ဝန်းကျင်မှာတစ်မော်ဒယ်အဖြစ်လုပ်ကိုင်သော်လည်း, ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာပေါ်ကြွက်တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာ (မျိုးကွဲများအကြားကွဲပြားခြားနားကြောင်းခုခံ၏ဒီဂရီဖေါ်ပြခြင်း, အဝလွန်ဖြစ်လာကြဘူးBrownlow et al ။ , 1996; Funkat et al ။ , 2004; Novak et al ။ , 2010) နှင့်တစ်ဦးချင်းစီအကြား, အဝလွန်ခြင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြင်းနှင့်ခံနိုင်ရည်ကြွက်၏ရှေးခယျြမွေးမြူရေးအတွက်အခြေခံ (Levin, 2010) ။ မေးခွန်းတိုက်ရိုက်စုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေအဖြစ် DIO အတွက်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်အပေါ် dopamine-mediated သက်ရောက်မှု၏အခန်းကဏ္ဍကိုအကဲဖြတ်ခက်ခဲသည်။
ဘီးပြေးအဝလွန်ခြင်း၏အတော်ကြာမော်ဒယ်များအတွက် DIO ဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ပြသခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း (Zachwieja et al ။ , 1997; Levin နှင့် Dunn-Meynell, 2004; bi, 2005; Moran နှင့် Bi, 2006b; ပက် et al ။ , 2008, 2009; နှိမ့်ချ et al ။ , 2010; Novak et al ။ , 2010), ထိုကဲ့သို့သောအကာအကွယ်မိမိဆန္ဒအလျောက်လှုပ်ရှားမှု dopamine အားဖြင့် modulated သောရန်အတိုင်းအတာကိုတိုက်ရိုက်, ဤလေ့လာမှုများအတွက်ဆန်းစစ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ အဝလွန်ခြင်း-ကျရောက်နေတဲ့ OLEF ကြွက် (ဘီး running ထောက်ပံ့ပေးသည့်အခါကိုအလွန်အဝလွန်လျော့နည်းသွားပြသbi, 2005) ။ စိတ်ဝင်စားစရာထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဤကြွက်၏ဘောဇဉ်ပုံစံများ, ကျနော်တို့ DAT ကြွက်နှင့်အတူစောငျ့ရှောကျအရာကိုအလားတူဖြစ်ပါသည်: သူတို့ကပိုကြီးပေမယ်နည်းပါးလာအစားအစာများကိုစားသုံးခြင်း, DAT မတူပဲသူတို့ရဲ့အသားတင်စားသုံးမှုခြီးမွှောကျသော်လည်း (Moran နှင့် Bi, 2006a, p.1214, ပုံ 2) ။ အသက်အရွယ်နုပျိုသော non-ဆီးချို OLETF ကြွက်များကို (DAT မုန့်ညက်ပုံစံများ phenotype နှင့်အတူတသမတ်တည်း, တိုးမြှင့ extracellular dopamine ပြသAnderzhanova et al ။ , 2007) ။ သို့သျောလညျးကိုပိုမိုအဆင့်မြင့် Pre-ဆီးချိုနှင့်ဆီးချိုအသက်အရွယ်မှာသူတို့ (dopamine အတွက်သိသိသာသာကျဆင်းမှုကိုပြသAnderzhanova et al ။ , 2007) ။ ဤအအချက်အလက်များ၏တဦးတည်းအနက်သည်ဤကြွက်များတွင်မြင့်မားသော dopamine အဆင့်ဆင့် သာ. ကြီးမြတ်စွမ်းအင်စားသုံးမှုမှသူတို့ကို predisposes သောကွောငျ့ဖွစျသညျ နှင့် မိမိဆန္ဒအလျောက်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းအခွင့်အလမ်းများမရှိခြင်းအတွက်တိုးမြှင့်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်စွမ်းအင်မညီမမျှ, အဝလွန်ခြင်းနှင့်ဇီဝဖြစ်စဉ်ရောဂါအတွက်ရရှိလာတဲ့, အသုံးစရိတ်ပေမယ့်ပိတ်ဆို့ထားပါသည်။
တချို့ကလေ့လာမှုများ, မြင့်မားသောအဆီ / ကယ်လိုရီအစားအစာလျော့ချ TH အပါအဝင် dopamine function ကိုလျော့ကြောင်းသရုပ်ပြလျှော့ချကြပါပြီ (dopamine လွှတ်ပေးရန်နှိုးဆွခြင်းနှင့် D2 အဲဒီ receptor စကားရပ်လျှော့ချGeiger et al ။ , 2008, 2009) ။ အခြားအ pathophysiology မှစွမ်းအင်သို့မဟုတ်အလယ်တန်း၏တိုးမြှင့်ရရှိနိုင်၏တိုက်ရိုက်အကျိုးဆက်မသိရသေးဖြစ်သကဲ့သို့သို့သော်ရှိမရှိ dopamine function ကိုအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာလျှော့ချရေးပေါ်ထွန်း။ အထူးမြင့်မားသောအဆီ / ကယ်လိုရီအစားအစာ leptin နှင့် / သို့မဟုတ်အင်ဆူလင်အာရုံမခံစားနိုင်သောနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြ (Arase et al ။ , 1988; Lin က et al ။ , 2001; ဝမ် et al ။ , 2001b; Myers, 2004; Figlewicz et al ။ , 2006; Davis က et al ။ , 2010a; Figlewicz နှင့် Sipols, 2010) ။ ဒီအခက်ခဲ Dio တုံ့ပြန် dopamine function ကိုမြားတှငျပွောငျးလဲပြန်ဆိုစေသည်။ လျှော့ချ D2 function ကို DIO နှင့်အတူအစီရင်ခံခဲ့ပြီးသော်လည်းဥပမာအားဖြင့်ဤလေ့လာတွေ့ရှိချက်ယေဘုယျအားဖြင့်ဤပြောင်းလဲနာတာရှည်မွငျ့မား leptin နှင့်အင်ဆူလင်နှင့်နောက်ဆက်တွဲ leptin / အင်ဆူလင်အာရုံမခံစားနိုင်သောမှအလယ်တန်းပေါ်ထွန်းသောဖြစ်နိုင်ခြေမိတ်ဆက်မြင့်မားအဆီအစားအစာများစွာကိုရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်ပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ဒီဖြစ်နိုင်ခြေမရှိသလောက်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည်နှင့်အင်ဆူလင် / leptin အဆင့်ဆင့်ပုံမှန်အားအစီရင်ခံတင်ပြကြသည်မဟုတ်။ သို့သော် HF အစားအသောက်များတွင်၏2ရက်အကြာမှာ D20 နှင့် DAT စကားရပ်ဆန်းစစ်နှင့်အင်ဆူလင် / leptin အဆင့်ဆင့်အစီရင်ခံတလေ့လာမှုထဲမှာ, စာရေးဆရာများ DAT နှင့်တစ်ဦးအတွက်တစ်ဦးကျဆင်းခြင်းလေ့လာတွေ့ရှိ တိုးမြှင့်လာသည် D2 အတွက် (တောင်အာရှနှင့် Huang က, 2007; ကိုလညျးရှု Huang က et al ။ , 2005), နှစ်ဦးစလုံးတိုးချဲ့လှုပ်ရှားမှုနှင့်ကိုက်ညီ။ ကြွက်မြင့်မားသောစွမ်းအင်ကိုအစားအသောက်များတွင် Chow ကနေ switched အခါတစ်ဦးထက်ပိုမကြာသေးမီလေ့လာမှုမှာဤအတူတူစာရေးဆရာ (dopamine စနစ်က function ကိုတစ်ခုတိုးလာကိုစောင့်ရှောက်မည်တောင်ပိုင်း et al ။ , 2012) ။ ဤရွေ့ကားဒေတာကြောင့်အကြံပြု ကနဦး မြင့်မားသောဆီဥနှင့်တိုးမြှင့ကယ်လိုရီရရှိမှုတုံ့ပြန်ရန်ဖြစ်ပါသည် တိုးမြှင့်လာသည် dopamine နဲ့ တိုးမြှင့်လာသည် အဆိုပါ disinhibitory D2 အဲဒီ receptor ၏စကားရပ်, သာ. ကြီးမြတ်လှုပ်ရှားမှု inducing ။ အဆိုပါ dopamine system ကိုမရရှိနိုင်ကယ်လိုရီ၏ကြွယ်ဝသောစည်းစိမ်မှဘယ်လိုတုံ့ပြန်မယ်ဆိုတာ၏မေးခွန်းကိုဖြေကြားနိုင်ရန်အတွက်ကြောင့် disambiguate ဖို့အရေးကြီးသည် ကနဦး မှ ရှည်ကြာသော အရာတွေဖြစ်တဲ့ leptin အာရုံမခံစားနိုင်သောအဖြစ်ရောဂါဗေဒ adapter,, လက်ရှိများမှာဖို့ဒီဂရီတုံ့ပြန်မှုများနှင့်အကဲဖြတ်ရန်။
အဘယ်အရာကိုဒီဂရီမှ DIO အောက်ရှိ dopamine စနစ်လေ့လာတွေ့ရှိပြောင်းလဲမှုများမဟုတ်မြင့်မားသောကယ်လိုရီအစားအသောက်များတွင်သူ့ဟာသူထံမှပေမယ့်လေ့ကျင့်ခန်းအခွင့်အလမ်းတစ်ခုမရှိခြင်းကနေပျေါပေါကျသလဲ? အကြောင်း, DIO နှင့်ဆက်စပ်လျော့နည်းသွား dopamine function ကို၏လေ့လာတွေ့ရှိချက်ထဲမှာကျနော်တို့မသာဒီရောဂါဗေဒလိုက်လျောညီထွေရောင်ပြန်ဟပ်ပါဘူးဘယ်အရာကိုအတိုင်းအတာအထိတောင်းဆိုနိုင်ပါသည်, သို့သော်လည်းဆန္ဒအလျောက်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်များအတွက်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုမရှိခြင်းအဘယ်အရာကိုဒီဂရီမမှ ထောက်ပံ့ ဒီရောဂါဗေဒနည်း သက်သေအထောက်အထား (ဘီးပြေးအဆိုပါ dopamine စနစ်၏အလုပ်လုပ်တဲ့ဝိသေသလက္ခဏာများပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုအကြံပြုMacRae et al ။ , 1987; Sabol et al ။ , 1990; Hattori et al ။ , 1993, 1994; Wilson ကနှင့် Marsden, 1995; liste et al ။ , 1997; Meeusen et al ။ , 1997; Foley နှင့် Fleshner, 2008; Greenwood et al ။ , 2011), တိုးမြှင့ extracellular dopamine အပါအဝင်တိုးမြှင့်လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်, TH mRNA နှင့် D2 စကားရပ်ပြောင်းလဲမှုများခြီးမွှောကျ။ postsynaptic D2 နှင့် autoreceptors အကြားမတူညီကြောင်းတဦးတည်းမကြာသေးမီကလေ့လာမှုမှာ autoreceptors (downregulated ခံရဖို့ကိုတွေ့နှင့် postsynaptic D2 upregulated ခဲ့ကြသည်Foley နှင့် Fleshner, 2008) ။ ထိုမှတပါး, မိမိဆန္ဒအလျောက်လှုပ်ရှားမှု (သွယ်ဝိုက်, dopamine function ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်စေခြင်းငှါ leptin နှင့်အင်ဆူလင်အချက်ပြများတွင်ရောဂါဗေဒအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်လျော့ပါးစေခြင်းငှါKrawczewski Carhuatanta et al ။ , 2011) ။ ဒီစနစ်တကျလေ့လာရသေးသော်လည်းထို့ကြောင့်မိမိဆန္ဒအလျောက်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်း, DIO အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိသည့်လျော့ dopamine function ကို ameliorate လိမ့်မည်။
ဤနေရာတွင်အဆိုပြုထားသည့်အယူအဆများတွင်စွမ်းအင်တိုးလာရရှိနိုင်မှု, ထ-စည်းမျဉ်း dopamine ကမကထပြုခဲ့အပြုအမူလှုပ်ရှားမှုကနေတဆင့်, တိရစ္ဆာန်တစ်ပေါများစွမ်းအင်ထောက်ပံ့ရေး၏အားသာချက်ကိုယူပြီးအဝလွန်ခြင်းဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ခွင့်တိုးမြှင့်ရှာဖွေရေးနှင့်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်အတွက်ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မယ်။ အဆိုပါ DIO ပါရာဒိုင်းအဘယ်သူမျှမအသစ်အဆန်း, ဆွသို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ခန်းအခွင့်အလမ်းများနည်းနည်းနှင့်အတူအသေးစားလှောင်အိမ်မှကြွက် confining နေဖြင့်တူးဖော်ရေးနှင့်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်များအတွက်အခွင့်အလမ်းမပေးပါဘူး Insofar အဖြစ်ပြုလုပ်၏အကျိုးဆက်များကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါ ပိတ်ပင်ဖျက်ဆီး လုံ့လရှိသူများစွာသော၏အခြေအနေများအောက်တွင်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်။ အတော်များများက (ခေတ်သစ်အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှု၏ဝိသေသအထိုင်များလူနေမှုသလောက်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောအစားအစာထက်အဝလွန်အထောက်အကူပြုစေမည်အကြောင်းအကြံပြုခဲ့ကြPowell နဲ့တိုနီဘလဲ, 1994; Booth et al ။ , 2000; ဟေးလ် et al ။ , 2003; Chakravarthy နှင့် Booth, 2004; Levin နှင့် Dunn-Meynell, 2004; Warburton et al ။ , 2006; Booth နှင့် Lees, 2007; အကြီးအကဲတစ်ဦးနှင့်ရောဘတ်, 2007; Hawley နှင့် Holloszy, 2009; Chaput et al ။ , 2011), ခေတ်သစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်အဝလွန်ခြင်းကိုနားလည်ရန် DIO အလွန်အမင်းသက်ဆိုင်ရာအောင်။ သို့သော်သွေးဆောင်အဝလွန်ခြင်းစွမ်းအင် cage- သို့မဟုတ် "cubicle" သုံးစွဲတိုးမြှင့်အတွက်ကယ်လိုရီစားသုံးမှုကနေဒါမှမဟုတ်အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့အခွင့်အလမ်းများမရှိခြင်းကနေပေါ်ပေါက်ခြင်းရှိမရှိမသိရသေးအဝလွန်ခြင်း-ဖြစ်နေဆဲ -induced ။ ကျယ်ပြန့် dopamine ဆုလာဘ်များနှင့်အစာစားချင်စိတ်လှုံ့ဆော်မှုပြောင်းလဲပစ်အားဖြင့် DIO ကိုအထောက်အကူပြုရန်ကြောင်းအဆိုပြုထားသော်လည်းအညီအမျှ, ပြောင်းလဲပစ်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်မှတဆင့်၎င်း၏အလားအလာအလှူငွေအကြီးအကျယ် uninvestigated နှင့်သမရိုးကျ DIO ပါရာဒိုင်းအတွက်မှေးမှိန်နေဆဲဖြစ်သည်။
dopamine ၏ဆုလာဘ်အယူအဆစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကြီးစိုးနှင့် dopamine စဉ်းစားတော်မူပြီ စမ်းသပ်ချက်ပုံမှန်အားဖြင့်ကြောင်းအယူအဆရေးရာမူဘောင်အတွင်းဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။ အကျိုးဆက်အဖြစ်, အဆိုပြုထားအယူအဆအကဲဖြတ်ဖို့လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များမကြာခဏပျောက်ဆုံးမထက်ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခဏ, လှုပ်ရှားမှုအဆင့်ဆင့်ရိုးရှင်းစွာလျစ်လျူရှုနေကြပါတယ်။ ဤသည်ထိုကဲ့သို့သောလှုပ်ရှားမှုသို့တိုင်းတာသို့မဟုတ်ယူမထားအများအပြား DIO လေ့လာမှုများအဖြစ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်စမ်းသပ်ချက်မှမိမိဆန္ဒအလျောက်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်ထိန်းချုပ်ယန္တရားများသာမကြာသေးမီကအခြေတည်စာပေနှင့်အတူအစာစားချင်စိတ်အပြုအမူများနှင့်စားသုံးမှုလေ့လာနေဆီသို့တစ်ဦးလေးနက်ဘက်လိုက်မှုလည်းမရှိသည့်အတွက်ကျယ်ပြန့်, ခြုံငုံစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကနေလာနေကြပါတယ် အားလုံးမှာအကောင့် [ဥပမာ Geiger et al ။ , 2008, 2009] ။ ဆုလာဘ်သီအိုရီဆီသို့ဒါဟာဘက်လိုက်မှုလည်းစားသုံးမိပါနှင့် / သို့မဟုတ်ဆုလာဘ်ကိုထိန်းချုပ်ပီပီနှင့်ခေတ်မီလမ်းကြောင်းကျယ်ပြန့်မိမိဆန္ဒအလျောက်လှုပ်ရှားမှုထိန်းညှိယန္တရားများနှင့်လမ်းကြောင်းတစ်နှိုင်းယှဉ်မြေပုံနီးပါး Non-တည်ရှိနေစဉ်တစ်ခုသို့ဆက်စပ် (သို့သော်ကြည့်ရှုခဲ့ကြသည့်အတွက်စာပေတွင်ထင်ဟပ်နေသည် ပန်းကုံး et al ။ , 2011) ။ စနစ်တကျပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်လှုပ်ရှားမှုများ၏အစီအမံအပျေါမှာသဘောတူညီခဲ့ပုံမှန် dopamine function ကို၏လေ့လာမှုများသို့ပေါင်းစည်းဖြစ်လာရန်လိုအပ်ပါသည်။
ဒုတိယအချက်မှာလိုက်လျောညီထွေပတ်ဝန်းကျင်-မှီခိုသည်။ သည် Periodic, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လှုံ့ဆျောအလုပ်အစားအစာကန့်သတ်ခြင်းမှပေါ်ထွက်လာသောယာယီအစားအစာရှားပါးမှု: လောလောဆယ်တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများ၏ကျယ်ပြန့်အများစုထိရောက်စွာတဦးတည်းစွမ်းအင်စီးပွားရေးကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်။ မသာဒီထင်ဟပ်ရန်ပျက်ကွက်ပါဘူး အကွာအဝေး တိရစ္ဆာန်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ရမယ်ဖို့ရာ, ဒါပေမယ့်သူကပဒေသာတစ်ခုပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်သောအဝလွန်ခြင်းအတွက်ချီးမြှောက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲရှားပါးမှုအခြေခံယုံကြည်မူလတန်းအခွအေနေပြန်ပါလာမည်မဟုတ်ပါဘူးအခြေအနေများ၏။ တစ်ဦးက Semi-သဘာဝနေအိမ်လှောင်အိမ်ချဉ်းကပ်မှု, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်အားဖြင့်ရုပ်ပြအဖြစ်အခြားသူတွေ (အဖြစ်Hursh et al ။ , 1988; Chaney နှင့် Rowland, 2008) dopamine လုပ်ဆောင်ချက်၏“ ပြည့်စုံသော” ရုပ်ပုံရရှိရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအိမ်လှောင်အိမ်ပုံစံတွင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရေးပေါ်အခြေအနေများသည်အမျိုးမျိုးသောအတိုင်းအတာများအတိုင်းစဉ်ဆက်မပြတ်ကာလအတွင်းအတုဖြင့်စွမ်းအင်ချို့တဲ့သောစွမ်းအင်လိုအပ်ချက် (ဆိုလိုသည်မှာအစားအစာကန့်သတ်ချက်) သို့မဟုတ်အတုယာယီမိုးကုပ်စက်ဝိုင်း (နာရီ session) ၏မိတ်ဆက်စရာမလိုဘဲထိန်းထားနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာတိရိစ္ဆာန်၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အားတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်သည့်အပြုအမူကို ပိုမို၍ အပြည့်အ ၀ စုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်သည်။
တတိယအချက်နီးပါးအားလုံးအလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်နောက်ဆက်တွဲရလဒ်နှင့်အတူ interaction ကအဆိုပါ dopamine စနစ်ကသူ့ဟာသူပြောင်းလဲဘယ်လိုအမူအကျင့်များအနည်းငယ်သာစာမေးပွဲနှင့်အတူအပြုအမူအပေါ်ပြောင်းလဲ dopamine ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်အလေးပေး။ လေ့လာမှုများဤအမျိုးအစားများကိုဝန်ခံရမည်စိတ်ဖိစီးမှု dopamine function ကိုပွောငျးလဲဘယ်လိုပေါ်တွင်စာပေအတွက်သက်သေအဖြစ်စိန်ခေါ်နေကြသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, သူတို့ကအပြည့်အဝ dopamine ၏သပ္ပါယ် function ကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့အရေးပါပုံရသည်။ ပဒေသာသို့မဟုတ်ရှားပါးမှုတစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်ပတ်ဝန်းကျင် dopamine function ကို up- သို့မဟုတ်ဆင်း-ထိန်းညှိပါသလား မေးခွန်းကောင်းစွာဝေဖန်စေခြင်းငှါသော်လည်း, ရက်စွဲနှင့်မေးခွန်းမရှိသလောက်ဟုမေးနေသည်ရန်မရှင်းလင်းသောသို့မဟုတ်ဆွဲဆောင်မှုအဖြေလည်းမရှိ။
အတူဆုလာဘ်များလိုက်စားပွနျလညျသငျ့မွများအတွက်အလွှာ: ဒီနေရာမှာကျနော်တို့ dopamine ၏များပြားလှသိသာလုပ်ဆောင်ချက်များကိုစွမ်းအင်အသုံးစရိတ်တိရစ္ဆာန်ကိုယ်တိုင်ကတွေ့ထားတဲ့အတွက်စွမ်းအင်စီးပွားရေးအဆင်ပြေအောင်သောအားဖြင့်ယန္တယားအဖြစ်စုပေါင်းနားလည်သဘောပေါက်စေခြင်းငှါအကြံပြုထားတဲ့ dopamine function ကို၏ကျယ်ပြန့်ယူဆချက်ဖွံ့ဖြိုး အရင်းမြစ်များ။ ကျနော်တို့ကပထမဦးစွာကျယ်ပြန့်စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုမူဘောင်သို့ dopamine function ကို၏ကွဲပြားခြားနားသောအမြင်များကိုပေါင်းစပ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သီအိုရီအသုံးအနှုန်းများ၌ဤအယူအဆတင်ပြသည်။ ကျနော်တို့ထို့နောက် dopamine နှင့်အဝလွန်ခြင်း၏ကြီးထွားလာလယ်ပြင်၌ရှိသောအတွေးအခေါ်များနှင့်အချက်အလက် re-ပြန်ဆိုရန်ဤမူဘောင်လျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့ dopamine, စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်မျက်နှာသာအသုံးပြုပုံပုံမှန်အားဖြင့်အဝလွန်ခြင်းဆန့်ကျင်အကာအကွယ်ဖြစ်ပေမယ့်ခေတ်သစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အထိုင်များလူနေမှုဒီအကာအကွယ်ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးခြင်းနှင့်ထက်အဝလွန်ဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုကြောင်းရောဂါဗေဒအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်သွေးဆောင်ကြောင်းမယ်လို့ဝတ္ထုအယူအဆတင်ပြသည်။ လက်ရှိဆွေးနွေးမှု၏အတိုင်းအတာထက်ကျော်လွန်သော်လည်းကျနော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျယ်ပြန့်လေဖြတ်အတွက်ကဒီမှာ sketched မူဘောင် fruitfully အလားအလာဝတ္ထုထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းနှင့် testable ယူဆချက်အလျှော့ပေးလိုက်လျော, အာရုံစူးစိုက်မှုကို-လိုငွေပြမှု hyperactivity ရောဂါနှင့်စွဲအပါအဝင် dopamine အတွက်သုတေသနတခြားဒေသများသို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
ဆုချ-အတွင်းပိုင်းလိုအပ်ချက်-ရှင်းလင်းစွာမှပြင်ပအဖြစ်အပျက်များနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများ၏ချိတ်ဆက်အမြင်တစ်ခုဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်, သပ္ပါယ်အချက်အနေဖြင့်အရေးပါသော function ကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ သို့သော်ဆုလာဘ်များနှင့်တန်ဖိုးကိုအခြေခံကျကျဆွေမျိုးဖြစ်ကြသည်။ ဆုလာဘ် modulated သောအားဖြင့်ကိုက်ဘာလဲ? , စာသား, အသက်ရှင်ခြင်းသို့မဟုတ်သေမင်း၏အမှု, အကောင်းဆုံးစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်တွေကိုအသုံးချပြီးသပ္ပါယ်ရှင်သန်မှု၏အလွန်နှလုံးနဲ့: ဒီနေရာမှာကျနော်တို့က dopamine စနစ်အကြောင်းအကြံပြု၎င်း၏အမြစ်မှာဆုလာဘ်ထက် ပို. အခြေခံကျသော function ကိုဖြေရှင်းရန်ထလေ၏။
ဤလုပ်ငန်းကို NIDA R01DA25875 (Jeff အေ Beeler), F31DA026802 (Cristianne RM ဖရေဇီယာ), R01GM100768 (Xiaoxi Zhuang) နှင့် R56DK088515 (Xiaoxi Zhuang) ကထောက်ခံခဲ့သည်။ ကျနော်တို့သိသိသာသာနောက်ဆုံးလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်တိုးတက်ကြောင်း၎င်းတို့၏တိကျခိုင်မာစွာနှင့်အမြင်မှတ်ချက်များများအတွက်သုံးသပ်ရေးကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။
Aberman, je နှင့် Salamone, JD (1999) ။ နျူကလိယ dopamine တွေပျက်စီးမှုမြင့်မားတဲ့အချိုးအစားလိုအပ်ချက်များကြွက်များထက်ပိုအထိခိုက်မခံစေပေမယ့်မူလတန်းအစားအစာအားဖြည့်အယှက်မပေးပါဘူး accumbens ။ neuroscience 92, 545-552 ။
Pubmed Abstract | Pubmed အပြည့်အဝစာသား | CrossRef အပြည့်အဝစာသား
Aberman, je, ရပ်ကွက်, SJ နှင့် Salamone, JD (1998) ။ dopamine ရန်၏ဆိုးကျိုးများနှင့်အချိန်-သတ်တိုးတက်သော-အချိုးစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် dopamine လျော့ကျ accumbens ။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူ။ 61, 341-348 ။
Ahlenius, အက်စ်, Hillegaart, V. , Thorell, G. အ, Magnusson, O. နှင့်မုဆိုး, CJ (1987) ။ ကြွက် striatum ၏ limbic စီမံကိန်းဧရိယာသို့ CIS-flupenthixol ၏ဒေသခံလျှောက်လွှာကိုအောက်ပါ dopamine လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်ရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေး locomotor လှုပ်ရှားမှုနဲ့တိုး၏နှိမ်နင်းရေး။ ဦးနှောက် Res။ 402, 131-138 ။
Albin, RL, လူငယ်, AB နှင့် Penney, JB- (1989) ။ Basal ganglia မမှန်များ၏အလုပ်လုပ်တဲ့ခန္ဓာဗေဒ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience။ 12, 366-375 ။
Pubmed Abstract | Pubmed အပြည့်အဝစာသား
Albin, RL, လူငယ်, AB နှင့် Penney, JB- (1995) ။ အဆိုပါ Basal ganglia ပုံမမှန်ခြင်း၏အလုပ်လုပ်တဲ့ခန္ဓာဗေဒ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience။ 18, 63-64 ။
Alevizos, အေ, Lentzas, ဂျေ, Kokkoris, အက်စ်, Mariolis, အေနှင့် Korantzopoulos, P. (2005) ။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနှင့်လေဖြတ်ခြင်းအန္တရာယ်။ int ။ ဂျေ Clin ။ Pract။ 59, 922-930 ။
အလက်ဇန်းဒါး, GE (1994) ။ Basal ganglia-thalamocortical ဆားကစ်: လှုပ်ရှားမှုများကိုထိန်းချုပ်ကသူတို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကို။ ဂျေ Clin ။ Neurophysiol။ 11, 420-431 ။
အလက်ဇန်းဒါး, GE နှင့် Crutcher, MD (1990) ။ Basal ganglia ဆားကစ်၏ functional ဗိသုကာ: အပြိုင်အပြောင်းအလဲနဲ့၏အာရုံကြောအလွှာဟာ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience။ 13, 266-271 ။
အလက်ဇန်းဒါး, GE, Crutcher, MD နှင့် DeLong, MR (1990) ။ Basal ganglia-thalamocortical ဆားကစ်: မော်တာ, oculomotor "prefrontal" အတွက်အပြိုင်အလွှာနှင့် "limbic" function ။ prog ။ ဦးနှောက် Res။ 85, 119-146 ။
Allison, DB နှင့်ကက်ဆေး, DE (2001) ။ Antipsychotic-သွေးဆောင်ကိုယ်အလေးချိန်: စာပေ၏သုံးသပ်ချက်။ ဂျေ Clin ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 62 (ပျော့ပျောင်း။ 7), 22-31 ။
Anderzhanova, အီး, Covasa, အမ်နှင့် Hajnal, အေ (2007) ။ ပြောင်းလဲ Basal နှင့်အသက်အရွယ်နှင့်ဆီးချို status ကိုတစ် function ကိုအဖြစ်အဝလွန် OLETF ကြွက်များတွင် accumbens dopamine လွှတ်ပေးရန်နှိုးဆွ။ နံနက်။ ဂျေ Physiol ။ စည်းမျဉ်းများ။ Integrated ။ comp ။ Physiol။ 293, R603-R611 ။
Arase, K. , Fisler, JS, Shargill, NS, နယူးယောက်, DA နှင့်အသွင်ဆောင်လာကြောင်း, ဂျော်ဂျီယာ (1988) ။ 3-OHB နှင့်အစားအသောက်အဝလွန်တဲ့ကြွက်မော်ဒယ်အတွက်အင်ဆူလင်၏ Intracerebroventricular တာဟာ။ နံနက်။ ဂျေ Physiol။ 255, R974- R981 ။
Avena, မိုင်နှင့် Bocarsly, ME (2011) ။ မမှန်စားဦးနှောက်ဆုလာဘ်စနစ်များ Dysregulation: မူးရူးစား, bulimia nervosa နှင့် anorexia nervosa ၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များမှသည် neurochemical သတင်းအချက်အလက်။ Neuropharmacology 63, 87-96 ။
Avena, မိုင်, Rada, P. နှင့် Hoebel, BG (2008) ။ သကြားစွဲလမ်းများအတွက်သက်သေအထောက်အထား: ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း, အလွန်အကျွံသကြားစားသုံးမှု၏အမူအကျင့်များနှင့် neurochemical ဆိုးကျိုးများ။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗြာ။ 32, 20-39 ။
Avena, မိုင်, Rada, P. နှင့် Hoebel, BG (2009) ။ သကြားနဲ့အဆီ Bing စွဲလမ်းကဲ့သို့သောအပြုအမူအတွက်ကွာခြားမှုရှိသည်။ ဂျေ Nutr။ 139, 623-628 ။
Baldo, ခ, Sadeghian, K. နှင့် Basso, အေ (2002) ။ နျူကလိယအတွင်းရွေးချယ် dopamine D1 သို့မဟုတ် D2 အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများစားသုံးမိအပြုအမူများနှင့်ဆက်စပ်မော်တာလှုပ်ရှားမှုအပေါ်ငျဒသေ accumbens ။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res။ 137, 165-177 ။
Balleine, BW (2005) ။ အစားအစာ-ရှာ၏အာရုံကြောအခြေစိုက်စခန်းများ: corticostriatolimbic ဆားကစ်အတွက်အကျိုးသက်ရောက်စေ, arousal နှင့်ဆုလာဘ်။ Physiol ။ ပြုမူ။ 86, 717-730 ။
Balleine, BW, Delgado, MR နှင့် Hikosaka, O. (2007) ။ ဆုလာဘ်များနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းအတွက် dorsal striatum ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ ဂျေ neuroscience။ 27, 8161-8165 ။
Balleine, BW နှင့် O'Doherty, JP (2010) ။ အရေးယူထိန်းချုပ်မှုအတွက်လူ့နှင့်ကြွက် homologies က: ရည်မှန်းချက် - ညွှန်ကြားထားနှင့်ပုံမှန်အရေးယူမှု၏ corticostriatal ဆုံးအဖွတျ။ Neuropsychopharmacology 35, 48-69 ။
Bardgett, ME, Depenbrock, အမ်, Down, N. , အမှတ်, အမ်နှင့်အစိမ်းရောင်, အယ်လ် (2009) ။ Dopamine ကြွက်များတွင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်မှု-based ဆုံးဖြတ်ချက် modulates ။ ပြုမူနေ။ neuroscience။ 123, 242-251 ။
Baxter, အမ်နှင့် Murray, အီး (2002) ။ အဆိုပါ amygdala နှင့်ဆုလာဘ်။ နတ်။ ဗျာ neuroscience။ 3, 563-573 ။
Beeler, ဂျာ (2011) ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက်လုပ်ဆောင်မှုကိုထိန်းသိမ်းခြင်း - လေ့လာခြင်းသည်၎င်းနှင့်မည်သို့သက်ဆိုင်သနည်း။ ဦးနှောက် Res။ 1423, 96-113 ။
Beeler, ဂျာ Cao, ZFH, Kheirbek MA, နှင့် Zhuang, X တို့မှာ (2009) ။ တစ်ဦး nigrostriatal လမ်းကြောင်းချို့တဲ့ Pitx3-လစ်လပ်ကြွက်တွေမှာကင်း locomotor တုံ့ပြန်မှုအရှုံး။ Neuropsychopharmacology 34, 1149-1161 ။
Beeler, ဂျာဒေါ်, N. , ဖရေဇီယာ, CRM နှင့် Zhuang, X တို့မှာ (2010) ။ လုပ်သူများ dopamine ဆုလာဘ်သင်ယူမှု၏ခေါင်းပုံဖြတ် modulates ။ တပ်ဦး။ ပြုမူနေ။ neuroscience။ 4: 170 ။ Doi: 10.3389 / fnbeh.2010.00170
Beeler, ဂျာဖရေဇီယာ, CRM နှင့် Zhuang, X တို့မှာ (2012a) ။ ဒေသခံအစားအစာ-ရှာ၏ Dopaminergic တိုးမြှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ homeostatic ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience။ 35, 146-159 ။
Beeler, ဂျာ McCutcheon, je, Cao, ZFH, Murakami, အမ်, အလက်ဇန်းဒါး, အီး, Roitman, MF နှင့် Zhuang, X တို့မှာ (2012b) ။ အာဟာရထဲကနေ uncoupled အရသာအစားအစာများ၏အားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများရေရှည်တည်တံ့ဖို့ပျက်ကွက်။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience။ Doi: 10.1111 / j.1460-9568.2012.08167.x ။ [EPub ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ်၏] ။
Beeler, ဂျာ Prendergast, ခနှင့် Zhuang, X တို့မှာ (2006) ။ အနိမ့်လွှဲခွင်ကြွက်၏ entrainment နှင့်အပြုအမူစမ်းသပ်မှုအပေါ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲက Circadian အဆင့်များ၏သက်ရောက်မှု။ Physiol ။ ပြုမူ။ 87, 870-880 ။
ဘီရန်း, TEJ, Woolrich, မဂ္ဂါဝပ်, ဝေါ်လ်တန်, ME နှင့် Rushworth, MFS (2007) ။ မမှန်သောကမ်ဘာပျေါတှငျအချက်အလက်များ၏တန်ဖိုးကိုသင်ယူခြင်း။ နတ်။ neuroscience။ 10, 1214-1221 ။
Beninger, RJ (1983) ။ locomotor လှုပ်ရှားမှုနဲ့သင်ယူမှုအတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ ဦးနှောက် Res။ 287, 173-196 ။
Berridge, KC (2004) ။ အမူအကျင့်မှ neuroscience အတွက်လှုံ့ဆျောမှုသဘောတရားများ။ Physiol ။ ပြုမူ။ 81, 179-209 ။
Berridge, KC (2007) ။ ဆုလာဘ်အတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ over နှင့်ပတ်သက်သောဆွေးနွေးငြင်းခုံမှု - မက်လုံးမက်မက်မက်မောမှုအတွက်ကိစ္စ။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 191, 391-431 ။
Berridge, KC, Ho, C.-Y. , ရစ်ချက်, JM နှင့် DiFeliceantonio, AG က (2010) ။ အဆိုပါစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံဦးနှောက်စား: အပျြောအပါးများနှင့်အလိုဆန္ဒဆားကစ်အဝလွန်ခြင်းနှင့်အစာစားခြင်းမမှန်။ ဦးနှောက် Res။ 1350, 43-64 ။
Berthoud, H.-R. , Lenard အဆိုအရ, ရော်ဘာနှင့်ရှင် AC အ (2011) ။ စားနပ်ရိက္ခာဆုလာဘ်, hyperphagia နှင့်အဝလွန်ခြင်း။ နံနက်။ ဂျေ Physiol ။ စည်းမျဉ်းများ။ Integrated ။ comp ။ Physiol။ 300, R1266-R1277 ။
bi, အက်စ် (2005) ။ ဘီးလှုပ်ရှားမှု running otsuka ရှည် Evans tokushima ဖက်တီးကြွက်များတွင် hyperphagia နှင့်အဝလွန်ခြင်းကိုကာကွယ်တားဆီး: hypothalamic အချက်ပြ၏အခန်းကဏ္ဍ။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ် 146, 1676-1685 ။
ငွေတောင်းခံ, SK ကိုနှင့် Cowley, MA (2008) ။ catecholamines reuptake တားစီး locomotor လှုပ်ရှားမှုနဲ့ thermogenesis တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Neuropsychopharmacology 33, 1287-1297 ။
Blum, K. , Braverman, ER, Holder, JM, Lubar, JF, Monastra, VJ, Miller ကဃ, Lubar, Jo, Chen ကတီဂျေများနှင့်လာကြ, DE (2000) ။ ဆုလာဘ်ချို့တဲ့ရောဂါ: ထကြွလွယ်သောစွဲလမ်းနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအပြုအမူများ၏ရောဂါနှင့်ကုသမှုများအတွက် biogenetic မော်ဒယ်။ ဂျေ Psychoactive မူးယစ်ဆေးဝါး 32 (ပျော့ပျောင်း။ i-ဃ), 1-112 ။
Blum, K. , လျူ, Y. , Shriner, R. နှင့်ရွှေ, က MS (2011) ။ ဆုလာဘ် circuitry dopaminergic activation အစားအစာနှင့်မူးယစ်ဆေးတဏှာအပြုအမူထိန်းညှိ။ Curr ။ Pharm ။ des။ 17, 1158-1167 ။
Bolam, JP, Hanley, JJ, Booth, PA နှင့် Bevan, MD (2000) ။ အဆိုပါ Basal ganglia ၏ Synaptic အဖွဲ့အစည်းက။ ဂျေ Anat။ 196 (Pt 4), 527-542 ။
Booth, အက်ဖ်ဒဗလျူ, Gordon ကမြင်ပါတယ်, SE, Carlson, CJ နှင့် Hamilton က, MT (2000) ။ လေ့ကျင့်ခန်းဇီဝဗေဒမှတဆင့်အဓိကကာကွယ်တားဆီးရေး: ခေတ်သစ်နာတာရှည်ရောဂါများအပေါ်စစ်ဆင်နွဲ။ ဂျေ Apple က။ Physiol။ 88, 774-787 ။
Booth, အက်ဖ်ဒဗလျူနှင့် Lees, SJ (2007) ။ မျိုးဗီဇ, လှုပ်ရှားမှုနှင့်နာတာရှည်ရောဂါများအကြောင်းကိုအခြေခံမေးခွန်းများကို။ Physiol ။ Genomics 28, 146-157 ။
Brené, အက်စ်, BjØrnebekk, အေ, Aberg, အီး, သင်္ချာ, AA ကို, Olson, အယ်လ်, နှင့် Werme, အမ် (2007) ။ အပြေးအကြိုးနှင့်စိတ်မကျဆေး Antidepressants ဖြစ်ပါတယ်။ Physiol ။ ပြုမူ။ 92, 136-140 ။
ဘရောင်း, HD ကို, McCutcheon, je, Cone, JJ, Ragozzino, ME နှင့် Roitman, MF (2011) ။ မူလတန်းအစားအစာဆုလာဘ်များနှင့်ဆုလာဘ်-ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်လှုံ့ဆော်မှုအဆိုပါ striatum တစ်လျှောက်လုံး phasic dopamine အချက်ပြ၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများကျလာသော။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience။ 34, 1997-2006 ။
Brownlow, BS, Petro, အေ, Feinglos, MN နှင့် Surwit, RS (1996) ။ C57BL / 6J ကြွက်တွေမှာအစားအစာ-သွေးဆောင်အဝလွန်ခြင်းအတွက်မော်တာလှုပ်ရှားမှု၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Physiol ။ ပြုမူ။ 60, 37-41 ။
Cagniard, ခ, ဗာလစံ, PD, Brunner, ဃ, နှင့် Zhuang, X တို့မှာ (2006a) ။ တစ်အစားအစာအကျိုးသည်လှုံ့ဆျောမှုတိုးမြှင့်နာတာရှည်မွငျ့မား dopamine ပြပွဲနှင့်အတူကြွက်, ဒါပေမယ့်သင်ယူမှုမဟုတ်ပါဘူး။ Neuropsychopharmacology 31, 1362-1370 ။
Cagniard, ခ, Beeler, ဂျာ Britt, JP, McGehee, DS, Marinelli, အမ်နှင့် Zhuang, X တို့မှာ (2006b) ။ Dopamine အသစ်သောသင်ယူမှု၏မရှိခြင်းအတွက်စွမ်းဆောင်ရည် scales ။ အာရုံခံဆဲလျ 51, 541-547 ။
Cannon, C. (2004) ။ dopamine သဘာဝအလျောက်အကျိုးသည်လိုအပ်သလဲ? Physiol ။ ပြုမူ။ 81, 741-748 ။
Cannon, CM နှင့် Palmiter, RD (2003) ။ dopamine မပါဘဲဆုချ။ ဂျေ neuroscience။ 23, 10827-10831 ။
Carlsson, အေ (1993) ။ locomotor လှုပ်ရှားမှု၏ထိန်းချုပ်မှုပါဝင်ပတ်သက်သည့်အာရုံခံ circuitries နှင့် neurotransmitters တွင်။ ဂျေဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော Transm ။ ပျော့ပျောင်း။ 40, 1-12 ။
Carr က, KD (2007) ။ နာတာရှည်အစာကိုကန့်သတ်: မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်များနှင့် striatal ဆဲလ်အချက်ပြအပေါ်သက်ရောက်မှုတိုးမြှင့်။ Physiol ။ ပြုမူ။ 91, 459-472 ။
Carr က, KD (2011) ။ စားနပ်ရိက္ခာရှားပါးမှု, neuroadaptations နှင့်သဘာဝဂေဟဗေဒအတွက် dieting ၏ရောဂါဖြစ်ပွားစေသောအလားအလာ: မူးရူးစားနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု။ Physiol ။ ပြုမူ။ 104, 162-167 ။
Carr က, KD ကင်မ်, G. အများနှင့် Cabeza က de Vaca, အက်စ် (2000) ။ Hypoinsulinemia အစားအစာကန့်သတ်ခြင်းနှင့် streptozotocin-သွေးဆောင်ဆီးချိုရောဂါများက Self-stimulation တံခါး၏လျှော့ချဖျန်ဖြေလိမ့်မည်။ ဦးနှောက် Res။ 863, 160-168 ။
ကာရိုး, ME နှင့် Meisch, RA (1980) ။ မူးယစ်ဆေး-အားဖြည့်အပြုအမူအပေါ်နို့တိုက်ကျွေးရေးအခွအေန၏ဆိုးကျိုးများ: အစားအစာရရှိမှုနှိုင်းယှဉ်လျှော့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်မှာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 68, 121-124 ။
Chakravarthy, သင်္ဘော MV နှင့် Booth, အက်ဖ်ဒဗလျူ (2004) ။ အစာစားခြင်း, လေ့ကျင့်ခန်း, နှင့် "စှဲခြှတော" genotype: ခေတ်သစ်နာတာရှည်ရောဂါများတစ်ဦးဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နားလည်မှုဆီသို့ကတော့ဆက်စပ်ပုံဖော်ခြင်း။ ဂျေ Apple က။ Physiol။ 96, 3-10 ။
Chaney MA, နှင့် Rowland, NE (2008) ။ ကြွက်များတွင်စားနပ်ရိက္ခာဝယ်လိုအားလုပ်ဆောင်ချက်များကို။ အလိုဆန္ဒ 51, 669-675 ။
Chaput, J.-P. , Klingenberg, အယ်လ်, Rosenkilde, အမ်, Gilbert, J.-A. , Tremblay, အေနှင့်Sjödin, အေ (2011) ။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်စည်းမျဉ်းများတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ ဂျေအဝလွန်ခြင်း။ 2011, 1-11 ။
Charntikov, အက်စ်, Der-Ghazarian, တီ, ဟားဘတ်, MS, ဦးချို, LR, Widarma, သမဝါယမ, Gutierrez, အေ, Varela, အက်ဖ်အေနှင့် McDougall, SA (2011) ။ အဆိုပါ locomotor လှုပ်ရှားမှုနဲ့ကြွက် preweanling ၏ပုံစံအပြုအမူများအတွက် dorsal caudate-putamen အတွက် D1 နှင့် D2 receptors ၏အရေးပါမှု။ neuroscience 183, 121-133 ။
ရူ့, JF, Aragona, BJ, Heien, MLAV, Seipel, AT, Carelli, RM, နှင့် Wightman, RM (2007) ။ ညှိနှိုင်း accumbal dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု drive ကိုရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူ။ အာရုံခံဆဲလျ 54, 237-244 ။
Cohen ကို, MX နှင့်ဖရန့်, MJ (2009) ။ သင်ယူမှု, memory နဲ့ရှေးခယျြမှုအတွက် Basal ganglia function ကို၏ Neurocomputational မော်ဒယ်များ။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res။ 199, 141-156 ။
Connor, တီ, Dickinson, အေနှင့် Everitt, ခ (2001) ။ အဆိုပါ amygdala နှင့်နျူကလိယ၏ဗဟိုနျူကလိယ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုဆာပအပြုအမူအပေါ် Pavlovian လွှမ်းမိုးမှုဖြန်ဖြေအတွက်အဓိက accumbens ။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience။ 13, 1984-1992 ။
ကော်ရဲရား, အမ်, Carlson, BB, Wisniecki, အေနှင့် Salamone, JD (2002) ။ နျူကလိယကြားကာလအချိန်ဇယားအပေါ် dopamine နှင့်အလုပ်လိုအပ်ချက်များကို accumbens ။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res။ 137, 179-187 ။
Corwin, RL နှင့် Grigson, PS (2009) ။ စာတမ်းဖတ်ပွဲခြုံငုံသုံးသပ်ချက်-စားနပ်ရိက္ခာစွဲ: တကယ်တော့သို့မဟုတ်စိတ်ကူးယဉ်? ဂျေ Nutr။ 139, 617-619 ။
ဝမ်းကွဲ, MS, Sokolowski, JD များနှင့် Salamone, JD (1993) ။ ကြွက်များတွင်ဆာပတုံ့ပြန်မှုရွေးချယ်ရေးအပေါ်နျူကလိယ accumbens နှင့် ventrolateral striatal dopamine ကွယ်ပျောက်သွားစေ၏ကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူ။ 46, 943-951 ။
Dagher, အေ (2009) ။ အစာစားချင်စိတ်များ၏ neurobiology: စွဲအဖြစ်ဆာလောင်မွတ်သိပ်။ int ။ ဂျေအဝလွန်ခြင်း။ 33, S30-S33 ။
Damak, အက်စ်, Rong, အမ်, Yasumatsu, K. , Kokrashvili, Z. , Perez,, CA, Shigemura, N. , Yoshida, R. , Mosinger, ခဂျူနီယာ Glendinning, JI, Ninomiya, Y. , နှင့် Margolskee, RF (2006) ။ Trpm5 တရားမဝင်သောကြွက်, ခါးသောချိုမြိန်လျက်, umami ဒြပ်ပေါင်းများကိုတုံ့ပြန်ကြသည်။ Chem ။ အာရုံ 31, 253-264 ။
ဒါဝိဒ်က, HN, Ansseau, အမ်နှင့် Abraini, JH (2005) ။ ကြွက် caudate-putamen နှင့် "နဂိုအတိုင်း" တိရစ္ဆာန်များ၏နျူကလိယ accumbens အတွက်ဖြန့်ချိခြင်းနှင့်မော်တာတုံ့ပြန်မှု၏ Dopamine-အချိုမှုအပြန်အလှန်မော်ဂျူ။ ဦးနှောက် Res ။ ဦးနှောက် Res ။ ဗြာ။ 50, 336-360 ။
Davis က, C တို့နှင့် Carter က, JC (2009) ။ တစ်ခုစွဲရောဂါအဖြစ် compulsive ကျော်။ သီအိုရီများနှင့်သက်သေအထောက်အထားများတစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ အလိုဆန္ဒ 53, 1-8 ။
Davis က, C တို့, Patte, K. , Levitan, R. , ရိဒ်, C တို့, အေဘယ်တွိ, အက်စ်နှင့် Curtis, C. (2007) ။ လှုံ့ဆျောမှုကနေအမူအကျင့်မှ: အဝလွန်များအတွက်အန္တရာယ်ပရိုဖိုင်းအတွက်ဆုလာဘ် sensitivity ကို၏မော်ဒယ်ကျော်နှင့်အစားအစာဦးစားပေး။ အလိုဆန္ဒ 48, 12-19 ။
Davis က, JF, Choi, DL နှင့် Benoit, SC (2010a) ။ အင်ဆူလင်, leptin နှင့်ဆုလာဘ်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Endocrinol ။ Metab။ 21, 68-74 ။
Davis က, JF, Choi, DL, Schurdak, JD, Fitzgerald, MF, Clegg, DJ သမား, Lipton, JW, Figlewicz, DP နှင့် Benoit, SC (2010b) ။ Leptin ကွဲပြားအာရုံကြောဆားကစ်မှာအရေးယူဆောင်ရွက်မှုမှတစ်ဆင့်စွမ်းအင်ကိုချိန်ခွင်လျှာနှင့်လှုံ့ဆျောမှုထိန်းညှိ။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 69, 668-674 ။
Davis က, JF, Tracy, AL, Schurdak, JD, Tschöp, MH, Lipton, JW, Clegg, DJ သမားနှင့် Benoit, SC (2008) ။ အစားအသောက်အဆီမွငျ့မားသောအဆင့်အတန်းမှ exposure ကြွက်များတွင် psychostimulant ဆုလာဘ်များနှင့် mesolimbic dopamine လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့် attenuates ။ ပြုမူနေ။ neuroscience။ 122, 1257-1263 ။
ဒေါ်, ND နှင့် Doya, K. (2006) ။ သင်ယူမှုနှင့်ဆုလာဘ်၏ကွန်ပျူတာ neurobiology ။ Curr ။ Opin ။ Neurobiol။ 16, 199-204 ။
ဒေါ်, ND, င်း, Y. , နှင့်ဒါယန်း, P. (2005) ။ အမူအကျင့်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် prefrontal နှင့် dorsolateral striatal စနစ်များအကြားမသေချာမရေရာ-based ယှဉ်ပြိုင်။ နတ်။ neuroscience။ 8, 1704-1711 ။
Daw, ND၊ O'Doherty, JP, Dayan, P. , Seymour, B. နှင့် Dolan, RJ (2006) ။ လူသားများအတွက်ရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက် Cortical အလွှာများ။ သဘာဝ 441, 876-879 ။
နေ့, JJ နှင့် Carelli, RM (2007) ။ အဆိုပါနျူကလိယ accumbens နှင့် Pavlovian ဆုလာဘ်သင်ယူမှု။ အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင် 13, 148-159 ။
နေ့, JJ, ဂျုံးစ်, JL နှင့် Carelli, RM (2011) ။ နျူကလိယတွင် neuron ကြွက်များတွင်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်ဖြစ်ပွားနေသောဆုလာဘ်ကုန်ကျစရိတ်ဝှက် accumbens ။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience။ 33, 308-321 ။
နေ့, JJ, ဂျုံးစ်, JL, Wightman, RM, နှင့် Carelli, RM (2010) ။ Phasic နျူကလိယ dopamine လွှတ်ပေးရန် effort- နှင့်နှောင့်နှေး-related ကုန်ကျစရိတ် encodes accumbens ။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 68, 306-309 ။
နေ့, JJ, ဝီ, RA, Roitman, MF နှင့် Carelli, RM (2006) ။ တစ်ဦး autoshaping ပါရာဒိုင်းကနေသက်သေအထောက်အထား: နျူကလိယတွင် neuron Pavlovian ချဉ်းကပ်အပြုအမူတွေဝှက် accumbens ။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience။ 23, 1341-1351 ။
ဒါယန်း, P. နှင့် Balleine, BW (2002) ။ ဆုလာဘ်, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်အားဖြည့်သင်ယူမှု။ အာရုံခံဆဲလျ 36, 285-298 ။
ဒါယန်း, P. နှင့်င်း, Y. (2008) ။ အားဖြည့်သင်ယူမှု: ကောင်းမွန်သောဆိုးနှင့်ရုပ်ဆိုး။ Curr ။ Opin ။ Neurobiol။ 18, 185-196 ။
က de Araujo, IE ကို, Oliveira-Maia, AJ, Sotnikova, TD, Gainetdinov, RR, caron, MG, Nicolelis, mal, ရှိမုနျ, SA (2008) ။ အရသာရှိတဲ့ Receptor အချက်ပြ၏မရှိခြင်းအတွက်စားနပ်ရိက္ခာဆုလာဘ်။ အာရုံခံဆဲလျ 57, 930-941 ။
က de Araujo, IE ကို, Ren, X တို့မှာနှင့် Ferreira, JG (2010) ။ ဦးနှောက် dopamine စနစ်များအတွက် sensing ဇီဝဖြစ်စဉ်။ Probl ရလဒ်များ။ cell ကွဲပြားခြားနားသော။ 52, 69-86 ။
DeLong, အမ်နှင့် Wichmann, တီ (2009) ။ Basal ganglia function ကိုနှင့်ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏မော်ဒယ်များအပေါ်ဒိတ်လုပ်ပါ။ ပါကင်ဆက်ဆံရေး။ disorders။ 15 (ပျော့ပျောင်း။ 3), S237- S240 ။
di Chiara, G. အ, Tanda, G. အ, Cadoni, C တို့, Acquas, အီး, Bassareo, V. နှင့် Carboni, အီး (1998) ။ Homologies နှင့် dopamine ဂီယာအပေါ်အလွဲသုံးမှုနှင့်သမားရိုးကျစစ်ကူ (အစားအစာ) ၏မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏လုပ်ဆောင်ချက်အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှု: မူးယစ်ဆေးမှီခို၏ယန္တရား၏စကားပြန်မူဘောင်။ Adv ။ Pharmacol။ 42, 983-987 ။
Dishman, RK (2008) ။ အဝလွန်ခြင်း၏ etiology အတွက်မျိုးဗီဇ-ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု interaction က: အပြုအမူထည့်သွင်းစဉ်းစား။ အဝလွန်ခြင်း (Silver, နွေဦး) 16 (ပျော့ပျောင်း။ 3), S60-S65 ။
el-Amami, အိပ်ချ်, Holland, PC ကို (2007) ။ သင်ယူ Orient နဲ့မက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှုအပေါ် ventral tegmental ဧရိယာသို့မဟုတ် substantia nigra ထံမှ amygdala အလယ်ပိုင်းနျူကလိယချိတ်ဆက်မှုကိုဖြတ်တောက်၏ Dissociable ဆိုးကျိုးများ။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience။ 25, 1557-1567 ။
အကြီးအကဲတစ်ဦး, SJ နှင့်ရောဘတ်, SB (2007) ။ အစားအစာစားသုံးမှုနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ဆူပေါ်လေ့ကျင့်ခန်းများ၏သက်ရောက်မှု: ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေလေ့လာမှုများ၏အကျဉ်းချုပ်။ Nutr ။ ဗြာ။ 65, 1-19 ။
Elmquist, JK, Coppari, R. , Balthasar, N. , Ichinose, အမ်နှင့်ဝယျလျ, BB (2005) ။ အစားအစာစားသုံးမှု, ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်နှင့်ဂလူးကို့စ homeostasis ထိန်းချုပ် hypothalamic လမ်းကြောင်းဖော်ထုတ်ခြင်း။ ဂျေ comp ။ Neurol။ 493, 63-71 ။
Enriori, PJ, အီဗန်, AE, Sinnayah, P. , Jobst, EE, Tonelli-Lemos, အယ်လ်, Bill, SK ကို, Glavas, MM, Grayson, BE, Perello, အမ်, Nillni, EA ၏, Grove, KL, နှင့် Cowley, MA (2007) ။ အစားအသောက်-သွေးဆောင်အဝလွန်ခြင်း arcuate melanocortin အာရုံခံအတွက်ပြင်းထန်ပေမယ့်နောက်ပြန်လှည် leptin ခုခံဖြစ်ပေါ်စေသည်။ cell Metab။ 5, 181-194 ။
Everitt, BJ နှင့် Robbins, TW (2005) ။ မူးယစ်ဆေးစွဲများအတွက်အားဖြည့်များ၏အာရုံကြောစနစ်များ: လုပ်ရပ်များကနေအလေ့အထမှမလှူရန်။ နတ်။ neuroscience။ 8, 1481-1489 ။
Farooqi, IS, Bullmore, အီး, Keogh, ဂျေ, Gillard, ဂျေ, O'Rahilly, အက်စ်နှင့်ဖလက်ချာ, PC ကို (2007) ။ Leptin သည်သန္ဓေသားလောင်းဒေသများနှင့်လူ့အစာစားခြင်းအမူအကျင့်များကိုထိန်းညှိပေးသည်။ သိပ္ပံ 317, 1355 ။
Figlewicz, DP, Bennett က, JL, Aliakbari, အက်စ်, Zavosh, အေနှင့် Sipols, AJ (2008) ။ အင်ဆူလင်ကြွက်များတွင်စူးရှသော sucrose စားသုံးမှုနှင့် sucrose Self-အုပ်ချုပ်ရေးကိုလျော့ချဖို့ကွဲပြားခြားနားသော CNS က်ဘ်ဆိုက်များမှာဆောင်ရွက်သည်။ နံနက်။ ဂျေ Physiol ။ စည်းမျဉ်းများ။ Integrated ။ comp ။ Physiol။ 295, R388-R394 ။
Figlewicz, DP, Bennett က, ဂျေ, အီဗန်, SB, Kaiyala, K. , Sipols, AJ နှင့် Benoit, SC (2004) ။ Intraventricular အင်ဆူလင်နှင့် leptin ကြွက်များတွင် High-အဆီဓာတ်စာနှင့်အတူအေးစက်သောအရပ် preference ကို reverse ။ ပြုမူနေ။ neuroscience။ 118, 479-487 ။
Figlewicz, DP, Bennett က, JL, Naleid, Am, Davis က, C တို့နှင့် Grimm, JW (2006) ။ Intraventricular အင်ဆူလင်နှင့် leptin ကြွက်များတွင် sucrose Self-အုပ်ချုပ်ရေးလျော့ကျသွားသည်။ Physiol ။ ပြုမူ။ 89, 611-616 ။
Figlewicz, DP နှင့် Benoit, SC (2009) ။ အင်ဆူလင်, leptin နှင့်အစားအစာဆုလာဘ်: 2008 ကို update ။ နံနက်။ ဂျေ Physiol ။ စည်းမျဉ်းများ။ Integrated ။ comp ။ Physiol။ 296, R9-R19 ။
Figlewicz, DP, Higgins, MS, Ng သည်-အီဗန်, SB နှင့်ဟာဗဲလ်, PJ (2001) ။ Leptin အစားအစာ-ကန့်သတ်ကြွက်များတွင် sucrose-conditioning ရာအရပျ preference ကိုနောက်ကြောင်းပြန်။ Physiol ။ ပြုမူ။ 73, 229-234 ။
Figlewicz, DP, Macdonald Naleid, အေနှင့် Sipols, AJ (2007) ။ adiposity အချက်ပြမှုများအားဖြင့်အစားအစာကိုဆုလာဘ်၏ Modulation ။ Physiol ။ ပြုမူ။ 91, 473-478 ။
Figlewicz, DP နှင့် Sipols, AJ (2010) ။ စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနစည်းမျဉ်းအချက်ပြမှုများနှင့်အစားအစာဆုလာဘ်။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူ။ 97, 15-24 ။
Finlayson, G. အဘုရင်, N. နှင့်ဒဲလ်, je (2007) ။ အစားအသောက်ချို့တဲ့ vs. like နှိပ်: လူ့အစာစားချင်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်နှင့်အလေးချိန်စည်းမျဉ်းများအတွက်အရေးပါမှု။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗြာ။ 31, 987-1002 ။
Flagel, SB, Clark က, JJ, ရော်ဘင်ဆင်, TE, Mayo အဘိဓါန်, အယ်လ်, Czuj, အေ, Willuhn, ဗြဲ, Akers,, CA, ကလင်တန်, SM, Phillips က, Pem နှင့် Akil, အိပ်ချ် (2010) ။ လှုံ့ဆော်မှု-ဆုလာဘ်သင်ယူမှုအတွက် dopamine များအတွက်တစ်ဦးကရွေးချယ်အခန်းကဏ္ဍ။ သဘာဝ 469, 53-57 ။
Foley, TE နှင့် Fleshner, အမ် (2008) ။ လေ့ကျင့်ခန်းအပြီးတွင် dopamine ဆားကစ်၏ Neuroplasticity: ဗဟိုပင်ပန်းနွမ်းနယ်များအတွက်ဂယက်ရိုက်။ Neuromolecular Med။ 10, 67-80 ။
Fontanini, အေနှင့် Katz, DB (2009) ။ gustatory cortical လှုပ်ရှားမှု၏အမူအကျင့်မော်ဂျူ။ အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ 1170, 403-406 ။
Ford ကား, ES နှင့် Mokdad, AH (2008) ။ အနောက်ဘက်ကမ္ဘာခြမ်းမှာရှိတဲ့အဝလွန်ခြင်း၏ကူးစက်ရောဂါ။ ဂျေ Clin ။ Endocrinol ။ Metab။ 93, S1-S8 ။
ဖရန့်, MJ, Doll, BB, OAS-Terpstra, ဂျေနှင့် Moreno, အက်ဖ် (2009) ။ Prefrontal နှင့် striatal dopaminergic ဗီဇရှာဖွေရေးနှင့်ခေါင်းပုံဖြတ်အတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုကြိုတင်ခန့်မှန်း။ နတ်။ neuroscience။ 12, 1062-1068 ။
Fulton, အက်စ်, Pissios, P. , Manchon, RP, Stiles, အယ်လ်, ဖရန့်, အယ်လ်, Pothos, မာခ်, Maratos-လက်ကမ်းကြော်ငြာတွေ, အီး, နဲ့လက်ကမ်းကြော်ငြာတွေ, JS (2006) ။ အဆိုပါ mesoaccumbens dopamine လမ်းကြောင်း၏ Leptin စည်းမျဉ်း။ အာရုံခံဆဲလျ 51, 811-822 ။
Fulton, အက်စ်, Woodside, ခနှင့် Shizgal, P. (2000) ။ leptin အားဖြင့်ဦးနှောက်ကိုဆုလာဘ် circuitry ၏ Modulation ။ သိပ္ပံ 287, 125-128 ။
Funkat, အေ, Massa, CM, Jovanovska, V. , Proietto, ဂျေနှင့် Andrikopoulos, အက်စ် (2004) ။ high-အဆီဓာတ်စာတုံ့ပြန်ကြွက်သုံးခု inbred မျိုးကွဲ (C57BL / 6, DBA /2နှင့် 129T2) ၏ဇီဝဖြစ်စဉ်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်။ ဂျေ Nutr။ 134, 3264-3269 ။
Gaesser, ဂျော်ဂျီယာ (2007) ။ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါ, type ကို2ဆီးချိုရောဂါများနှင့်ဇီဝဖြစ်စဉ် syndrome ရောဂါ၏ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ကုသမှုများအတွက်လေ့ကျင့်ခန်း။ Curr ။ Diab ။ rep။ 7, 14-19 ။
Gan, Jo, ဝေါ်လ်တန်, ME နှင့် Phillips က, Pem (2010) ။ mesolimbic dopamine အားဖြင့်အနာဂတ်ဆုလာဘ်၏ Dissociable ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အကျိုးရှိ encoding က။ နတ်။ neuroscience။ 13, 25-27 ။
ပန်းကုံး, T. ဂျူနီယာ Schutz, အိပ်ချ်, ချာပယ်လ် MA, Keeney, ကယ်, နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း, TH, ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်, LE, Acosta, ဒဗလျူ, Drenowatz, C တို့, Maciel, RC, ဗန် Dijk, G. အ, Kotz, CM နှင့် Eisenmann, JC (2011) ။ လူ့ခြင်းနှင့်ကြွက်အမြင်များ: မိမိဆန္ဒအလျောက်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းအလိုအလြောကျကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အဝလွန်ခြင်းစပ်လျဉ်းနေ့စဉ်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်၏ဇီဝထိန်းချုပ်မှု။ ဂျေ Exp ။ Biol။ 214, 206-229 ။
Geiger, BM, Behr, GG, ဖရန့်, LE, Caldera-Siu, အေဒီ, Beinfeld, MC, Kokkotou, ဥပမာများနှင့် Pothos, မာခ် (2008) ။ အဝလွန်ခြင်း-ကျရောက်နေတဲ့ကြွက်များတွင်ချွတ်ယွင်း mesolimbic dopamine exocytosis အဘို့သက်သေသာဓက။ FASEB J ကို။ 22, 2740-2746 ။
Geiger, BM, Haburcak, အမ်, Avena, မိုင်, Moyer, MC, Hoebel, BG နှင့် Pothos, မာခ် (2009) ။ ကြွက်အစားအသောက်အဝလွန်ခြင်းအတွက် mesolimbic dopamine neurotransmission ၏လိုငွေပြမှု။ neuroscience 159, 1193-1199 ။
goto, Y. , Otani, အက်စ်နှင့်တော်ကကျေးဇူး, AA ကို (2007) ။ အသစ်တစ်ခုကိုရှုထောင့်: dopamine လွှတ်ရာယဉ်နှင့်ယန်။ Neuropharmacology 53, 583-587 ။
Greendale, ဂျော်ဂျီယာ, Barrett-Connor, အီး, Edelstein, အက်စ်, Ingles, အက်စ်, နှင့်မိုဃ်းသီး, R. (1995) ။ တစ်သက်တာအပန်းဖြေလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်အရိုးပွရောဂါ။ အဆိုပါချို Bernardo လေ့လာမှု။ နံနက်။ ဂျေ Epidemiol။ 141, 951-959 ။
Greenwood, BN, Foley, TE, Le, တီဗီ, ခိုင်ခံ့, PV, Loughridge, AB, နေ့ခုတ်လှဲခြင်း, Fleshner, အမ် (2011) ။ ရေရှည်မိမိဆန္ဒအလျောက်ဘီးပြေးကြိုးနှင့် mesolimbic ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းအတွက် plasticity ထုတ်လုပ်သည်။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res။ 217, 354-362 ။
Greenwood, MR, Quartermain, ဃ, ဂျွန်ဆင်, PR စနစ်, Cruce, ဂျာနှင့် Hirsch က, ဂျေ (1974) ။ မျိုးရိုးဗီဇအဝလွန်နှင့် hypothalamic-hyperphagic ကြွက်များနှင့်ကြွက်များစားနပ်ရိက္ခာလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူ။ Physiol ။ ပြုမူ။ 13, 687-692 ။
Haas, အယ်လ်, Cerf-Ducastel, ခနှင့်မာဖီ, C. (2009) ။ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုနှင့်မွတ်မပြေ၏ဇီဝကမ္မပြည်နယ်များစဉ်အတွင်းစင်ကြယ်သောအရသာလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန် cortical activation ။ Neuroimage 44, 1008-1021 ။
Haber, အက်စ် (2003) ။ အဆိုပါမျောက် Basal ganglia: အပြိုင်နှင့် Integrated ကွန်ရက်များ။ ဂျေ Chem ။ Neuroanat။ 26, 317-330 ။
Haber, SN နှင့် Knutson, ခ (2010) ။ အကျိုးကိုဆားကစ်: မျောက်ခန္ဓာဗေဒနှင့်လူ့ပုံရိပ်ချိတ်ဆက်။ Neuropsychopharmacology 35, 4-26 ။
Hajnal, အေ, စမစ်, မိသားစုဆရာဝန်နှင့် Norgren, R. (2004) ။ ခံတွင်း sucrose ဆွတိုးကြွက်များတွင် dopamine accumbens ။ နံနက်။ ဂျေ Physiol ။ စည်းမျဉ်းများ။ Integrated ။ comp ။ Physiol။ 286, R31-R37 ။
Hattori, အက်စ်, Li က, ဆိုးကျိုး, Matsui, N. နှင့် Nishino, အိပ်ချ် (1993) ။ microdialysis နှင့်အတူပေါင်းစပ်စက်ခါးပတ်အပြေး 6-OHDA lesioned ကြွက်များတွင် dopaminergic အစားထိုးခြင်းနည်းပညာသည်အောက်ပါမော်တာလိုငွေပြမှုနှင့်တိုးတက်မှုအကဲဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး။ Neurol ။ neuroscience။ 6, 65-72 ။
Hattori, အက်စ်, Naoi, အမ်နှင့် Nishino, အိပ်ချ် (1994) ။ ကြွက်များတွင်အပြေးပြေးစက်စဉ်အတွင်း Striatal dopamine လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်: ပြေး၏အမြန်နှုန်းစပ်လျဉ်း။ ဦးနှောက် Res ။ နွားလား။ 35, 41-49 ။
ဟာဗဲလ်, PJ (2000) ။ ခန္ဓာကိုယ်-အလေးချိန်စည်းမျဉ်းထဲမှာ adipose တစ်ရှူးများ၏အခန်းကဏ္ဍ: leptin ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စွမ်းအင်ချိန်ခွင်လျှာထိန်းညှိယန္တရားများ။ proc ။ Nutr ။ Soc။ 59, 359-371 ။
Hawley, JA နှင့် Holloszy, JO (2009) ။ လေ့ကျင့်ခန်း - ဒါဟာတကယ့်အရာပဲ။ Nutr ။ ဗြာ။ 67, 172-178 ။
Helmrich, SP, Ragland, DR, Leung, RW နှင့် Paffenbarger, RS (1991) ။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနှင့် Non-အင်ဆူလင်-မှီခိုများတွင်ဆီးချိုရောဂါ၏လျော့ချဖြစ်ပျက်မှု။ N. Engl ။ ဂျေ Med။ 325, 147-152 ။
Hess, ဃ, Dunn, အမ်, Heldmaier, G. အ, Klingenspor, အမ်နှင့် Rozman, ဂျေ (2010) ။ အစားအသောက်များတွင်-သွေးဆောင်အဝလွန်ခြင်းမှကျရောက်နေတဲ့သို့မဟုတ်ခံနိုင်ရည်ကြွက်များတွင်စွမ်းအင်စည်းမျဉ်းထိခိုက်အပြုအမူယန္တရားများ။ Physiol ။ ပြုမူ။ 99, 370-380 ။
ဟေးလ်, Jo, Wyatt, HR, ရိဒ်, GW, ပေတရု, JC (2003) ။ အဝလွန်ခြင်းနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်: ငါတို့သည်ဤအရပ်မှသွားရပါဘူးဘယ်မှာ? သိပ္ပံ 299, 853-855 ။
Hodos, ဒဗလျူ (1961) ။ ဆုလာဘ်အစွမ်းသတ္တိ၏တစ်ဦးအတိုင်းအတာအဖြစ်တိုးတက်ရေးပါတီအချိုးအစား။ သိပ္ပံ 134, 943-944 ။
ဟော်လန်, PC ကိုနှင့် Gallagher, အမ် (1993) ။ Amygdala အလယ်ပိုင်းနျူကလိယကိုတွေ့ရှိရပါသည် conditional လှုံ့ဆော်မှုအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်လျှော့နှစ်တိုးနှောင့်အယှက်, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ပါဘူး။ ပြုမူနေ။ neuroscience။ 107, 246-253 ။
Holloszy, Jo (1988) ။ စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်အသက်ရှည်: ကြွက်အပေါ်လေ့လာမှုများ။ ဂျေ Gerontol။ 43, B149-B151 ။
Holloszy, Jo, Smith က ek, စပျစ်နွယ်ပင်, အမ်နှင့်အဒမ်, အက်စ် (1985) ။ ကြွက်၏အသက်ရှည်အပေါ်မိမိဆန္ဒအလျောက်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဂျေ Apple က။ Physiol။ 59, 826-831 ။
Hommel, JD, Trinko, R. , Sears, RM, Georgescu, ဃ, လျူ, ZW, Gao, xB, Thurmon, JJ, Marinelli, အမ်နှင့် DiLeone, RJ (2006) ။ midbrain dopamine အာရုံခံအတွက်အချက်ပြ Leptin အဲဒီ receptor နို့တိုက်ကျွေးရေးထိန်းညှိ။ အာရုံခံဆဲလျ 51, 801-810 ။
Huang က, X.-F. , ယု, Y. , Zavitsanou, K. , ဟန်, အမ်နှင့် Storlien, အယ်လ် (2005) ။ နာတာရှည် High-အဆီဓာတ်စာ-သွေးဆောင်အဝလွန်ခြင်းမှကျရောက်နေတဲ့, ဒါမှမဟုတ်ခံနိုင်ရည်ကြွက်တွေမှာ dopamine D2 နှင့် D4 အဲဒီ receptor နှင့် tyrosine hydroxylase mRNA ၏ differential စကားရပ်။ ဦးနှောက် Res ။ Mol ။ ဦးနှောက် Res။ 135, 150-161 ။
Huffman, DM, Moellering, DR, Grizzle, WE, Stockard, CR, ဂျွန်ဆင်, က MS နှင့်နက်ဂျီ TR (2008) ။ ကြွက်တွေမှာအိုမင်း၏ biomarkers အပေါ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်ကယ်လိုရီကန့်သတ်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ နံနက်။ ဂျေ Physiol ။ စည်းမျဉ်းများ။ Integrated ။ comp ။ Physiol။ 294, R1618-R1627 ။
Humphry, MD Khamassi, အမ်နှင့် Gurney, K. (2012) ။ အဆိုပါ Basal ganglia မှတဆင့်ရှာဖွေတူးဖော်ရေး-ခေါင်းပုံဖြတ် Trade-off ၏ Dopaminergic ထိန်းချုပ်မှု။ တပ်ဦး။ neuroscience။ 6:9။ Doi: 10.3389 / fnins.2012.00009
Humphry, MD နှင့် Prescott, တီဂျေ (2010) ။ အဆိုပါ ventral Basal ganglia, အာကာသ, နည်းဗျူဟာများနှင့်ဆုလာဘ်ရဲ့လမ်းဆုံမှာရွေးချယ်ရေးယန္တရား။ prog ။ Neurobiol။ 90, 385-417 ။
Hursh, SR, Raslear, TG, Shurtleff, ဃ, Bauman, R. နှင့် Simmons, အယ်လ် (1988) ။ စားစရာဘို့ဝယ်လိုအားတစ်ကုန်ကျစရိတ်-အကျိုးအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ဂျေ Exp ။ စအို။ ပြုမူ။ 50, 419-440 ။
Hursh, SR နှင့် Silberberg, အေ (2008) ။ စီးပွားရေးဇုန်ဝယ်လိုအားနှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောတန်ဖိုး။ Psychol ။ ဗြာ။ 115, 186-198 ။
Ifland, JR, Preuss, HG, Marcus, MT, Rourke, KM, တေလာ, WC, Burau, K. , Jacobs, WS, Kadish, ဒဗလျူနှင့် Manso, G. အ (2009) ။ သန့်စင်ပြီးအစားအသောက်စွဲလမ်း: တစ်ဂန္ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါ။ Med ။ ယူဆချက် 72, 518-526 ။
ဂျွန်ဆင်, လေး, မြားနှငျ့ Kenny, PJ (2010) ။ အဝလွန်ကြွက်များတွင်စွဲတူသောဆုလာဘ်ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် compulsive စား Dopamine D2 receptors ။ နတ်။ neuroscience။ 13, 635-641 ။
ကယ်လီ, AE (2004) ။ အစာစားချင်စိတ်လှုံ့ဆော်မှု၏ Ventral striatal ထိန်းချုပ်မှု: စားသုံးမိအပြုအမူအတွက်အခန်းကဏ္ဍနှင့်ဆုလာဘ်-related သင်ယူမှု။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗြာ။ 27, 765-776 ။
ကယ်လီ, PH သည် (1975) ။ nigrostriatal သို့မဟုတ် mesolimbic dopamine ပါဝင်သောဆိပ်ကမ်းများနှင့်ကြွက်များ၏မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်လည်ပတ်၏တစ်ဖက်သတ် 6-hydroxydopamine ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ဦးနှောက် Res။ 100, 163-169 ။
ကယ်လီ, SA, Nehrenberg, DL, Peirce, JL, ဟွာ, K. , Steffy, BM, Wiltshire, တီ, Pardo-Manuel က de Villena, အက်ဖ်, ပန်းကုံး, တီနှင့်ဘုန်းအသရေ, ဃ (2010) ။ ကြွက်တစ်ခုအဆင့်မြင့် intercross လိုင်းအတွက်မိမိဆန္ဒအလျောက်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်း၏မျိုးဗီဇဗိသုကာ။ Physiol ။ Genomics 42, 190-200 ။
Kenny, PJ (2010) ။ အဝလွန်ခြင်းအတွက်ဆုလာဘ်ယန္တရားများ: သစ်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုနှင့်အနာဂတ်လမ်းညွန်။ အာရုံခံဆဲလျ 69, 664-679 ။
Kheirbek MA, Beeler, ဂျာ Ishikawa, Y. နှင့် Zhuang, X တို့မှာ (2008) ။ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှုအတွက်ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းအခြေခံစခန်းလမ်းကြောင်း။ ဂျေ neuroscience။ 28, 11401-11408 ။
Kheirbek MA, Britt, JP, Beeler, ဂျာ Ishikawa, Y. , McGehee, DS နှင့် Zhuang, X တို့မှာ (2009) ။ Adenylyl cyclase အမျိုးအစား5corticostriatal plasticity နှင့် striatum-မှီခိုသင်ယူမှုကိုအထောက်အကူပြုရန်။ ဂျေ neuroscience။ 29, 12115-12124 ။
Kitanaka, N. , Kitanaka, ဂျေ, ခန်းမ, FS, Uhl, ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, Watabe, K. , Kubo, အိပ်ချ်, Takahashi, အိပ်ချ်, Tatsuta, တီ, Morita, Y. နှင့် Takemura, အမ် (2012 ) ။ ကြွက်မှစိတ်ကြွဆေး၏တစ်ဦးကတစ်ခုတည်းအုပ်ချုပ်ရေးစောစောအလင်းကာလ၌မှောင်မိုက်ကာလအတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိဘီးလှုပ်ရှားမှု running လျော့နည်းစေပါသည်။ ဦးနှောက် Res။ 1429, 155-163 ။
Knab, Am နှင့် Lightfoot, JT (2010) ။ အဆိုပါ dopamine စနစ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်ကြွနှင့်အိပ်ရာအာလူးမုသားအကြားခြားနားချက်ကိုပါသလား int ။ ဂျေ Biol ။ သိပ္ပံ။ 6, 133-150 ။
Koek, ဒဗလျူ, ပြင်သစ်, က CP နှင့် Javors, MA (2012) ။ မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင်မော်တာဆွ, မော်တာ incoordination နှင့်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင် hypothermia ။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 219, 1027-1037 ။
Koob, gf နှင့် Volkow, ND (2010) ။ စွဲလမ်း၏ Neurocircuitry ။ Neuropsychopharmacology 35, 217-238 ။
Krawczewski Carhuatanta, ka, Demuro, G. အ, Tschöp, MH, Pfluger, PT, Benoit, SC နှင့် Obici, အက်စ် (2011) ။ မိမိဆန္ဒအလျောက်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်း adiposity ၏လွတ်လပ်သော High-အဆီဓာတ်စာ-သွေးဆောင် leptin ခုခံပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ် 152, 2655-2664 ။
Krügel, U. , Schraft, တီ, Kittner, အိပ်ချ်, Kiess, ဒဗလျူနှင့် Illes, P. (2003) ။ ကြွက်နျူကလိယထဲမှာဘီစီစီအမျိုးအစားနှင့်နို့တိုက်ကျွေးရေး-evoked dopamine လွှတ်ပေးရန် accumbens leptin နေဖြင့်စိတ်ကျရောဂါသည်။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ Pharmacol။ 482, 185-187 ။
Kurth-နယ်လ်ဆင်, Z. နှင့် Redish, အေဒီ (2009) ။ ဖြန့်ဝေကိုယ်စားပြုအတူသင်ယူယာယီ-ခြားနားချက်အားဖြည့်။ PLoS ONE 4: e7362 ။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0007362
LaMonte, MJ, တိုနီဘလဲ, SN နှင့်ဘုရားကျောင်း, TS (2005) ။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်ဆီးချိုရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေး။ ဂျေ Apple က။ Physiol။ 99, 1205-1213 ။
Leamy, LJ, ဘုန်းအသရေ, ဃ, နှင့် Lightfoot, JT (2008) ။ ကြွက်များတွင်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုစရိုက်များတစ်ခု epistatic မျိုးဗီဇအခြေခံ။ ဂျေကဒီမှာ။ 99, 639-646 ။
Leddy, JJ, Epstein, LH, Jaroni, JL, Roemmich, ဖြစ်မှု, Paluch, RA, Goldfields, GS, နှင့် Lerman, C. (2004) ။ အဝလွန်အမျိုးသားများအတွက်အစာစားခြင်းအပေါ် methylphenidate ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ အဝလွန်ခြင်း။ res။ 12, 224-232 ။
Lee က, အိပ်ချ်, Groshek, အက်ဖ်နှင့် Petrovich, G. အ (2005) ။ အစားအသောက်နှင့်အတူတွဲနေတဲ့အမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုများအေးစက်အတွက် amygdalo-nigral circuitry ၏အခန်းက္ပ။ ဂျေ neuroscience။ 25, 3881-3888 ။
Lehéricy, အက်စ်, Benali, အိပ်ချ်, ဗန်က de Moortele, P.-F. , Pélégrini-Issac, အမ်, Waechter, တီ, Ugurbil, K. နှင့် Doyon, ဂျေ (2005) ။ ကွဲပြား Basal ganglia နယ်မြေများအစောပိုင်းနှင့်အဆင့်မြင့်မော်တော် sequence ကိုသင်ယူမှုအတွက်စေ့စပ်နေကြတယ်။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ။ 102, 12566-12571 ။
Leinninger, GM က, Jo, Y.-H. , Leshan, RL, လူးဝစ်, GW, ယန်, အိပ်ချ်, Barrera, JG, Wilson က, အိပ်ချ်, Opland, DM, Faouzi MA, Gong, Y. , ဂျုံးစ်, JC , Rhodes, CJ, က Chua, အက်စ်ဂျူနီယာ Diano, အက်စ်, Horvath, TL, Seeley, RJ, Becker က, JB, Münzberg, အိပ်ချ်, နှင့် Myers, MG ဂျူနီယာ (2009) ။ Leptin အဆိုပါ mesolimbic dopamine system ကို modulate နှင့်နို့တိုက်ကျွေးရေးနှိမ်နင်းရန် leptin အဲဒီ receptor-ဖော်ပြ lateral hypothalamic အာရုံခံမှတဆင့်ဆောင်ရွက်သည်။ cell Metab။ 10, 89-98 ။
Leinninger, GM က, Opland, DM, Jo, Y.-H. , Faouzi, အမ်, Christensen, အယ်လ်, Cappellucci, LA က, Rhodes, CJ, Gnegy, ME, Becker က, JB, Pothos, မာခ်, Seasholtz, AF, Thompson က, RC နှင့် Myers, MG ဂျူနီယာ (2011) ။ neurotensin အာရုံခံမှတဆင့် Leptin အရေးယူ orexin, အ mesolimbic dopamine စနစ်နှင့်စွမ်းအင်ဟန်ချက်ထိန်းချုပ်သည်။ cell Metab။ 14, 313-323 ။
leng, အေ, Mura, အေ, Hengerer, ခ, Feldon, ဂျေနှင့် Ferger, ခ (2004) ။ ကြွက်တွေမှာမိမိဆန္ဒအလျောက်ဘီးပြေးအပေါ် dopamine biosynthesis ပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့် 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP) နဲ့ neurotoxic dopamine ကွယ်ပျောက်သွားစေ၏ဆိုးကျိုးများ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res။ 154, 375-383 ။
Leshan, RL, Opland, DM, လူးဝစ်, GW, Leinninger, GM က, ပက်တာ, CM, Rhodes, CJ, Münzberg, အိပ်ချ်, နှင့် Myers, MG (2010) ။ Ventral tegmental ဧရိယာ leptin အဲဒီ receptor အာရုံခံအထူးသမှပရောဂျက်များနှင့်တိုးချဲ့ဗဟို amygdala ၏ cocaine- နှင့်စိတ်ကြွဆေး-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်မှတ်တမ်းတွင် neuron ထိန်းညှိ။ ဂျေ neuroscience။ 30, 5713-5723 ။
Levin, (2010) BE ။ စွမ်းအင် homeostasis နှင့်အဝလွန်ခြင်းကိုထိန်းညှိစနစ်များကိုထိခိုက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဗီဇက x ပတ်ဝန်းကျင် interaction က။ တပ်ဦး။ Neuroendocrinol။ 31, 270-283 ။
Levin, BE နှင့် Dunn-Meynell, AA ကို (2004) ။ နာတာရှည်လေ့ကျင့်ခန်းအစားအသောက်များတွင်-သွေးဆောင်အဝလွန်ကြွက်များတွင်ကာကွယ်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်အမြတ်နှင့် adiposity ကိုလျော့နည်းစေတယ်လေ။ နံနက်။ ဂျေ Physiol ။ စည်းမျဉ်းများ။ Integrated ။ comp ။ Physiol။ 286, R771-R778 ။
Leyton, အမ်, Boileau, ဗြဲ, Benkelfat, C တို့, Diksic, အမ်, ဘေကာ, G. အများနှင့် Dagher, အေ (2002) ။ ကျန်းမာယောက်ျားတစ်ဦးပေ / [11C] raclopride လေ့လာမှု: extracellular dopamine, မူးယစ်ဆေးလိုနှင့်အသစ်အဆန်းရှာအတွင်းဖက်တမင်းဆေးပြား-သွေးဆောင်တိုး။ Neuropsychopharmacology 27, 1027-1035 ။
လီ, Y. , တောင်, တီ, ဟန်, အမ်, ချန်, ဂျေ, ဝမ်, R. နှင့် Huang က, X.-F. (2009) ။ high-အဆီဓာတ်စာကြွက်တွေမှာမသက်ဆိုင်ဘဲမူလအဝလွန်ခြင်းလွယ်ကူစွာထိခိုက်၏ tyrosine hydroxylase mRNA စကားရပ်လျော့နည်းစေပါသည်။ ဦးနှောက် Res။ 1268, 181-189 ။
လင်းအယ်လ်မာတင်, R. , Schaffhauser, AO နှင့်နယူးယောက်, DA (2001) ။ အစားအသောက်များတွင်ဖွဲ့စည်းမှုအတွက်အပြောင်းအလဲတချို့နှင့်အတူရံ leptin ဖို့တုန့်ပြန် acute အပြောင်းအလဲများကို။ နံနက်။ ဂျေ Physiol ။ စည်းမျဉ်းများ။ Integrated ။ comp ။ Physiol။ 280, R504-R509 ။
liste, ဗြဲ, Guerra, MJ, Caruncho, HJ နှင့် Labandeira-Garcia က, JL (1997) ။ စက်ခါးပတ်ပေါ်ပြေး NMDA အချိုမှုများနှင့် dopamine receptors မှတဆင့် striatal Fos စကားရပ်ဖြစ်ပေါ်သည်။ Exp ။ ဦးနှောက် Res။ 115, 458-468 ။
Lomanowska, အေ, Gormley, အက်စ်နှင့် Szechtman, အိပ်ချ် (2004) ။ အဆိုပါ dopamine agonist quinpirole မှ locomotor အကဲဆတ်ခြင်း Presynaptic ဆွနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူ။ 77, 617-622 ။
မေတ္တာရှင်, DM (2010) ။ အဆိုပါ dorsal striatum အတွက် Synaptic မော်ဂျူ, plasticity နှင့်သင်ယူမှုအတွက် Neurotransmitter အခန်းကဏ္ဍ။ Neuropharmacology 58, 951-961 ။
Lowe, MR နှင့် Levine, AS (2005) ။ စိတ်ရင်းနဲ့ Diet ကျော်အငြင်းပွားဖွယ်ရာအစာစားခြင်း: လိုချင်ထက်လျော့နည်းသာရှိပြီးပြည်ပမှလိုအပ်သည်ထက်လျော့နည်းစားသုံးခြင်း။ အဝလွန်ခြင်း။ res။ 13, 797-806 ။
Ludwig, တီ, Chua, အက်စ်, ဝယျလျ, ခနှင့် Elmquist, ဂျေ (2005) ။ အဆိုပါ hypothalamic arcuate နျူကလိယ: ဂလူးကို့စ homeostasis နှင့် locomotor လှုပ်ရှားမှုအပေါ် leptin ရဲ့သက်ရောက်မှုဖြန်ဖြေဘို့အဓိက site ကို။ cell Metab။ 1, 63-72 ။
Lutter, အမ်နှင့် Nestler, EJ (2009) ။ Homeostatic နှင့် hedonic အချက်ပြမှုများကိုအစားအစာစားသုံးမှု၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက်အပြန်အလှန်။ ဂျေ Nutr။ 139, 629-632 ။
Lüscher, C တို့နှင့် Malenka, RC (2011) ။ စွဲလမ်းထဲမှာမူးယစ်ဆေး-evoked Synaptic plasticity: မော်လီကျူးအပြောင်းအလဲများကနေပတ်လမ်းအသစ်ပြန်ပြုပြင်ရန်။ အာရုံခံဆဲလျ 69, 650-663 ။
MacRae, PG, Spirduso, WW, Walters, တီဂျေ, Farrar, RP နှင့် Wilcox, RE (1987) ။ presenescent အဟောင်းတွေကြွက်များတွင် striatal D2 dopamine အဲဒီ receptor binding နှင့် striatal dopamine metabolites အပေါ်ခံနိုင်ရည်လေ့ကျင့်ရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုများ။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 92, 236-240 ။
က Madden, GJ, Smethells, JR, Ewan, EE နှင့် Hursh, SR (2007a) ။ စီးပွားရေးကိုဖြည့်: ဆွေမျိုးစစ်ကူထိရောက်မှု II ၏အမူအကျင့်-စီးပွားရေးအကဲဖြတ်၏စမ်းသပ်မှု။ ဂျေ Exp ။ စအို။ ပြုမူ။ 88, 355-367 ။
က Madden, GJ, Smethells, JR, Ewan, EE နှင့် Hursh, SR (2007b) ။ စီးပွားရေးအစားထိုး: ဆွေမျိုးစစ်ကူထိရောက်မှု၏အမူအကျင့်-စီးပွားရေးအကဲဖြတ်၏စမ်းသပ်မှု။ ဂျေ Exp ။ စအို။ ပြုမူ။ 87, 219-240 ။
မာကု, မိသားစုဆရာဝန်, Blander, DS နှင့် Hoebel, BG (1991) ။ တစ်ဦးကအေးစက်လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုသင်ယူအရသာခြင်းကိုမနှစ်သက်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပြီးနောက်နျူကလိယ accumbens အတွက် extracellular dopamine လျော့နည်းစေပါသည်။ ဦးနှောက် Res။ 551, 308-310 ။
သင်္ချာ, WF, Nehrenberg, DL, Gordon ကမြင်ပါတယ်, R. , ဟွာ, K. , ပန်းကုံး, တီနှင့်ဘုန်းအသရေ, ဃ (2010) ။ ရွေးချယ်အလွန်အကျွံလေ့ကျင့်ခန်းသို့မဟုတ်အဝလွန်မှုအတွက်ရပ်ကြီးကြွက်များတွင် Dopaminergic dysregulation ။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res။ 210, 155-163 ။
လူယာ, SM, ဒေါ်, ND နှင့်ဂူ, PR စနစ် (2003) ။ မက်လုံးပေး salience များအတွက်ကွန်ပျူတာအလွှာဟာ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience။ 26, 423-428 ။
McCutcheon, je, Beeler, ဂျာနှင့် Roitman, MF (2012) ။ Sucrose-ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေကို saccharin-ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေကိုထက် သာ. ကြီးမြတ် phasic dopamine လွှတ်ပေးရန်ကျလာသော။ synapses 66, 346-351 ။
နှိမ့်ချ, TH, Eisenmann, JC နှင့်ပန်းကုံး, တီ (2010) ။ အနောက်တိုင်းအစားအစာတိုးရွေးချယ်မြင့်သောမိမိဆန္ဒအလျောက်ဘီးပြေးဘို့ရပ်ကြီးကြွက်တွေမှာ running ဘီး။ int ။ ဂျေအဝလွန်ခြင်း။ (Lond ။ ) 34, 960-969 ။
Meeusen, R. , သက်ဆိုးရှည်, ဗြဲ, Sarre, အက်စ်, De Meirleir, K. , Keizer, အိပ်ချ်, Serneels, အမ်, Ebinger, G. အများနှင့် Michotte, Y. (1997) ။ ကြွက် striatum အတွက် neurotransmitter လွှတ်ပေးရေးအပေါ်ခံနိုင်ရည်လေ့ကျင့်ရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုများ: တစ်ခု Vivo အတွက် microdialysis လေ့လာမှု။ Acta Physiol ။ Scand။ 159, 335-341 ။
Mercken, EM, Carboneau, BA, Krzysik-Walker က, SM နှင့်က de Cabo, R. (2012) ။ ကယ်လိုရီကန့်သတ်, လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့် mimetics ၏အကျိုးကျေးဇူးများ: ကြွက်နှင့်ယောက်ျား၏။ Res အိုမင်း။ ဗြာ။ 11, 390-398 ။
Middleton, အက်ဖ်အေနှင့် Strick, PL (2000) ။ Basal ganglia ထုတ်လုပ်မှုနှင့်သိမှတ်ခံစားမှု: ခန္ဓာဗေဒအမူအကျင့်များနှင့်လက်တွေ့လေ့လာမှုများအနေဖြင့်အထောက်အထား။ ဦးနှောက် Cogn။ 42, 183-200 ။
Mink, JW (1996) ။ အဆိုပါ Basal ganglia: ယှဉ်ပြိုင်မော်တာအစီအစဉ်များအာရုံစိုက်ရွေးချယ်ရေးနှင့်တားစီး။ prog ။ Neurobiol။ 50, 381-425 ။
Mogenson, GJ, ဂျုံးစ်, DL နှင့် Yim, CY (1980) ။ အဆိုပါ limbic စနစ်နှင့်ယင်းမော်တာစနစ်ကအကြားအလုပ်လုပ်တဲ့ interface ကို: လှုံ့ဆျောမှုကနေအရေးယူရန်။ prog ။ Neurobiol။ 14, 69-97 ။
မွန်တဂူ, PR စနစ်ဒါယန်း, P. နှင့် Sejnowski, တီဂျေ (1996) ။ ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် Hebbian သင်ယူမှုအပေါ်အခြေခံပြီး mesencephalic dopamine စနစ်များများအတွက်တစ်ဦးကမူဘောင်။ ဂျေ neuroscience။ 16, 1936-1947 ။
Moran, TH နှင့် Bi, အက်စ် (2006a) ။ CCK-1 receptors ချို့တဲ့ OLETF ကြွက်များတွင် Hyperphagia နှင့်အဝလွန်ခြင်း။ ဖီလို။ ဖြတ်ကျော်။ R. Soc ။ Lond ။ B က Biol ။ သိပ္ပံ။ 361, 1211-1218 ။
Moran, TH နှင့် Bi, အက်စ် (2006b) ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာရှုထောင့်: CCK1 receptors ချို့တဲ့ OLETF ကြွက်၏ Hyperphagia နှင့်အဝလွန်ခြင်း။ dev ။ Psychobiol။ 48, 360-367 ။
Morton, GJ, Blevins, je ကင်မ်, အက်ဖ်, Matsen, အမ်နှင့် Figlewicz, DP (2009) ။ အစားအစာစားသုံးမှုလျော့ချဖို့ ventral tegmental ဧရိယာ၌ leptin ၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှု jak-2 အချက်ပြအပေါ်မှီခိုသည်။ နံနက်။ ဂျေ Physiol ။ Endocrinol ။ Metab။ 297, E202-E210 ။
Morton, GJ, Cummings က DE, Baskin, DG, Barsh, GS, နှင့် Schwartz, မီဂါဝပ် (2006) ။ အစားအစာစားသုံးမှုနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်၏ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်ထိန်းချုပ်မှု။ သဘာဝ 443, 289-295 ။
Myers, MG (2004) ။ Leptin အဲဒီ receptor အချက်ပြခြင်းနှင့်နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေဇီဝြဖစ်စဉ်များစည်းမျဉ်း။ ပရိုဂရမ်မကြာမီက။ Horm ။ res။ 59, 287-304 ။
Nicola, SM (2007) ။ အဆိုပါနျူကလိယတစ်ဦး Basal ganglia အရေးယူရွေးချယ်ရေးဆားကစ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် accumbens ။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 191, 521-550 ။
တဖန်, Y. , ဒေါ်, ND, ယောလ, ဃ, နှင့်ဒါယန်း, P. (2007) ။ လုပ်သူများ dopamine: အခွင့်အလမ်းစရိတ်နှင့်တုန့်ပြန်သန်စွမ်း၏ထိန်းချုပ်မှု။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 191, 507-520 ။
Norgren, R. , Hajnal, အေနှင့် Mungarndee, အက်စ်အက်စ် (2006) ။ Gustatory ဆုလာဘ်များနှင့်နျူကလိယ accumbens ။ Physiol ။ ပြုမူ။ 89, 531-535 ။
Novak, CM, Escande, C တို့, Burghardt, PR စနစ်, Zhang က, အမ်, Barbosa, MT, Chini, မာခ်, Britton, SL, ကော့ချ်, LG Akil, အိပ်ချ်, နှင့် Levine ဂျေအေ (2010) ။ သဘောဆောင်သောလှုပ်ရှားမှု, လှုပ်ရှားမှု၏စီးပွားရေး, နှင့်မြင့်မားသောအခ်ါအေရိုးဗစ်စွမ်းရည်များအတွက်ရပ်ကြီးကြွက်များတွင်အစားအသောက်များတွင်-သွေးဆောင်အဝလွန်ခြင်းမှခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ Horm ။ ပြုမူ။ 58, 355-367 ။
Opland, DM, Leinninger, GM ကများနှင့် Myers, MGJ (2010) ။ leptin အားဖြင့် mesolimbic dopamine စနစ်၏ Modulation ။ ဦးနှောက် Res။ 1350, 65-70 ။
Ostlund, SB, Wassum, KM, မာဖီ, NP, Balleine, BW နှင့် Maidment, NT (2010) ။ striatal ငျဒသေအတွက် Extracellular dopamine အဆင့်ဆင့်ဆာအေးစက်နေစဉ်အတွင်းလှုံ့ဆျောမှုနှင့်တုံ့ပြန်မှုကုန်ကျစရိတ်အတွက်ဆိုင်းကိုခြေရာခံ။ ဂျေ neuroscience။ 31, 200-207 ။
Paffenbarger, RS, Hyde, RT ကို, Wing, AL နှင့် Hsieh က, CC ကို (1986) ။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု, All-အကြောင်းမရှိသေဆုံးမှုများနှင့်ကောလိပ်ကျောင်းကျောင်းသားဟောင်းများ၏အသက်ရှည်။ N. Engl ။ ဂျေ Med။ 314, 605-613 ။
Palmiter, RD (2007) ။ dopamine နို့တိုက်ကျွေးရေးအပြုအမူတစ်ခုဇီဝကမ္မသက်ဆိုင်ရာဖျန်ဖြေလား? ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience။ 30, 375-381 ။
ပါကင်, ဂျာ Robbins, TW နှင့် Everitt, BJ (2000) ။ အစာစားချင်စိတ်စိတ်ပိုင်းသင်ယူမှုအတွက်ဗဟိုနှင့် basolateral amygdala ၏ Dissociable အခန်းကဏ္ဍ။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience။ 12, 405-413 ။
Paton, JJ, Belova MA, Morrison, SE, နှင့် Salzman, CD ကို (2006) ။ အဆိုပါမျောက် amygdala သင်ယူနေစဉ်အတွင်းအမြင်လှုံ့ဆော်မှုများ၏အပြုသဘောဆောင်နှင့်အပျက်သဘောတန်ဖိုးကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ သဘာဝ 439, 865-870 ။
ပက်တာ, CM, Bouret, စင်ကာပူဒေါ်လာ, Dunn-Meynell, AA ကိုနှင့် Levin, (2009) BE ။ DIO ကြွက်များတွင်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်း postweaning ၏သုံးပတ်အလယ်ပိုင်း leptin sensitivity ကိုများနှင့်အချက်ပြအတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာတိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ နံနက်။ ဂျေ Physiol ။ စည်းမျဉ်းများ။ Integrated ။ comp ။ Physiol။ 296, R537-R548 ။
ပက်တာ, CM, Dunn-Meynell, AA ကိုနှင့် Levin, BE (2008) ။ အစောပိုင်း-စတင်ခြင်းစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများသုံးပတ်လေ့ကျင့်ခန်းရပ်နားခြင်းပြီးနောက် DIO ကြွက်များတွင်အဝလွန်ခြင်းခုခံရှည်။ နံနက်။ ဂျေ Physiol ။ စည်းမျဉ်းများ။ Integrated ။ comp ။ Physiol။ 294, R290-R301 ။
Peciña, အက်စ်, Cagniard, ခ, Berridge, KC, Aldridge, JW နှင့် Zhuang, X တို့မှာ (2003) ။ Hyperdopaminergic Mutant ကြွက်ချိုမြိန်ဆုလာဘ်အဘို့အမြင့်မား "လို" ဘဲ "ကဲ့သို့" ရှိသည်။ ဂျေ neuroscience။ 23, 9395-9402 ။
Pelchat, ML (2009) ။ လူသားတွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာစွဲ။ ဂျေ Nutr။ 139, 620-622 ။
Pelleymounter, အမ်, Cullen က, အမ်, ဘေကာ, အမ်, Hecht, R. , Winters, ဃ, Boon, တီနှင့် Collins, အက်ဖ် (1995) ။ ob / ob ကြွက်တွေမှာခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်စည်းမျဉ်းပေါ်တွင်အဝလွန်ဗီဇထုတ်ကုန်များ၏သက်ရောက်မှုများ။ သိပ္ပံ 269, 540-543 ။
Phillips က, Pem, Stuber, GD, Heien, MLAV, Wightman, RM, နှင့် Carelli, RM (2003) ။ Subsecond dopamine လွှတ်ပေးရေးကိုကင်းရှာအားပေးအားမြှောက်။ သဘာဝ 422, 614-618 ။
Phillips က, Pem, ဝေါ်လ်တန်, ME နှင့် Jhou, TC (2007) ။ utility ကိုတွက်ချက်: mesolimbic dopamine ခြင်းဖြင့်ကုန်ကျစရိတ်-အကျိုးအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက် preclinical သက်သေအထောက်အထား။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 191, 483-495 ။
Powell, Ke နှင့်တိုနီဘလဲ, SN (1994) ။ အထိုင်များလူနေမှုအလေ့အထများ၏ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်: သီအိုရီပေမယ့်လက်တွေ့ခန့်မှန်းချက်။ Med ။ သိပ္ပံ။ အားကစား Exerc။ 26, 851-856 ။
Quinkert, AW, Vimal, V. , Weil, ZM, Reeke, Gn, Schiff, ND, Banavar, JR နှင့် Pfaff, DW (2011) ။ ယေဘူယျ arousal ၏ quantitative ဖော်ပြချက်သည်ကျောရိုးရှိသတ္တဝါကဦးနှောက်၏မူလတန်း function ကို။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ။ 108 (ပျော့ပျောင်း။ 3), 15617-15623 ။
Rasmussen, eb, Reilly, ဒဗလျူနှင့် Hillman, C. (2010) ။ အဆိုပါမျိုးရိုးဗီဇအဝလွန် Zucker (fa / fa) ကြွက်များတွင် sucrose ဝယ်လိုအား။ ပြုမူနေ။ လုပ်ငန်းစဉ်များ 85, 191-197 ။
Redgrave, P. , Gurney, K. နှင့် Reynolds က, ဂျေ (2008) ။ phasic dopamine အချက်ပြမှုများအားဖြင့်ဘယ်အရာကိုအားဖြည့်သလဲ? ဦးနှောက် Res ။ ဗြာ။ 58, 322-339 ။
Redish, အေဒီ, Jensen, အက်စ်, ဂျွန်ဆင်, အေနှင့် Kurth-နယ်လ်ဆင်, Z. (2007) ။ ပွနျလညျသငျ့အားဖြည့်အမူအကျင့်မျိုးသုဉ်းခြင်းနှင့်သက်တမ်းတိုးနှင့်အတူမော်ဒယ်သင်ယူခြင်း: စွဲ, relapse နှင့်ပြဿနာလောင်းကစားဝိုင်းများအတွက်ဂယက်ရိုက်။ Psychol ။ ဗြာ။ 114, 784-805 ။
Reynolds က, ဖြစ်မှု, Hyland, BI နှင့် Wickens, JR (2001) ။ ဆုလာဘ်-related သင်ယူမှု၏တစ်ဦးကဆယ်လူလာယန္တရား။ သဘာဝ 413, 67-70 ။
Reynolds က, JNJ နှင့် Wickens, JR (2002) ။ corticostriatal synapses ၏ Dopamine-မှီခို plasticity ။ အာရုံကြော Netw။ 15, 507-521 ။
Ribeiro, AC, Ceccarini, G. အ, Dupré, C တို့, Friedman, JM, Pfaff, DW နှင့်မာကု, AL (2011) ။ အစားအစာ anticipatory နှင့်စုစုပေါင်း locomotor လှုပ်ရှားမှုအပေါ် leptin ၏သက်ရောက်မှုနှိုငျးယှဉျ။ PLoS ONE 6: e23364 ။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0023364
Robbins, TW နှင့်ရောဘတ်, AC အ (2007) ။ အဆိုပါ monoamines နှင့် acetylcholine အားဖြင့်နံရံပစ်ကစားနည်း-Executive function ကို၏ differential စည်းမျဉ်း။ Cereb ။ cortex 17 (ပျော့ပျောင်း။ 1), i151-i160 ။
ရောဘတ်, MD Gilpin, အယ်လ်, က Parker, Ke, ကလေး, TE, Will, MJ နှင့် Booth, အက်ဖ်ဒဗလျူ (2011) ။ နျူကလိယ accumbens အတွက် Dopamine D1 အဲဒီ receptor မော်ဂျူမြင့်မားသောအကွာအဝေးကို run ဖို့ရပ်ကြီးကြွက်များတွင်မိမိဆန္ဒအလျောက်ဘီးပြေးလျော့နည်းစေတယ်လေ။ Physiol ။ ပြုမူ။ 105, 661-668 ။
ရော်ဘင်ဆင်, TE နှင့် Berridge, KC (1993) ။ မူးယစ်ဆေးတဏှာ၏အာရုံကြောအခြေခံ: စွဲတစ်ခုမက်လုံးပေး-sensitive သီအိုရီ။ ဦးနှောက် Res ။ ဦးနှောက် Res ။ ဗြာ။ 18, 247-291 ။
ရော်ဘင်ဆင်, TE နှင့် Berridge, KC (2001) ။ မက်လုံးပေး-sensitive နှင့်စွဲလမ်း။ စှဲမွဲမှု 96, 103-114 ။
Roesch, MR, Calu, DJ သမားနှင့် Schoenbaum, G. အ (2007) ။ Dopamine အာရုံခံကွဲပြားခြားနားနှောင့်နှေးသို့မဟုတ်သုံးနိုင်ဆုလာဘ်များအကြားဆုံးဖြတ်ခြင်းကြွက်အတွက်ပိုကောင်းတဲ့ option ကိုဝှက်။ နတ်။ neuroscience။ 10, 1615-1624 ။
Roitman, MF, Stuber, GD, Phillips က, Pem, Wightman, RM, နှင့် Carelli, RM (2004) ။ Dopamine အစားအစာရှာတဲ့ subsecond modulator တွေကိုအဖြစ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ ဂျေ neuroscience။ 24, 1265-1271 ။
Roseberry, AG က, ပန်းချီဆရာ, တီ, မာကု, မိသားစုဆရာဝန်နှင့်ဝီလျံ, JT (2007) ။ leptin-လစ်လပ်ကြွက်တွေမှာ vesicular somatodendritic dopamine စတိုးဆိုင်များလျော့နည်းသွားသည်။ ဂျေ neuroscience။ 27, 7021-7027 ။
Rosenbaum, အမ်, SY, အမ်, Pavlovich, K. , Leibel, RL နှင့် Hirsch က, ဂျေ (2008) ။ Leptin အမြင်အာရုံအစားအစာလှုံ့ဆော်မှုမှဒေသဆိုင်ရာအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုတုံ့ပြန်မှုအတွက်ကိုယ်အလေးချိန်-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများနောက်ကြောင်းပြန်။ ဂျေ Clin ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ။ 118, 2583-2591 ။
Sabol, Ke, Richards, JB နှင့်လွတ်မြောက်, CR (1990) ။ Vivo အတွက် တစ်ဦးမြို့ပတ်ရထားပြေးစက်ပေါ်တွင်ဖွင့်ဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားကြွက်များတွင် dopamine နဲ့ DOPAC ၏ Dialysis တိုင်းတာ။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူ။ 36, 21-28 ။
Salamone, ဂျေ (1994) ။ နျူကလိယကြွက်များတွင် dopamine ကွယ်ပျောက်သွားစေမယ့်ဝတ္ထုကုန်ကျစရိတ် / အကျိုးအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတွက်ဆွေမျိုးတုံ့ပြန်မှုခွဲဝေထိခိုက်စေ accumbens ။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူ။ 49, 85-91 ။
Salamone, JD (2006) ။ ဟူသောဝေါဟာရကို "ဆုလာဘ်" ကိုအသုံးပြုသည်သူနောက်ဆုံးလူတစ်ဦးမီးထွက် turn ကျေးဇူးပြုပြီးကြမည်နည်း အားဖြည့်, သင်ယူမှု, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောလုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ်မှတ်ချက်။ စှဲလမျးသူ။ Biol။ 11, 43-44 ။
Salamone, JD (2007) ။ mesolimbic dopamine ၏ functions: ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားများနှင့်ပုံစံအပြောင်းအလဲလုပ် Paradigm ။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 191, 389 ။
Salamone, JD (2009) ။ Dopamine, အားထုတ်မှုများနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း: Bardgett et al အပေါ်သီအိုရီမှတ်ချက်။ (2009) ။ ပြုမူနေ။ neuroscience။ 123, 463-467 ။
Salamone, JD (2011) ။ တစ်ဦးကအားထုတ်မှုများခေတ္တခဏအတွက် accumbens အာရုံခံအဘို့အခန်းကဏ္ဍနှင့်ဆာပလုပ်ရပ်တွေကို၏ကြိုးစားအားထုတ်မှု-related ကုန်ကျစရိတ်အကဲဖြတ် (နေ့ et al အပေါ် Commentary ။ ) ။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience။ 33, 306-307 ။
Salamone, JD ကော်ရဲရား, အမ်, Farrar, အေနှင့် Mingote, SM (2007) ။ နျူကလိယ၏ကြိုးစားအားထုတ်မှု-related လုပ်ဆောင်ချက်များကို dopamine နဲ့ဆက်စပ် forebrain ဆားကစ် accumbens ။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 191, 461-482 ။
Salamone, JD ကော်ရဲရား, အမ်, Farrar, Am, Nunes, EJ နှင့် Pardo, အမ် (2009a) ။ Dopamine, အမူအကျင့်ဘောဂဗေဒနှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှု။ တပ်ဦး။ ပြုမူနေ။ neuroscience။ 3: 13 ။ Doi: 10.3389 / neuro.08.013.2009
Salamone, JD, Farrar, Am, စာလုံး, အယ်လ်, Patel က, V. , Schlar, DE, Nunes, EJ, Collins, LE နှင့် Sager, TN (2009b) ။ dopamine D1 ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း၏ကြိုးစားအားထုတ်မှု-related သက်ရောက်မှုအပေါ် adenosine A2 နှင့် A2A ရန်အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များ Differential ။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res။ 201, 216-222 ။
Salamone, JD ကော်ရဲရား, အမ်, Mingote, SM နှင့် Weber, SM (2005) ။ အကျိုးကိုယူဆချက်ထက်ကျော်လွန်: နျူကလိယ၏အခြားရွေးချယ်စရာလုပ်ဆောင်ချက်များကို dopamine accumbens ။ Curr ။ Opin ။ Pharmacol။ 5, 34-41 ။
Salamone, JD, ဝမ်းကွဲ, MS, McCullough, ld, Carriero, DL နှင့် Berkowitz, RJ (1994) ။ နျူကလိယအစားအစာမဟုတ်အခမဲ့အစားအစာစားသုံးမှုအဘို့အနှိပ်ဆာလီဗာစဉ်အတွင်း dopamine လွှတ်ပေးရန်တိုး accumbens ။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူ။ 49, 25-31 ။
Salamone, JD, ဝမ်းကွဲ, က MS နှင့် Snyder, BJ (1997) ။ နျူကလိယ၏အမူအကျင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကို dopamine accumbens: အ anhedonia အယူအဆနှင့်အတူပင်ကိုယ်မူလနှင့်အယူအဆရေးရာပြဿနာများကို။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗြာ။ 21, 341-359 ။
Salamone, JD, Steinpreis, RE, McCullough, ld, စမစ်, P. , Grebel, ဃ, နှင့်မာဟန်, K. (1991) ။ Haloperidol နှင့်နျူကလိယတို့စားစရာဘို့နှိပ် dopamine လျော့ကျဖိနှိပ်လီဗာ accumbens သို့သော်ဝတ္ထုအစားအစာရွေးချယ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတွက်အခမဲ့အစားအစာစားသုံးမှုတိုးမြှင့်။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 104, 515-521 ။
Salamone, ဂျေ, Wisniecki, အေနှင့် Carlson, ခ (2001) ။ နျူကလိယ dopamine တွေပျက်စီးမှုမြင့်မားသော fixed အချိုးလိုအပ်ချက်များမြင့်မားထိခိုက်မခံတဲ့တိရိစ္ဆာန်များလုပ်ပေမယ့်မူလတန်းအစားအစာအားဖြည့်အယှက်မပေးပါဘူး accumbens ။ neuroscience 105, 863-870 ။
Samorajski, တီ, အန်တိုနီ, C တို့, Durham, အယ်လ်, Ordy, JM, ဂျွန်ဆင်, ဂျာနှင့် Dunlap, WP (1985) ။ အသက်ရှည်အပေါ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်း, ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်, locomotor စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် C57BL / 6J ကြွက်၏ passive-ရှောင်ရှားခြင်းမှတ်ဉာဏ်၏အကျိုးသက်ရောက်။ Neurobiol ။ အိုမင်း 6, 17-24 ။
Saper, သမဝါယမ, Chou, TC နှင့် Elmquist, JK (2002) ။ စား၏ homeostatic နှင့် hedonic ထိန်းချုပ်မှု: အစာကျွေးရန်လိုအပ်ကြောင်း။ အာရုံခံဆဲလျ 36, 199-211 ။
Schultz, ဒဗလျူ (2002) ။ dopamine နဲ့ဆုလာဘ်နှင့်အတူတရားဝင်ရယူခြင်း။ အာရုံခံဆဲလျ 36, 241-263 ။
Schultz, ဒဗလျူ (2007) ။ ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်သင်တန်းများမှာအကွိမျမြားစှာ dopamine လုပ်ဆောင်ချက်များကို။ Annu ။ ဗျာ neuroscience။ 30, 259-288 ။
Schultz, ဒဗလျူ (2010) ။ ဆုလာဘ်တန်ဖိုးနှင့်အန္တရာယ်အဘို့အ Dopamine အချက်ပြမှုများ: အခြေခံများနှင့်မကြာသေးမီဒေတာ။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Funct။ 6, 24 ။
Schultz, ဒဗလျူဒါယန်း, P. နှင့်ဂူ, PR စနစ် (1997) ။ ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်တစ်ခုအာရုံကြောအလွှာဟာ။ သိပ္ပံ 275, 1593-1599 ။
Sedelis, အမ်, Hofele, K. , Auburger, GW, မော်ဂန်, အက်စ်, Huston, JP နှင့် Schwarting, RK (2000) ။ MPTP မောက်အတွက်လွယ်ကူစွာထိခိုက်: အမူအကျင့်, neurochemical နှင့်ကျား, မများနှင့် strain ခြားနားချက်များ histological ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ပြုမူနေ။ မျိုးရိုးဗီဇ။ 30, 171-182 ။
Sesack, SR နှင့်တော်ကကျေးဇူး, AA ကို (2010) ။ Cortico-Basal Ganglia ဆုလာဘ်ကွန်ယက်ကို: microcircuitry ။ Neuropsychopharmacology 35, 27-47 ။
Sipols, AJ, Stuber, GD, Klein, SN, Higgins, က MS နှင့် Figlewicz, DP (2000) ။ အင်ဆူလင်နှင့် raclopride sucrose ဖြေရှင်းချက်၏ရေတိုရေရှည်စားသုံးမှုကိုလျော့ချဖို့ပေါင်းစပ်။ Peptides 21, 1361-1367 ။
တောင်ပိုင်း, တီ, နှင့် Huang, X.-F. (2007) ။ high-ဆီအစားအသောက်ထိတွေ့ dopamine D2 receptor တိုးပွါးနှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine Transporter အဲဒီ receptor စည်းနှောင်သိပ်သည်းဆလျော့နည်းစေခြင်းနှင့်ကြွက်များ၏ putamen caudate ။ Neurochem ။ res။ 33, 598-605 ။
တောင်ပိုင်း, တီ, Westbrook, အက်ဖ်နှင့်မောရစ်, MJ (2012) ။ အာရုံကြောနှင့် Chow ကနေအရေးပါတယ်လို့အစားအသောက်များတွင်ကြွက် Chow နှင့်အမှီဖို့အရေးပါတယ်လို့အစားအစာကနေအဝလွန်ကြွက်ရွှေ့ပြောင်း၏စိတ်ဖိစီးမှု related ဆိုးကျိုးများ။ Physiol ။ ပြုမူ။ 105, 1052-1057 ။
Surmeier, DJ သမား, Ding, ဂျေ, နေ့, အမ်, ဝမ်, Z. နှင့် Shen, ဒဗလျူ (2007) ။ striatal အလတ်စား spiny အာရုံခံအတွက် striatal glutamatergic အချက်ပြ၏ D1 နှင့် D2 dopamine-receptor မော်ဂျူ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience။ 30, 228-235 ။
Sutton, RS, နှင့် Barto, AG က (1998) ။ စစ်ကူသင်ယူဖို့နိဒါန်း။ ကင်းဘရစ်, MA: MIT ကနှိပ်ပါ။
တေလာ, JR နှင့် Robbins, TW (1986) ။ နျူကလီးယပ် accumbens ၏, ဒါပေမယ့်မ caudate နျူကလိယ၏ 6-Hydroxydopamine ကိုတွေ့ရှိရပါသည်, အချင်းချင်းအပြန်အလှန် accumbens ဃ-စိတ်ကြွဆေးထုတ်လုပ်ဆုလာဘ်-related လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူတုံ့ပြန်တိုးမြှင့် attenuate ။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 90, 390-397 ။
Tindell, AJ, Berridge, KC, Zhang က, ဂျေ, Peciña, အက်စ်နှင့် Aldridge, JW (2005) ။ Ventral pallidal အာရုံခံကုဒ်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှု: mesolimbic ထိခိုက်စေစိတ်ကြွဆေးများကချဲ့ထွင်။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience။ 22, 2617-2634 ။
Trinko, R. , Sears, RM, Guarnieri, DJ သမားနှင့် DiLeone, RJ (2007) ။ အဝလွန်ခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲအခြေခံအာရုံကြောယန္တရားများ။ Physiol ။ ပြုမူ။ 91, 499-505 ။
Ugrumov, သင်္ဘော MV, Saifetyarova, JY, Lavrentieva, AV စနစ်နှင့် Sapronova, AY (2012) ။ dopamine ၏လျှို့ဝှက်ချက်: တစ်ခု endocrine ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုအဖြစ်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲ။ Mol ။ cell ။ Endocrinol။ 348, 78-86 ။
ဗန်က de အမှတ်တရ, အီး, Leshan, R. , Xu, AW, Balthasar, N. , Coppari, R. , လျူ, SM, Jo, YH, Mackenzie, RG, Allison, DB, ဒွန်း, NJ, Elmquist, ဂျေ , ဝယျလျ, BB, Barsh, GS, က de Lucas, C တို့, Myers, MG ဂျူနီယာ Schwartz, GJ နှင့်က Chua, SC ဂျူနီယာ (2008) ။ leptin အဲဒီ receptor ၏စုပေါင်းနှင့်တစ်ဦးချင်းစီရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဇီဝြဖစ်ခြင်းနှင့်စားသုံးမိပါထိန်းချုပ်အာရုံခံ modulated ။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ် 149, 1773-1785 ။
Vanina, Y. , Podolskaya, အေ, Sedky, K. , Shahab, အိပ်ချ်, Siddiqui, အေ, Munshi, အက်ဖ်နှင့် Lippmann, အက်စ် (2002) ။ psychopharmacology နှင့်ဆက်စပ်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်အပြောင်းအလဲများကို။ Psychiatric ။ စားသုံးခြင်း။ 53, 842-847 ။
Viggiano, ဃ (2008) ။ အဆိုပါ hyperactive syndrome ရောဂါ: မျိုးရိုးဗီဇကိုပြောင်းလဲ၏ metanalysis, locomotor လှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်ပေးသော pharmacological ကုသမှုနှင့်ဦးနှောက်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res။ 194, 1-14 ။
Volkow, ND, မုဆိုး, JS နှင့်ဝမ်, GJ (2002) ။ လူသားများတွင်မူးယစ်ဆေးအားဖြည့်ခြင်းနှင့်စွဲလမ်းအတွက် dopamine ၏အခန်းက္ပ: ပုံရိပ်လေ့လာမှုများကနေရလဒ်တွေကို။ ပြုမူနေ။ Pharmacol။ 13, 355-366 ။
Volkow, ND, ဝမ်, GJ နှင့် Baler, RD (2010) ။ ဆုလာဘ်, dopamine နှင့်အစားအစာစားသုံးမှု၏ထိန်းချုပ်မှု: အဝလွန်မှုအတွက်ဂယက်ရိုက်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Cogn ။ သိပ္ပံ။ 15, 37-46 ။
Volkow, ND နှင့်ပညာရှိ, RA (2005) ။ ဘယ်လိုမူးယစ်ဆေးစွဲကျွန်တော်တို့ကိုအဝလွန်ခြင်းကိုနားလည်ကူညီပေးနိုငျသနညျး နတ်။ neuroscience။ 8, 555-560 ။
Vucetic, Z. နှင့် Reyes, TM အလိုအလျောက် (2010) ။ ဗဟို dopaminergic circuitry အစားအစာစားသုံးမှုနှင့်ဆုလာဘ်ကိုထိန်းချုပ်: အဝလွန်၏စည်းမျဉ်းများအတွက်ဂယက်ရိုက်။ Wiley Interdiscip ။ ဗျာ Syst ။ Biol ။ Med။ 2, 577-593 ။
Wagner, ဂျေ (2005) ။ အဆိုပါအားဖြည့်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်ကြွက်များအတွက်ဘီးပြေး၏အကြိုး aftereffect: နှစ်ခု Paradigm ပေါင်းစပ်။ ပြုမူနေ။ လုပ်ငန်းစဉ်များ 68, 165-172 ။
ဝမ်, GJ, Volkow, ND, Logan, ဂျေ, Pappas, ရော်ဘာ, Wong, မှန် CT, Zhu, ဒဗလျူ, Netusil, N. နှင့်မုဆိုး, JS (2001a) ။ ဦးနှောက် dopamine နှင့်အဝလွန်ခြင်း။ ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet 357, 354-357 ။
ဝမ်, ဂျေ, Obici, အက်စ်, မော်ဂန်, K. , Barzilai, N. , Feng တို့, Z. နှင့် Rossetti, အယ်လ် (2001b) ။ လျှင်မြန်စွာ Overfeeding leptin နှင့်အင်ဆူလင်ကိုခုခံဖြစ်ပေါ်သည်။ ဆီးချိုရောဂါ 50, 2786-2791 ။
ဝမ်, G.-J. , Volkow, ND, Thanos, PK များနှင့်မုဆိုး, JS (2004) ။ အဝလွန်ခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲအကြားတူညီ neurofunctional ပုံရိပ်တို့ကအကဲဖြတ်အဖြစ်: တစ် concept ကိုပြန်လည်သုံးသပ်။ ဂျေစွဲ။ dis။ 23, 39-53 ။
Warburton, DER, Nicole, CW နှင့် Bredin, SSD ကို (2006) ။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကို: အသက်သေအထောက်အထား။ CMAJ 174, 801-809 ။
ဝီ, RA, Aragona, BJ, Fuhrmann, ka, ဂျုံးစ်, JL, နေ့, JJ, Cacciapaglia, အက်ဖ်, Wightman, RM, နှင့် Carelli, RM (2011) ။ ကိုကင်းတွေကိုဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်ထဲမှာ context-မှီခိုဆိုင်းဆန့်ကျင်မောင်းထုတ်။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 69, 1067-1074 ။
ဝီလျံ, G. အ, Bing, C တို့, Cai, XJ, Harrold, ဂျာဘုရင်, PJ နှင့်လျူ, XH (2001) ။ အဆိုပါ hypothalamus နှင့်စွမ်းအင် homeostasis ၏ထိန်းချုပ်မှု: ကွဲပြားခြားနားသောဆားကစ်, ကွဲပြားခြားနားသောရည်ရွယ်ချက်။ Physiol ။ ပြုမူ။ 74, 683-701 ။
Wilson က, WM နှင့် Marsden,, CA (1995) ။ ပြေးစက်ပြေးစဉ်အတွင်းကြွက်၏နျူကလိယ accumbens အတွက် Extracellular dopamine ။ Acta Physiol ။ Scand။ 155, 465-466 ။
ပညာရှိ RA (2004) ။ Dopamine, သင်ယူမှုနှင့်လှုံ့ဆျောမှု။ နတ်။ ဗျာ neuroscience။ 5, 483-494 ။
ပညာရှိ RA (2009) ။ ဆုလာဘ်များနှင့်စွဲလမ်းအတွက် nigrostriatal-မဟုတ်ရုံ mesocorticolimbic-dopamine များအတွက်အခန်းကဏ္ဍ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience။ 32, 517-524 ။
ပညာရှိ RA, Spindler, ဂျေ, က de ကျေး, အိပ်ချ်, နှင့် Gerberg, GJ (1978) ။ ကြွက်များတွင် Neuroleptic-သွေးဆောင် "anhedonia": အစားအစာ pimozide လုပ်ကွက်ဆုလာဘ်အရည်အသွေးကို။ သိပ္ပံ 201, 262-264 ။
Xu, အမ်, Hu, XT, Cooper က, DC က, Moratalla, R. , Graybiel, Am, အဖြူရောင်, FJ နှင့် Tonegawa ကအက်စ် (1994) ။ dopamine D1 အဲဒီ receptor Mutant ကြွက်တွေမှာကင်း-သွေးဆောင် hyperactivity နှင့် dopamine-mediated neurophysiological သက်ရောက်မှုများပပျောက်ရေး။ ကလာပ်စည်း 79, 945-955 ။
ယန်, HS, Shimomura, K. , Vitaterna, MH နှင့် Turek, အက်ဖ်ဒဗလျူ (2012) ။ ကြွက်တွေမှာမိမိဆန္ဒအလျောက်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကိုထိန်းညှိတဲ့ဝတ္ထုမျိုးဗီဇ locus ၏ high-resolution မြေပုံ။ မျိုးဗီဇဦးနှောက်ပြုမူနေ။ 11, 113-124 ။
ယဉ်, နာရီနှင့် Knowlton, BJ (2006) ။ အလေ့အထဖွဲ့စည်းရေးအတွက် Basal ganglia ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ နတ်။ ဗျာ neuroscience။ 7, 464-476 ။
ယဉ်, နာရီ, Ostlund, SB နှင့် Balleine, BW (2008) ။ ဆုလာဘ်-guided နျူကလီးယပ်အတွက် dopamine ကျော်လွန်သင်ယူခြင်း accumbens: cortico-Basal ganglia ကွန်ရက်များ၏သမာဓိလုပ်ဆောင်ချက်များကို။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience။ 28, 1437-1448 ။
လူငယ်တို့, JW, Goey, AKL, Minassian, အေ, ပယ်ရီ, ဒဗလျူ, Paulus, အမတ်နှင့် Geyer, MA (2010) ။ စိတ်ကြွရောဂါကိုနောက်ကောက်တစ်ဦး mouse ကိုမော်ဒယ်အဖြစ် GBR 12909 အုပ်ချုပ်ရေး: Manic အပြုအမူများ၏အရေအတွက်အကဲဖြတ်န်းမှာ။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 208, 443-454 ။
Zachwieja, JJ, Hendry, SL, Smith က SR နှင့် Harris က, RB (1997) ။ မိမိဆန္ဒအလျောက်ဘီးပြေး Osborne-Mendel ကြွက်များတွင် leptin mRNA ၏ adipose တစ်ရှူးအစုလိုက်အပြုံလိုက်နှင့်စကားရပ်လျော့နည်းစေပါသည်။ ဆီးချိုရောဂါ 46, 1159-1166 ။
Zheng, အိပ်ချ်, နှင့် Berthoud, H.-R. (2007) ။ အပျော်အပါးသို့မဟုတ်ကယ်လိုရီအဘို့အစာစားခြင်း။ Curr ။ Opin ။ Pharmacol။ 7, 607-612 ။
Zheng, အိပ်ချ်, Lenard အဆိုအရ, ရော်ဘာ, ရှင်, AC အများနှင့် Berthoud, H.-R. (2009) ။ အစာစားချင်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်နှင့်ခေတ်သစ်ကမ္ဘာကြီးထဲမှာစွမ်းအင်ဟန်ချက်စည်းမျဉ်း: ဆုလာဘ်-မောင်းထုတ်ဦးနှောက်တှေအမြားကွီးအချက်ပြမှုများကိုပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်သည်။ int ။ ဂျေအဝလွန်ခြင်း။ (Lond ။ ) 33 (ပျော့ပျောင်း။ 2), S8-S13 ။
Zhuang, X တို့မှာ, Oosting, RS, ဂျုံးစ်, SR, Gainetdinov, RR, Miller က GW, caron, MG နှင့် Hen, R. (2001) ။ hyperdopaminergic ကြွက်တွေမှာ Hyperactivity နှင့်ချို့ယွင်းတုံ့ပြန်မှုလေ့။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ။ 98, 1982-1987 ။
keywords: ဆုလာဘ်, စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှု, dopamine, Basal ganglia, မက်လုံးပေး-salience, ကုန်ကျစရိတ် sensitivity ကို, ကြိုးစားအားထုတ်မှု, စူးစမ်း-exploit
ကိုးကား: Beeler ဂျာဖရေဇီယာ CRM နှင့် Zhuang မှာ X (2012) တစ်ဦးဘတ်ဂျက်အပေါ်အလိုဆန္ဒခြင်း: dopamine နှင့်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်, ပွနျလညျသငျ့ဆုလာဘ်နှင့်အရင်းအမြစ်များ။ တပ်ဦး။ Integrated ။ neuroscience. 6: 49 ။ Doi: 10.3389 / fnint.2012.00049
Received: 30 ဧပြီလ 2012; လက်ခံခဲ့သည်: 02 ဇူလိုင်လ 2012;
အွန်လိုင်း Published: 20 ဇူလိုင်လ 2012 ။
ယောဟန်သည်ဂျေ Foxe, ဆေးပညာ, အမေရိကန်နိုင်ငံ၏အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်းကောလိပ်
သောမတ်စ်အေ Stalnakerဆေးပညာ Baltimore, အမေရိကန်နိုင်ငံ၏, တက္ကသိုလ်မေရီလန်း၏ကျောင်း
ယောဟနျသဃ Salamoneတက္ကသိုလ် Connecticut, အမေရိကန်နိုင်ငံ၏
2012 Beeler, ဖရေဇီယာနှင့် Zhuang ©မူပိုင်။ ဒါက၏စည်းကမ်းချက်များအောက်မှာဖြန့်ဝေထားတဲ့ Open-access ကိုဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည် ကို Creative Commons Attribution လိုင်စင်အခြားဖိုရမ်များအတွက်အသုံးပြုခြင်း, ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်မျိုးပွားခွင့်ပြုထားတဲ့, မူရင်းစာရေးဆရာများနှင့်အရင်းအမြစ်အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်စသည်တို့ကိုမဆို Third-party ဂရပ်ဖစ်ကိုရည်မှတ်မဆိုမူပိုင်သတိပေးချက်များမှဘာသာရပ်နေကြသည်ပေးအပ်
* ပေးစာယူ: Jeff အေ Beeler, Neurobiology ဌာန, ချီကာဂိုတက္ကသိုလ်, 924 အီး 57th စိန့် R222, ချီကာဂို, IL 60637, USA ။ e-mail,: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]